प्रस्थान – 2माछा
घर / बाइबल / पुरानो नियमका / प्रस्थान
1:1 यी इस्राएलका छोराहरू नाम हो, जो याकूबसित मिश्र गए. तिनीहरूले प्रवेश, आफ्नो घर संग प्रत्येक एक:
1:2 Reuben, शिमोन, लेवी, यहूदाका,
1:3 Issachar, Zebulun, र बिन्यामीन,
1:4 दान र Naphtali, गाद र आशेर.
1:5 त्यसैले, सबै याकूबको जांघ देखि गयो गर्नेहरूको प्राण सत्तरी थिए. अब यूसुफले मिश्र थियो.
1:6 उहाँले मृत्यु भएको थियो जब, आफ्ना भाइहरूलाई सबै र सबै कि पुस्ता को साथ,
1:7 इस्राएलका छोराहरू वृद्धि, र तिनीहरूले बिरुवा जस्तै गुणन. र अति बलियो गरिएको होने, तिनीहरूले भूमि भरिएको.
1:8 यसैबीच, मिश्र भन्दा नयाँ राजा त्यहाँ खडा, जो यूसुफका नजान्ने थियो.
1:9 र उहाँले आफ्नो मान्छे भने: "हेर, इस्राएलका छोराहरू मान्छे धेरै छन्, र तिनीहरूले हामी भन्दा बलिया छन्.
1:10 आउनुहोस्, हामीलाई बुद्धिमानीपूर्वक तिनीहरूलाई दमन गरौं, तिनीहरूले गुणा नत्र; र कुनै पनि युद्ध हामी विरुद्ध अग्रिम गर्नुपर्छ भने, तिनीहरूले हाम्रो शत्रु थपियो हुन सक्छ, र हामी विरुद्ध लडे भएको, तिनीहरूले भूमि देखि विदा हुन सक्छ। "
1:11 र त्यसैले तिनले काम मालिकको तिनीहरूलाई भन्दा सेट, क्रममा बोझबाट तिनीहरूलाई दुर्व्यवहार र अन्याय सहनु गर्न. र तिनीहरूले tabernacles को शहर फिरऊनले लागि निर्मित: Pithom र Raamses.
1:12 र थप तिनीहरूले थिचोमिचो, त्यसैले धेरै तिनीहरूले गुणन र वृद्धि गर्नुभयो.
1:13 र मिश्रीहरूले इस्राएलको छोराहरू घृणा, र तिनीहरूले दुःख र तिनीहरूलाई mocked.
1:14 र तिनीहरूले तीता मा सिधै आफ्नो जीवन नेतृत्व, माटो र इट्टा कडा परिश्रम साथ, र servitude सबै प्रकारका साथ, त्यसैले तिनीहरू देशमा कामहरू संग बढ्तै थिए.
1:15 त्यसपछि मिश्र राजा हिब्रूहरूलाई को midwives कुरा, (एक जसलाई एक भनिन्थ्यो Shiphrah, अर्को Puah)
1:16 तिनीहरूलाई instructing: "जब तपाईं हिब्रू महिला एक सुडेनी रूपमा कार्य गर्नेछ, र वितरण को समय आइपुगेको छ: यो पुरुष छ भने, मृत्यु यसलाई राख्नु; यो महिला छ भने, यसलाई राख्ने। "
1:17 तर midwives परमेश्वरको मानिसहरू डराउँदैनन्, र त्यसैले तिनीहरू मिश्र को राजाको precept अनुसार कार्य गरेनन्, तर तिनीहरू सुरक्षित गर्ने पुरुषहरु राखिएको.
1:18 र तिनीहरूलाई summoning, राजाले भने, "के तपाईं के अभिप्राय गर्नुभयो, त्यसैले तपाईंलाई केटाहरू सुरक्षित भनेर?"
1:19 तिनीहरूले प्रतिक्रिया: "हिब्रू महिला मिश्री महिलाहरु चाहनुहुन्छ छैन. तिनीहरू एक सुडेनी को बुद्धि छ लागि, र त्यसैले तिनीहरू हामी तिनीहरूलाई आउन अघि जन्म दिन। "
1:20 त्यसैले, परमेश्वरले midwives तिर तिनीबारे राम्रो काम गरे. र मान्छे वृद्धि, र तिनीहरूले अति बलियो थियो.
1:21 र midwives परमेश्वरको मानिसहरू डराउँदैनन् किनभने, उहाँले तिनीहरूलाई लागि घरहरू निर्माण.
1:22 त्यसैले, फिरऊनले आफ्ना सबै मानिसहरूलाई निर्देशन, यसो: "जे पुरुष सेक्स को पैदा हुनेछ, नदी यसलाई डाली; जो महिला सेक्स को पैदा हुनेछ, यसलाई राख्ने। "
2:1 यी कुराहरू गरेपछि, लेवी को घर देखि एक मानिस बाहिर गए, र उसले आफ्नो स्टक देखि एक पत्नी लिए.
2:2 र त्यो गर्भवती र एक छोरा जन्माइन्. र उसलाई देखेर सुन्दर हुन, त्यो तीन महिनाको लागि उहाँलाई लुकेको.
2:3 र जब त्यो अब उहाँलाई लुकाउन सक्षम थियो, त्यो bulrushes को बुना एउटा सानो टोकरी लिएर, र त्यो यो पिच संग टार रूपमा साथै गंदा. र त्यो भित्र सानो शिशु राखिएको, र त्यो नदी को बैंक द्वारा sedges उहाँलाई राखे.
2:4 एक दूरी मा आफ्नो बहिनी खडा भएको थियो र हुनेछ के सोच थियो.
2:5 त्यसपछि, हेर, फिरऊनकी छोरीको नदी मा धुन descended. र उनको नौकरानियां को Cove को किनारा साथ हिंडे. र त्यो papyruses बीचमा सानो टोकरी देखेका थिए जब, त्यो यसको लागि उनको सेवकहरूको एक पठाइएको. र जब यो ल्याइयो,
2:6 त्यो यो खोलियो; र यो भित्र कि साकार एक सानो एक रो थियो, तिनले उसलाई मा दया, र त्यो भने: "यो हिब्रू को शिशुहरू को छ।"
2:7 र केटा को बहिनी उसलाई भन्नुभयो: "यदि तिमि चाहन्छौ भने, म जाने र हिब्रू महिला तपाईंलाई कल गर्नेछ, जो सक्षम नर्स शिशु हुनेछ। "
2:8 त्यो प्रतिक्रिया, "जानुहोस्।" द दासी सीधा भयो र उनको आमा भनिन्छ.
2:9 र फिरऊनकी छोरीको उसलाई भन्नुभयो: "यो केटो लिनुहोस् र मेरो लागि उसलाई नर्स. म तपाईं आफ्नो ज्याला दिनेछु। "स्त्रीले लिए र केटा स्याहारसुसार. र उहाँले परिपक्व हुँदा, त्यो फिरऊनकी छोरीको उसलाई वितरण.
2:10 र त्यो एक छोरा ठाउँमा उहाँलाई अपनाए, र त्यो आफ्नो नाम मोशाले भनिन्छ, यसो, "किनभने म पानी देखि उहाँलाई लगे।"
2:11 ती दिनहरुमा, मोशाले हुर्केका थिए पछि, उहाँले आफ्ना भाइहरूलाई बाहिर गए. र उहाँले देखे आफ्नो कष्ट र मिश्री मानिसले हिब्रू को एक निश्चित एक स्ट्राइकिङ्, आफ्ना भाइहरूलाई.
2:12 र उहाँले यसरी वरिपरि र देख्यो थियो जब, र नजिकका कुनै एक देखेका थिए, उहाँले मिश्री तल प्रहार र बालुवा उहाँलाई लुकेको.
2:13 र अर्को दिन बाहिर जा, उहाँले भेट्यो दुई हिब्रू हिंसापुर्वक quarreling. र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो जो चोट पैदा भएको थियो, "तिमी किन आफ्नो छिमेकीलाई प्रहार गर्छन्?"
2:14 तर उहाँले जवाफ: "कसले हामीलाई नेता र न्यायाधीश रूपमा नियुक्त? तिमी मलाई मार्न चाहनुहुन्छ, बस हिजो रूपमा मिश्री हत्या?"मोशाले डर थियो, र, उहाँले भन्नुभयो, "यो शब्द कसरी ज्ञात भएको छ?"
2:15 र फिरऊनलाई यो कुरा सुने, र उहाँले मोशालाई मार्न खोजे. तर आफ्नो दृष्टि भाग्न, उहाँले मिद्यानमा देशमा बसे, र त्यो एक राम्रो गर्न अर्को बस्नुभयो.
2:16 अब त्यहाँ सात छोरी संग मिद्यानमा पूजाहारी थिए, जो पानी आकर्षित गर्न आए. र troughs भरिएको होने, तिनीहरूले बुबाको बगाल पानी चाहन्छन्.
2:17 गोठालाहरू तिनीहरूलाई overcame र तिनीहरूलाई टाढा चलाए. मोशाले उठेर, र बालिका रक्षा, उहाँले आफ्नो भेडा पानी हाले.
2:18 र तिनीहरूले बुबा फर्के थियो जब, रूएलका, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "तपाईं किन सामान्य भन्दा ढिलो आइपुगे छ?"
2:19 तिनीहरूले प्रतिक्रिया: "मिश्र एक मानिस गोठालाहरू हातमा हामीलाई छुटकारा. यसबाहेक, उहाँले पनि हामीलाई साथ पानी थुतेर पिउन भेडा दिनुभयो। "
2:20 तर उहाँले भन्नुभयो: "उ कहाँ छ? किन मानिस खारेज छ? उसलाई बोलाऊ, ताकि उहाँले रोटी खान सक्छन्। "
2:21 त्यसैले, मोशाले उसलाई बस्न भनेर कसम खाएँ. र उहाँले आफ्नो छोरी Zipporah एक पत्नी रूपमा स्वीकार.
2:22 र तिनले उसलाई एउटा छोरा जन्माइन्, जसलाई उहाँले Gershom भनिन्छ, यसो, सत्य मा "म विदेशी भूमिमा एक नव आगन्तुक गरिएको छ।", त्यो अर्को जन्माई, जसलाई उहाँले एलीएजर भनिन्छ, यसो, "मेरो बुबा परमेश्वर लागि, मेरा सहायक, फिरऊनले को हात बाट मलाई उद्धार गरेको छ। "
2:23 सत्य मा, लामो समय पछि, मिश्र राजा मरेको थियो. र इस्राएलका छोराहरू, विलाप, किनभने काम कराए. र आफ्नो कराउँदै कामहरू देखि परमेश्वरको जानुभयो.
2:24 र उहाँले तिनीहरूको सुस्केरा सुन्नुभयो, र त्यो पनि उहाँले अब्राहामसित गठन जो करार सम्झना, इसहाक, र याकूब.
2:25 र प्रभु इस्राएलका छोराहरू मा अनुमोदन संग देख्यो, र उहाँले तिनीहरूलाई थाह थियो.
3:1 अब मोशाले आफ्नो ससुरा Jethro को भेडा pasturing थियो, मिद्यानमा पूजाहारी. र त्यो मरुभूमि को भित्री मा बगालको संचालित थियो जब, उहाँले परमेश्वरको पर्वतमा आए, Horeb.
3:2 र प्रभु एक झाडी बीचमा देखि आगो को एक ज्वाला उहाँलाई देखियो. र त्यो झाडी जल र जल थिएन थियो देखे.
3:3 त्यसैले, मोशाले भने, "म जाने र यो ठूलो दृष्टि देख्ने, बुश किन जल छैन। "
3:4 त्यसपछि प्रभु, उहाँले यो हेर्न मा दीं समझदार कि, बुश को बीचमा देखि उहाँलाई भनिन्छ, र, उहाँले भन्नुभयो, "मोशाले, मोशाले। "अनि उहाँले जवाफ, "म यहा छु।"
3:5 अनि उहाँले भन्नुभयो: "नत्र तपाईं यहाँ गर्नुपर्छ, आफ्नो खुट्टा देखि जूता हटाउन. जो मा तपाईं खडा स्थानका लागि पवित्र भूमि हो। "
3:6 अनि उहाँले भन्नुभयो, "म आफ्नो बुबाको परमेश्वर हुँ: अब्राहामको परमेश्वर, इसहाक परमेश्वर, र याकूब। "मोशाको परमेश्वरले आफ्नो अनुहार लुकाए, लागि परमेश्वरको मा सिधै हेर्न छैन dared.
3:7 अनि प्रभु उहाँलाई भने: "म मिश्र मेरो मान्छे को कष्ट देखेको छु, र म किनभने काम भन्दा भएकाहरूलाई को harshness आफ्नो पुकारा सुनेको छु.
3:8 र आफ्नो शोक थाह, म मिश्रीहरूका हातबाट तिनीहरूलाई मुक्त गर्न descended छ, र एक असल र विशाल भूमिमा कि भूमि तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्न, दूध र मह संग बग्छ जो एक भूमिमा, कनानी को ठाउँमा, र हित्ती, र एमोरी, र Perizzite, र Hivite, र Jebusite.
3:9 अनि त, इस्राएलका छोराहरू पुकारा मलाई आएको छ. र म आफ्नो कष्ट देखेको छु, जो संग तिनीहरूले मिश्रीहरूले द्वारा शोषित छन्.
3:10 तर आउन, र म फिरऊनलाई तपाईं पठाउने, त्यसैले तिमी मेरो मानिसहरूलाई नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने, इस्राएलका छोराहरू, मिश्र बाहिर। "
3:11 मोशाले परमेश्वरलाई यसो भने, "कसले म फिरऊनलाई जाने र म मिश्र बाहिर इस्राएलका छोराहरू नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने पर्छ भनेर म हुँ?"
3:12 अनि उहाँले उसलाई भन्नुभयो: "म तिमीसंग हुन्छु. र तपाईं म पठाएको छ कि चिन्ह रूपमा यो हुनेछ: जब तपाईं मिश्र बाहिर मेरो मान्छे ल्याए हुनेछ, तपाईं यो पहाड मा परमेश्वरको बलिदानको प्रस्ताव गर्नेछ। "
3:13 मोशाले परमेश्वरलाई यसो भने: "हेर, म इस्राएलका छोराहरू जानेछन्, र म तिनीहरूलाई भन्न हुनेछ, तिनीहरूले मलाई भन्न भने 'तपाईंको पुर्खाहरूले परमेश्वरले तपाईं मलाई पठाएको छ।', 'उसको नाम के हो?'म तिनीहरूलाई के भनौं?"
3:14 परमेश्वरले मोशालाई भन्नुभयो, "म कसले AM हुँ।" उहाँले भन्नुभयो: "त्यसैले तपाईं इस्राएलका छोराहरूलाई भनौं: 'जसले तपाईं मलाई पठाउनुभएको छ छ।' "
3:15 र परमेश्वरले मोशालाई फेरि भन्नुभयो: "त्यसैले तपाईं इस्राएलका छोराहरूलाई भनौं: आफ्नो बाबु को 'प्रभु परमेश्वरको, अब्राहामको परमेश्वर, इसहाक परमेश्वर, र याकूबका परमेश्वर, तपाईं मलाई पठाएको छ। 'यो नाम मेरो लागि सदाको छ, र यो पुस्ता देखि पुस्ता मेरो सम्झनाको छ.
3:16 जानुहोस् र इस्राएलका बूढा सँगै भेला, र तपाईं तिनीहरूलाई भनौं: आफ्नो बाबु को 'प्रभु परमेश्वरको, अब्राहामको परमेश्वर, इसहाक परमेश्वर, र याकूबका परमेश्वर, मलाई देखा छ, यसो: भ्रमण गर्दा, म तपाईंलाई भ्रमण गरेका, र म मिश्र तपाईं befallen छ कि सबै देखेको छु.
3:17 र म मिश्र को कष्ट आउट नेतृत्व गर्न बोलेको छु, कनानी भूमि मा, र हित्ती, र एमोरी, र Perizzite, र Hivite, र Jebusite, दूध र मह संग बगिरहेको भूमि मा। '
3:18 र तिनीहरूले आफ्नो आवाज सुन्न पर्छ. र तपाईं प्रविष्ट पर्छ, तपाईं र इस्राएलका बूढा, मिश्र को राजा, र तपाईं उहाँलाई भनौं: हिब्रूहरूलाई को 'प्रभु परमेश्वरले हामीलाई भनिन्छ छ. हामी उजाडस्थानमा मा तीन दिन 'यात्रा जानेछौ, अर्डर प्रभु हाम्रो परमेश्वरको बलिदानको प्रदान गर्न। '
3:19 तर मलाई थाहा मिश्र राजा तपाईं जारी छैन भनेर, तपाईं एक शक्तिशाली हात बाहिर जाने नभएसम्म.
3:20 म मेरो हात विस्तार हुनेछ, र म मेरो सबै म तिनीहरूलाई बीचमा के हुनेछ भनेर विचित्रताहरू संग मिश्र प्रहार गर्नेछ. यी कुराहरू गरेपछि, उहाँले तपाईं जारी गर्नेछन्.
3:21 र म मिश्रीहरूका दृष्टि यो मानिसहरूलाई पक्षमा प्रदान गर्नेछ. अनि त, जब तपाईं निस्कनेछ, तपाईं खाली बाहिर जाने छैन.
3:22 तर हरेक महिला उनको छिमेकी को र चाँदीको र सुनको उनको पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री जहाजहरू सोध्न पर्छ, साथै लुगा. र तपाईं आफ्नो छोरा र छोरी मा सेट गर्नेछ, र तपाईं मिश्र despoil गर्नेछु। "
4:1 प्रतिक्रिया, मोशाले भने, "तिनीहरूले मलाई विश्वास छैन, र तिनीहरूले मेरो सोर सुन्छ छैन, तर तिनीहरूले भन्नेछन्: 'प्रभु तपाईं देखियो छैन।' "
4:2 त्यसैले, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, "तपाईंले आफ्नो हातमा राख्नुभएको के हो?"उहाँले जवाफ दिनुभयो, "एक कर्मचारी।"
4:3 अनि प्रभु भन्नुभयो, "जमीन मा यो तल कास्ट।" उहाँले यो तल फ्याँकिएको, र यो एक सर्प मा गरियो, ताकि मोशाले टाढा भागे.
4:4 अनि प्रभु भन्नुभयो, "बाहिर आफ्नो हात हासिल, र यसको पुच्छर को पकड लिन। "उहाँले आफ्नो हात राखे र पकड लिए, र यो एक कर्मचारी मा गरियो.
4:5 "त्यसैले तिनीहरूले विश्वास गर्न सक्छ," उसले भन्यो, "आफ्नो बाबु को प्रभु परमेश्वरले, अब्राहामको परमेश्वर, इसहाक परमेश्वर, र याकूबका परमेश्वर, तपाईं देखियो छ। "
4:6 र प्रभु फेरि भन्नुभयो, उहाँले आफ्नो Bosom यसलाई धारण थियो जब "आफ्नो Bosom आफ्नो हात राख्नुहोस्।" अनि, उहाँले leprous यसलाई ल्याए, resembling हिउँ.
4:7 "फिर्ता हात राख्नुहोस्," उसले भन्यो, "आफ्नो Bosom मा।" उहाँले यो फिर्ता राख्नु र फेरि बाहिर ल्याए, र यो आफ्नो शरीर बाँकी थियो.
4:8 "तिनीहरूले विश्वास गर्नेछन् भने," उसले भन्यो, "र पहिलो हस्ताक्षर को प्रवचन सुन्न छैन, त्यसपछि तिनीहरूले पछि साइन वचन विश्वास हुनेछ.
4:9 तर यदि तिनीहरूले पनि यी दुई संकेत विश्वास छैन, र तिनीहरूले आफ्नो आवाज सुन्न छैन: नदीको पानी लिन, र सुक्खा जमिन मा यो खन्याउन, र रगत मा जो तपाईं नदी देखि आएको हुनेछ बन्द गरिने छ। "
4:10 मोशाले भने: "म तपाईंसँग प्रार्थना गर्छु, हे प्रभु, म सुवक्ता हिजो वा दिन अघि थियो. र तपाईं आफ्नो सेवक गर्न बोली छ कि समय देखि, म एक ठूलो अवरोध र जिब्रो को ढिला सुस्ती उजुरी गर्नुस् छ। "
4:11 प्रभु उहाँलाई भने: "कसले मानिसको मुख गरे? र कसले म्युट र बहिरा गठन गरेको छ, को देखेर र अन्धो? यसलाई म थियो?
4:12 अगाडि बढ, त्यसैले, र म आफ्नो मुख मा हुनेछ. र म तपाईंलाई भनौं के तपाईं सिकाउन हुनेछ। "
4:13 तर उहाँले भन्नुभयो, "म तपाईंसँग प्रार्थना गर्छु, हे प्रभु, तपाईं पठाउन हुनेछ अरू जसलाई पठाउनुहोस्। "
4:14 भगवान, मोशाले मा क्रोधित भएर, भने: "हारून लेवी तपाईंको भाइ छ. म त्यो सुवक्ता छ भनेर थाहा. हेर, उहाँले तपाईंलाई भेट्न बाहिर जाँदै छ, र तपाईं देखेर, उहाँले हृदय आनन्दित.
4:15 उहाँलाई बोल्न, र आफ्नो मुख मेरो शब्दहरू राख्न. र म आफ्नो मुख र आफ्नो मुख हुनेछ, र म तपाईंलाई प्रकट तपाईंले के गर्नै पर्छ के.
4:16 उहाँले मानिसहरूलाई तपाईं को लागि कुरा हुनेछ, र उहाँले आफ्नो मुख हुनेछ. तर तपाईं परमेश्वरको pertain ती कुराहरू उहाँसँग हुनेछ.
4:17 पनि, आफ्नो हातमा यो कर्मचारी लिन; यो संग तपाईं संकेत पूरा गर्नेछ। "
4:18 मोशाले गयो, र उहाँले Jethro फर्के, व्यवस्था आफ्ना पिता, र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, "म जाने र मिश्र मा मेरा भाइहरू फर्कन पर्छ, ताकि म तिनीहरू अझै जीवित छन् भने हेर्न सक्छन्। "अनि Jethro उहाँलाई भने, "शान्ति मा जानुहोस्।"
4:19 र त प्रभु मिद्यानमा मोशालाई भन्नुभयो: "जानुहोस्, र मिश्र फर्कन. मृत्यु आफ्नो जीवन खोजे गर्नेहरूलाई लागि। "
4:20 त्यसैले, मोशाले आफ्नो पत्नी र तिनका छोराहरूलाई लिएर, र त्यो एक गधा मा उनलाई राखिएको, र उहाँले मिश्र मा फिर्ता, आफ्नो हात परमेश्वरको कर्मचारी बोकेको.
4:21 अनि प्रभु उहाँलाई भने, उहाँले मिश्र फर्केपछि थियो: "तपाईं पूरा भनेर हेर्नुहोस्, फिरऊनले को दृष्टि मा, म आफ्नो हात मा राखिएको छ कि सबै विचित्रताहरू. म आफ्नो हृदय कठोर हुनेछ, र त्यो मान्छे जारी छैन.
4:22 अनि तपाईं उहाँलाई भनौं: 'त्यसैले प्रभु भन्छन्: इजरायल मेरो जेठो छोरा हो.
4:23 म भने छ: मेरो छोरा जारी, त्यसैले उहाँले मलाई सेवा गर्न सक्छ भन्ने. र तपाईं उसलाई जारी गर्न इच्छुक थिएनन्. हेर, म आफ्नो जेठो छोरा मृत्युदण्ड हुनेछ। ' "
4:24 र त्यो यात्रामा हुँदा, एक Inn मा, प्रभु उसलाई भेटे, र उहाँले तिनलाई मार्न तयार थियो.
4:25 यस कारण, Zipporah धेरै तेज पत्थर लिए, र त्यो उनको छोरा को foreskin खतना, र त्यो आफ्नो खुट्टा छोयो, र त्यो भने, "तपाईंले मलाई एउटा रक्तपातपूर्ण पति हो।"
4:26 र उहाँले तिनलाई जारी, त्यो भने थियो पछि, "तपाईं एक रक्तपातपूर्ण पति हो,"किनभने खतनाको.
4:27 त्यसपछि प्रभु हारूनलाई भन्नुभयो, "मोशाले पूरा गर्न मरुभूमि मा जानुहोस्।" अनि उहाँले परमेश्वरको पर्वतमा उहाँलाई भेट्न सिधै गए, र उहाँले तिनलाई चुम्बन.
4:28 र मोशाले प्रभु सबै शब्द हारूनलाई बताए, जो उसलाई पठाएका थिए, उहाँले आज्ञा दिनुभएको थियो जो र संकेत.
4:29 र तिनीहरूले नै समय आइपुगेको, र तिनीहरूले सँगै इस्राएलका छोराहरू सबै प्राचीन भेला.
4:30 र हारून सबै जो परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो थियो शब्दहरू. र त्यो मान्छे को दृष्टि मा संकेत पूरा,
4:31 र मान्छे विश्वास. र तिनीहरूले प्रभु इस्राएलका छोराहरू भ्रमण थियो सुने, र उहाँले आफ्नो कष्ट मा अनुमोदन संग देख्यो थियो. र झर्ने लमतन्न परेर पसारिएका, तिनीहरूले उपासना.
5:1 यी कुराहरू गरेपछि, मोशा र हारून प्रविष्ट, र तिनीहरूले फिरऊनलाई भने: "त्यसैले इस्राएलको परमेश्वरले भन्नुहुन्छ: मेरो मान्छे जारी, ताकि तिनीहरूले मरुभूमिमा मलाई बलिदान हुन सक्छ। "
5:2 तर उहाँले जवाफ: "कसले प्रभु छ, म आफ्नो आवाज सुन्न र इस्राएलका जारी गर्नुपर्छ भनेर? म प्रभु थाहा छैन, र म इस्राएलका जारी छैन। "
5:3 अनि तिनीहरूले भने: "हिब्रूहरूलाई परमेश्वरले हामीलाई भनिन्छ छ, हामी हाम्रो प्रभु परमेश्वर गर्न उजाडस्थानमा र बलिदान मा तीन दिन 'यात्रा जाने ताकि. अन्यथा, एक pestilence वा तरवार हामीलाई अधीन हुन सक्छ। "
5:4 मिश्र राजा तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "किन तिमी, मोशा र हारून, आफ्नो काम बाट मान्छे विचलित? तपाईंको बोझबाट फिर्ता जानुहोस्। "
5:5 र फिरऊनलाई भने: "देशमा मानिसहरू धेरै छन्. तपाईं उथलपुथल बढेको छ भनी हेर्न: तिनीहरूलाई धेरै तपाईं कसरी दिन यदि काम बाट आराम?"
5:6 त्यसैले, एउटै दिनमा, उहाँले काम को निरीक्षक निर्देशन, मान्छे को र taskmasters, यसो:
5:7 "तपाईं अब इँटा गठन गर्ने मानिसहरूलाई chaff दिन पर्छ, पहिले जस्तो. तर तिनीहरूले जाने र पराल भेला हुन सक्छ.
5:8 र तपाईं तिनीहरूलाई मा उनि अघि कि इँटा एउटै कोटा आयातित पर्छ. न त तपाईं केहि कम हुनेछ, तिनीहरूले निष्क्रिय छन्, र त्यसैले तिनीहरू कराउन, यसो: 'हामी जाने र हाम्रो परमेश्वरको बलिदान पर्छ।'
5:9 तिनीहरूले काम संग थिचोमिचो गरिनेछ, र यी तिनीहरूलाई कब्जा गर्नेछन्, त्यसैले तिनीहरू झूट शब्दहरू सहमत छैन भनेर। हुन सक्छ "
5:10 र त काम को निरीक्षक र taskmasters बाहिर गए र यसो भने: "त्यसैले भन्छन् फिरऊनले: म कुनै chaff दिन.
5:11 जानुहोस्, तपाईं यसलाई पाउन सक्षम छन् जहाँ र सङ्कलन. न त आफ्नो काम को केहि कम हुनेछ। "
5:12 र मान्छे मिश्र को सबै भूमि मार्फत dispersed थिए, पराल भेला गर्न.
5:13 त्यसै गरी, कामहरू को निरीक्षक तिनीहरूलाई दबाब, यसो: "प्रत्येक दिन आफ्नो काम पूरा, तपाईंले पहिले के गर्न accustomed थिए गरेझैं, जब पराल तपाईंलाई दिएको थियो। "
5:14 र जो इस्राएलका छोराहरू काम पहिलो थिए ती फिरऊनको taskmasters द्वारा scourged थिए, यसो: "तपाईं किन इँटा को कोटा भरिएको छैन, न हिजो, न त आज, बस अघि रूपमा?"
5:15 र इस्राएलका छोराहरू बीच पहिलो आए, र तिनीहरूले फिरऊनलाई कराए, यसो: "किन तपाईंका सेवकहरू विरुद्ध यसरी कार्य गर्छन्?
5:16 पराल हामीलाई दिइएको छैन, र अझै ईटाहरु को नै रकम आज्ञा छ. त्यसैले हामी, आफ्नो सेवक, scourging गरेर कटौती गर्दै, र अन्याय आफ्नो मान्छे विरुद्ध गरेको छ। "
5:17 अनि उहाँले भन्नुभयो: "तपाईं निष्क्रिय छन्. र यस कारण लागि भन्न, 'हामी जाने र प्रभुको बलिदान पर्छ।'
5:18 त्यसैले, जाने र काम. पराल तपाईं दिइनेछ, र तपाईं ईटाहरु को चलनअनुसारको नम्बर फिर्ता हुनेछ। "
5:19 र इस्राएलका छोराहरू बीच पहिलो एक संकट आफूलाई देखे, किनभने यो तिनीहरूलाई भन्नुभयो थियो, "केही सबै प्रत्येक दिन भर इँटा देखि कम हुनेछ।"
5:20 र तिनीहरूले मोशा र हारूनलाई भेटे, तिनीहरूले फिरऊनलाई देखि प्रस्थान रूपमा विपरीत गर्ने उभिए.
5:21 र तिनीहरूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "प्रभु हेर्न र न्यायाधीश May, तपाईं कारण किनभने फिरऊन र तिनका सेवकहरू अघि हाम्रो गंध foul बन्न, र तपाईं तरबार उहाँलाई प्रदान गरेको छ, अर्डर हामीलाई मार्न। "
5:22 र मोशाले प्रभु फर्के, र, उहाँले भन्नुभयो: "प्रभु, यो मान्छे तिमी किन दुःख छ? तिमी मलाई किन पठाएको?
5:23 म फिरऊनलाई प्रविष्ट गर्नुभएको समय देखि, आफ्नो नाम बोल्न ताकि, उहाँले आफ्नो मान्छे दुःख छ. र तपाईं तिनीहरूलाई छुटकारा छैन। "
6:1 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "अब तिमी म फिरऊनलाई गर्नु पर्छ के देख्ने. लागि बलियो हात मार्फत उहाँले तिनीहरूलाई जारी गर्नेछन्, र एक शक्तिशाली हात द्वारा उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो भूमि देखि डाली हुनेछ। "
6:2 र परमप्रभुले मोशालाई कुरा, यसो: "म प्रभु हुँ,
6:3 जो अब्राहाम देखियो, इसहाक गर्न, र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा याकूबलाई. र म उनलाई मेरो नाम प्रकट गरेनन्: ADONAI.
6:4 र म तिनीहरूलाई एउटा करार गठन, तिनीहरूलाई कनान दिन आदेश, आफ्नो sojourning भूमि, मा उनि newcomers थिए.
6:5 म इस्राएलका छोराहरू सुस्केरा सुनेका, जो संग मिश्रीहरूले तिनीहरूलाई थिचोमिचो गरेका छन्. र म मेरो करार सम्झना छ.
6:6 यस कारण, इस्राएलका छोराहरू भन्छन्: म जो तिमी देखि मिश्रीहरूका काम घर टाढा नेतृत्व गर्नेछन् प्रभु हुँ, र servitude तपाईंले उद्धार, र पनि एक उच्च हात र ठूलो इन्साफ तपाईंलाई उद्धार.
6:7 र म मेरो मान्छे आफैलाई तपाईं हुनेछ, र म आफ्नो परमेश्वरको हुनेछ. अनि म प्रभु आफ्नो परमेश्वरको हुँ भनी थाहा हुनेछ, जो तिमी देखि मिश्रीहरूका काम घर टाढा नेतृत्व,
6:8 र कसले भूमिमा तपाईं ल्याए, जो को म अब्राहामलाई यो प्रदान गर्न मेरो हात उठाएर, इसहाक, र याकूब. र म एक सम्पत्तिको रूपमा तपाईंलाई यो प्रदान गर्नेछ. म प्रभु हुँ। "
6:9 अनि त, मोशाले इस्राएलका छोराहरू यी सबै कुराहरू बताए, उसलाई जो सहमत भएन, किनभने आत्मा को आफ्नो वेदनामा र धेरै गाह्रो काम.
6:10 र परमप्रभुले मोशालाई कुरा, यसो:
6:11 "प्रविष्ट गर्नुहोस् र फिरऊनलाई बोल्न, मिश्र राजा, उहाँले आफ्नो भूमि देखि इस्राएलका छोराहरू जारी गर्न सक्छ भन्ने त। "
6:12 मोशाले प्रभु दृष्टि मा प्रतिक्रिया: "हेर, इस्राएलका छोराहरू मलाई सुन्न छैन. र फिरऊनलाई कसरी मलाई सुन्न हुनेछ, विशेष गरी देखि म खतना ओठको छु?"
6:13 र प्रभु मोशा र हारून, र उहाँले तिनीहरूलाई इस्राएलका छोराहरू लागि आज्ञा दिनुभयो, र फिरऊनलाई लागि, मिश्र राजा, तिनीहरूले टाढा मिश्र देशमा देखि इस्राएलका छोराहरू नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने.
6:14 यी परिवारका गरेर घरहरू नेताहरू छन्. Reuben छोराहरू, इस्राएलका जेठो: Hanoch र Pallu, Hezron र Carmi.
6:15 यी Reuben को kindred छन्. शिमोन छोराहरू: Jemuel र ज्याकइफेक्ट्रयाक Name, र Ohad, र Jachin, र Zohar, र शाऊल, एक कनानी महिला छोरा. यी शिमोन को progeny छन्.
6:16 र यी आफ्नो kindred द्वारा लेवी छोराहरू नाम हो: Gershon, र Kohath, र Merari. अब लेवी जीवन को वर्ष एक सय र थिए तीस-सात.
6:17 Gershon छोराहरू: Libni र Shimei, आफ्नो kindred द्वारा.
6:18 Kohath छोराहरू: Amram, र Izhar, र हेब्रोन र उज्जीएल. त्यसै गरी, Kohath जीवन को वर्ष एक सय र तीस-तीन थिए.
6:19 Merari छोराहरू: Mahli र Mushi. यी परिवारका द्वारा लेवी को kindred छन्.
6:20 अब Amram एक पत्नी Jochebed रूपमा लिए, आफ्नो बाबुको चाची, जो उहाँलाई हारून र मोशा जन्माई. र Amram जीवन को वर्ष एक सय र तीस-सात थिए.
6:21 त्यसै गरी, Izhar छोराहरू: कोरह, र Nepheg, र Zichri.
6:22 त्यसै गरी, उज्जीएल छोराहरू: Mishael, र Elzaphan, र Sithri.
6:23 अब हारून पत्नी एलिजाबेथ रूपमा लिए, Amminadab छोरी, Nahshon को बहिनी, जो उहाँको लागि Nadab जन्माई, र Abihu, र एलाजार, र ईतामारसित.
6:24 त्यसै गरी, कोरहका छोराहरू: Assir, र एल्काना, र Abiasaph. यी को Korahites को kindred छन्.
6:25 र साँच्चै एलाजार, हारूनको छोरो, Putiel को छोरी एक पत्नी लिए. र तिनले उसलाई पीनहासले जन्माई. यी आफ्नो kindred द्वारा Levitical परिवार को टाउको हो.
6:26 यी हारून र मोशा छन्, जसलाई प्रभु टाढा आफ्नो कम्पनीहरु द्वारा मिश्र देशमा देखि इस्राएलका छोराहरू नेतृत्व गर्न निर्देशन.
6:27 यी फिरऊनलाई बोल्ने ती हुन्, मिश्र राजा, मिश्र बाहिर इस्राएलका छोराहरू नेतृत्व गर्न. यी मोशा र हारून छन्,
6:28 दिनमा प्रभु मिश्र देशमा मोशालाई कुरा गर्दा.
6:29 र परमप्रभुले मोशालाई कुरा, यसो: "म प्रभु हुँ. फिरऊनले कुरा, मिश्र राजा, म कुरा सबै छ। "
6:30 मोशाले प्रभुको दृष्टि भने: "के, म खतना ओठको छु, फिरऊनले मलाई कसरी सुन्न हुनेछ?"
7:1 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "हेर, म फिरऊनलाई परमेश्वरको रूपमा नियुक्त गरेका छन्. र हारून, आफ्नो भाइ, आफ्नो अगमवक्ता हुनेछ.
7:2 तपाईं उहाँलाई बोल्न हुनेछ म आज्ञा सबै कि. र उहाँले फिरऊनलाई बोल्न हुनेछ, उहाँले आफ्नो भूमि देखि इस्राएलका छोराहरू जारी हुन सक्छ भनेर.
7:3 तर म आफ्नो हृदय कठोर हुनेछ, र म मिश्र देशमा मेरो संकेत र विचित्रताहरू गुणा गर्नेछन्,
7:4 र उहाँले तपाईंलाई सुन्न छैन. र म मिश्र भन्दा मेरो हात पठाउने, र म मेरो सेना र मेरो मान्छे नेतृत्व गर्नेछन्, इस्राएलका छोराहरू, मिश्र देशमा बाट, धेरै ठूलो इन्साफ मार्फत.
7:5 र मिश्रीहरूले थाहा हुनेछ म प्रभु हुँ भनी, जो मिश्र भन्दा मेरो हात विस्तार गरेको छ, र जो तिनीहरूका बीचमा देखि इस्राएलका छोराहरू नेतृत्व गरेको छ। "
7:6 अनि त, मोशा र हारून परमप्रभुको निर्देशन दिनुभएको थियो गरेझैं गरे. र त यो गरेको थियो.
7:7 अब मोशाले असी वर्षको, र हारून असी तीन, तिनीहरूले फिरऊनलाई कुरा गर्दा.
7:8 र प्रभु मोशा र हारूनलाई भन्नुभयो:
7:9 "जब फिरऊनले तिमीहरूलाई भन्दछु हुनेछ, 'संकेत देखाउनुहोस्,'तपाईं हारूनलाई भनौं, 'तपाईंको कर्मचारी लिनुहोस्, र फिरऊनलाई अघि तल फ्याँकिएको, र यो एक सर्प मा बन्द गरिने छ। ' "
7:10 र यति मोशा र हारून फिरऊनलाई प्रविष्ट, र तिनीहरूले प्रभु आज्ञा दिनुभएको थियो गरेझैं गरे. र हारून फिरऊनलाई र आफ्ना सेवकहरूको दृष्टि मा कर्मचारी लिए, र यो एक सर्प मा गरियो.
7:11 त्यसपछि फिरऊनले बुद्धिमानी मानिसहरू र sorcerers भनिन्छ. तिनीहरूले पनि, मिश्रको incantations र केही रहस्य द्वारा, त्यस्तै गरे.
7:12 र प्रत्येक एक तल आफ्नो कर्मचारी डाली, र तिनीहरूले serpents मा गरिएका थिए. तर हारूनको कर्मचारी आफ्नो कर्मचारी devoured.
7:13 र फिरऊनलाई को हृदय कठोर थियो, र उहाँले तिनीहरूलाई सुनेनन्, जस्तै प्रभु निर्देशन दिनुभएको थियो.
7:14 त्यसपछि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "फिरऊनले को हृदय कठोर गरिएको छ; उहाँले मानिसहरूलाई जारी गर्न इच्छुक छैन.
7:15 बिहान उहाँलाई जाने; हेर, उहाँले पानी बाहिर जाने. र तपाईं नदीको बैंक माथि उहाँलाई भेट्न खडा हुनेछ. र तपाईं हुनेछ, आफ्नो हातमा, सर्पको मा गरियो कि कर्मचारी.
7:16 र तपाईं उहाँलाई भन्न हुनेछ: 'हिब्रूहरूलाई को प्रभु परमेश्वरले तपाईंलाई मलाई पठाइएको, यसो: मरुभूमिमा मलाई बलिदान गर्न मेरो मान्छे जारी. र पनि वर्तमान समय सम्म, तपाईं सुन्न इच्छुक थिएनन्.
7:17 त्यसैले, यसरी प्रभु भन्छन्: यो तपाईं थाहा हुनेछ म प्रभु हुँ भनी. हेर, म प्रहार गर्नेछ, कि मेरो हात मा छ कर्मचारी संग, नदीको पानी, र यो रगत मा बन्द गरिने.
7:18 पनि, नदीको मा हो माछाहरू मर्नेछन्, र पानी प्रदूषित हुने, र मिश्रीहरूले तिनीहरूले नदीको पानी पिउन जब दुःख हुनेछ। ' "
7:19 प्रभु मोशालाई भन्नुभयो: "हारून भन्नुहोस्: 'तपाईंको कर्मचारी लिनुहोस्; र मिश्र को पानी भन्दा आफ्नो हात विस्तार, र आफ्नो नदी र प्रवाह र marshes र पानी सबै पूल भन्दा, ताकि तिनीहरूले रगत मा गरिएका हुन सक्छ. र त्यहाँ मिश्र को सबै भूमि भर रगत होस्, रूपमा पत्थर ती जस्तै काठ को जहाजहरु मा धेरै। ' "
7:20 र मोशा र हारून परमप्रभुको निर्देशन दिनुभएको थियो गरेझैं गरे. र माथि कर्मचारीहरु उठाने, उहाँले फिरऊन र आफ्ना सेवकहरूको दृष्टि मा नदी को पानी प्रहार. र यो रगत मा गरियो.
7:21 र नदी मा थिए माछाहरू मृत्यु, र नदी प्रदूषित भएको थियो, र मिश्रीहरूले छैन नदीको पानी पिउन सके, र त्यहाँ मिश्र को सम्पूर्ण भूमि भर रगत थियो.
7:22 मिश्रीहरूका र sorcerers, आफ्नो incantations संग, त्यस्तै गरे. र फिरऊनलाई को हृदय कठोर थियो, उहाँले तिनीहरूलाई सुनेनन्, जस्तै प्रभु निर्देशन दिनुभएको थियो.
7:23 र उहाँले टाढा गरिएका, र उहाँले आफ्नो घर प्रवेश, न उहाँले घटनाहरू यस पालो आफ्नो हृदय लागू गरे.
7:24 त्यसपछि सबै मिश्रीहरू पानी पिउन लागि नदी को सीमाना साथ dug. तिनीहरूले नदीको पानी पिउन गर्न सकेनौं.
7:25 र सात दिन पूरा थिए, प्रभु नदी प्रहार पछि.
8:1 प्रभु मोशालाई भन्नुभयो: "फिरऊनलाई प्रविष्ट गर्नुहोस्, र तपाईं उहाँलाई भन्न हुनेछ: 'त्यसैले प्रभु भन्छन्: मलाई बलिदान गर्न मेरो मान्छे जारी.
8:2 तर तपाईंले तिनीहरूलाई जारी गर्न इच्छुक छैनन् भने, हेर, म आफ्नो भ्यागुतो सबै तटों प्रहार गर्नेछ.
8:3 र नदी भ्यागुतो संग seethe हुनेछ, जो जाने र आफ्नो घर प्रवेश गर्नेछ, र आफ्नो बेडरूम, र आफ्नो ओछ्यानमा मा, र आफ्नो सेवक र आफ्नो मान्छे को घरहरू मा, र आफ्नो भट्टामा मा, र आफ्नो खाद्य पदार्थ को रहलपहल मा.
8:4 र तपाईं, र आफ्नो मानिसहरूलाई, र आफ्नो सबै सेवकहरूलाई, को भ्यागुतो प्रविष्ट हुनेछ। ' "
8:5 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "हारून भन्नुहोस्: 'नदीहरू तपाइँको हात टिक्ने, र पनि प्रवाह र marshes भन्दा, र मिश्र देशमा भन्दा अगाडी भ्यागुतो ल्याउन। ' "
8:6 र हारून मिश्र को पानी आफ्नो हात विस्तार, र भ्यागुतो आए र मिश्र देशमा ढाकिएको.
8:7 त्यसपछि पनि sorcerers, आफ्नो incantations द्वारा, त्यस्तै गरे, र तिनीहरूले मिश्र देशमा मा निस्केको भ्यागुतो ल्याए.
8:8 तर फिरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाए, र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "प्रभुको प्रार्थना, मलाई देखि र मेरो मान्छे देखि भ्यागुतो लिन ताकि टाढा. र म मान्छे जारी गर्नेछन्, ताकि प्रभुको बलिदान गर्न। "
8:9 मोशाले फिरऊनलाई भने: "मेरो लागि एक समय नियुक्त, जब म तपाईं को तर्फबाट आवेदन गर्नुपर्छ, र तपाईंका सेवकहरू, र आफ्नो मान्छे, त्यसैले भ्यागुतो तपाईं टाढा संचालित हुन सक्छ कि, र आफ्नो घर देखि, र तपाईंका सेवकहरू देखि, र आफ्नो मान्छे देखि, र तिनीहरूले नदी मात्र रहने ताकि। "
8:10 र उहाँले प्रतिक्रिया, "भोलि।" त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, "म तपाईंको वचन अनुसार कार्य गर्नेछ, ताकि तपाईं त्यहाँ हाम्रो प्रभु परमेश्वर जस्तै कुनै एक छ कि थाहा हुन सक्छ.
8:11 र भ्यागुतो तपाईं फिर्ता हुनेछ, र आफ्नो घर देखि, र तपाईंका सेवकहरू देखि, र आफ्नो मान्छे देखि. र तिनीहरूले नदी मात्र रहनेछ। "
8:12 र मोशा र हारून फिरऊनलाई देखि प्रस्थान. मोशाले बाहिर उहाँले भ्यागुतो विषयमा फिरऊनलाई बनाएको भन्ने प्रतिज्ञा तर्फबाट प्रभु गर्न कराए.
8:13 र परमप्रभुले मोशालाई वचन अनुसार काम. र भ्यागुतो को घरहरू बाहिर मृत्यु, र गाउँ बाहिर, र क्षेत्रहरू बाहिर.
8:14 र तिनीहरूले विशाल बवासीर मा सँगै तिनीहरूलाई भेला, र देशमा प्रदूषित थियो.
8:15 त्यसपछि फिरऊनले, राहत प्रदान गरिएको थियो देखेर, आफ्नै हृदय कठोर, र उहाँले तिनीहरूलाई सुनेनन्, जस्तै प्रभु निर्देशन दिनुभएको थियो.
8:16 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "हारून भन्नुहोस्: 'तपाईंको कर्मचारी टिक्ने र पृथ्वीको धूलो प्रहार. र त्यहाँ सम्पूर्ण मिश्र देशमा भर कीराहरू टीस गरौं। ' "
8:17 र उनि गरे. र हारूनले आफ्नो हात विस्तार, कर्मचारीहरु पकड, र उहाँले पृथ्वीका धूलो प्रहार, र त्यहाँ मानिसहरू मा र जन्तुहरूसित मा टीस कीराहरू आए. पृथ्वीको सबै धूलो मिश्र को सबै भूमि मार्फत टीस कीराहरू मा गरियो.
8:18 र sorcerers, आफ्नो incantations संग, त्यस्तै गरे, टीस कीराहरू निस्कने ल्याउन क्रममा, तर तिनीहरूले सकेनौं. र त्यहाँ कीरा टीस थिए, रूपमा जन्तुहरूसित मा रूपमा मानिसहरू मा धेरै.
8:19 र sorcerers फिरऊनलाई भने: "यो परमेश्वरको औंला छ।" अनि फिरऊनले को हृदय कठोर थियो, र उहाँले तिनीहरूलाई सुनेनन्, जस्तै प्रभु निर्देशन दिनुभएको थियो.
8:20 प्रभु मोशालाई भन्नुभयो: "पहिलो प्रकाश मा आऊ, र फिरऊनलाई को दृष्टि खडा, उहाँले पानी बाहिर जाने लागि. र तपाईं उहाँलाई भन्न हुनेछ: 'त्यसैले प्रभु भन्छन्: मेरो मान्छे मलाई बलिदान गर्न जारी.
8:21 तर तपाईंले तिनीहरूलाई जारी गर्नेछन् भने, हेर, म तिमीहरूमा पठाउने, र आफ्नो सेवक, र आफ्नो जनहरूमाथि, र आफ्नो घर मा, झिंगा को विविध प्रकारका. र मिश्रीहरूका घरहरू झिंगा को विविध प्रकारका भरिएको हुनेछ, तिनीहरूले हुनेछ जसमा साथै सम्पूर्ण भूमि.
8:22 अनि त्यो दिन मा, म Goshen देशमा चमत्कार कारण हुनेछ, जहाँ मेरा मानिसहरू हो, ताकि गुजर त्यहाँ हुनेछैन. र तपाईंलाई थाहा हुनेछ म पृथ्वीको बीचमा प्रभु हुँ भनी.
8:23 र म मेरो मान्छे र आफ्नो मान्छे बीचको विभाजन सेट गर्नेछ. भोलि यो साइन हुनेछ। ' "
8:24 र प्रभु त गरे. र त्यहाँ फिरऊनले को घरहरू मा र आफ्ना सेवकहरूको धेरै Grievous झिंगा आए, र मिश्र को सबै भूमिमा. र देशमा प्रदूषित थियो, यसरी, को झिंगा द्वारा.
8:25 र फिरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाए, र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "जानुहोस् र यो देशमा आफ्नो परमेश्वरको बलिदान।"
8:26 र मोशाले भने: "यो त हुन सक्दैन. हामी हाम्रो प्रभु परमेश्वर गर्न मिश्रीहरूका abominations immolate हुनेछ. यदि हामी ती कुराहरू मिश्रीहरूले उपासना जो वध लागि, आफ्नो उपस्थिति मा, तिनीहरूले हामीलाई पत्थर हुनेछ.
8:27 हामी उजाडस्थानमा मा तीन दिन 'यात्रा प्रवास हुनेछ. र हामी हाम्रो प्रभु परमेश्वर गर्न बलिदान हुनेछ, उहाँले हामीलाई निर्देशन छ रूपमा। "
8:28 र फिरऊनलाई भने: "म प्रभुको मरुभूमिमा आफ्नो परमेश्वरको बलिदान गर्न तपाईं जारी गर्नेछन्. अझै तपाईं मात्र हालसम्म जाने सक्छ. मेरो लागि आवेदन। "
8:29 र मोशाले भने: "तपाईं प्रस्थान गरेपछि, म प्रभुको प्रार्थना हुनेछ. र झिंगा फिरऊनले देखि फिर्ता हुनेछ, र आफ्ना सेवकहरूलाई देखि, र आफ्नो मान्छे देखि, भोलि. अहिलेसम्म कुनै पनि अब धोका इच्छुक छैन, ताकि तपाईं प्रभुको बलिदान गर्न मान्छे जारी छैन। "
8:30 मोशाले, फिरऊनले देखि प्रस्थान, प्रभुको प्रार्थना.
8:31 र उहाँले आफ्नो वचन अनुसार काम. र त्यो झिंगा फिरऊनले टाढा लिए, र आफ्ना सेवकहरूलाई देखि, र आफ्नो मान्छे देखि. त्यहाँ थिएन पनि एक छोडेर.
8:32 र फिरऊनलाई को हृदय कठोर थियो, ताकि, पनि यो पालो मा, उहाँले मानिसहरूलाई जारी छैन.
9:1 त्यसपछि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "फिरऊनलाई प्रविष्ट गर्नुहोस्, र तिनलाई भन्न: 'यसरी हिब्रू को परमेश्वरले भन्नुहुन्छ: मेरो मान्छे जारी, मलाई बलिदान.
9:2 तर तपाईं अझै पनि इन्कार यदि, र तपाईं तिनीहरूलाई राख्ने,
9:3 हेर, मेरो हात आफ्नो क्षेत्रहरू भन्दा हुनेछ. र एक धेरै Grievous pestilence घोडाहरू मा हुनेछ, र गधाहरूमाथि, र उँट, र बैलों, र भेडा.
9:4 र प्रभु इस्राएलका सरसम्पत्ति र मिश्रीहरूका सरसम्पत्ति बीच एक चमत्कार कारण हुनेछ, ताकि केही सबै ती कुराहरू जो इस्राएलका छोराहरू हौं देखि नष्ट हुनेछ। "
9:5 र प्रभु एक समय नियुक्त, यसो: "भोलि, प्रभु देशमा यो शब्द पूरा गर्नेछ। "
9:6 त्यसैले, प्रभु अर्को दिन यो शब्द पूरा. र मिश्रीहरूका सबै जनावरहरू मृत्यु. यद्यपि साँच्चै, इस्राएलका छोराहरू जनावरहरूको, केही सबै perished.
9:7 र फिरऊनलाई हेर्न पठाएको; न त्यहाँ इस्राएलका नजिकै ती कुराहरू को मृत्यु केहि थियो. र फिरऊनलाई को हृदय कठोर थियो, र त्यो मान्छे जारी भएन.
9:8 र परमप्रभुले मोशालाई र हारूनलाई भन्नुभयो: "ओवन देखि खरानी को handfuls लिनुहोस्, र मोशाले हावा यसलाई छिडकना गरौं, फिरऊनले को दृष्टि मा.
9:9 र त्यहाँ मिश्र को सबै भूमि मा धूलो होस्. त्यहाँ मानिसहरू र जन्तुहरूसित मा sores र सुनिंनु pustules हुनेछ, मिश्र को सम्पूर्ण भूमि भर। "
9:10 र तिनीहरूले ओवन देखि खरानी लिए, र तिनीहरूले फिरऊनलाई को दृष्टि उभिएर, र मोशाले हावा मा छर्कियो. र त्यहाँ मानिसहरू र जन्तुहरूसित मा pustules सुनिंनु संग sores आए.
9:11 न sorcerers मोशाको दृष्टि खडा गर्न सक्छ, तिनीहरूलाई थिए कि sores को कारण र मिश्र को सबै भूमि मा.
9:12 र प्रभु फिरऊनले को हृदय कठोर, र उहाँले तिनीहरूलाई सुनेनन्, परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो जस्तै.
9:13 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "बिहान खडा, र फिरऊनलाई को दृष्टि खडा, र तपाईं उहाँलाई भन्न हुनेछ: 'यसरी हिब्रू को परमेश्वरले भन्नुहुन्छ: मेरो मान्छे मलाई बलिदान गर्न जारी.
9:14 यो पालो मा लागि, म आफ्नो हृदय मा मेरो सबै विपत्तिहरूका पठाउने, र आफ्नो सेवक, र आफ्नो जनहरूमाथि. त्यसैले तपाईं त्यहाँ सबै पृथ्वीमा म जस्तै कुनै एक छ कि थाहा हुन सक्छ.
9:15 अहिलेको लागी, मेरो हात विस्तार, म तपाईं र pestilence आफ्नो मान्छे प्रहार गर्नेछु, र तपाईं पृथ्वीबाट नष्ट हुनेछ.
9:16 तर यो म नियुक्त यो कारणले थियो, म मेरो शक्ति प्रकट हुन सक्छ भनेर, र मेरो नाम सबै पृथ्वी भर वर्णन गर्न सकिन्छ भनेर.
9:17 तपाईं अझै पनि मेरो मान्छे राख्ने गर्छन्, र तपाईं अझै पनि तिनीहरूलाई जारी गर्न अनिच्छुक छन्?
9:18 त्यसैले त, भोलि, यो नै घण्टा मा, म अति ठूलो असिना तल वर्षा हुनेछ, जस्तै दिन देखि मिश्रको भएको छैन यो स्थापित भएको थियो कि, पनि यस वर्तमान समय सम्म.
9:19 त्यसैले, तुरुन्तै पठाउन र आफ्नो गाई सँगै भेला, र तपाईं क्षेत्रमा छ भनेर सबै. पुरुष र जन्तुहरूसित लागि, र सबै कुरा बाहिर फेला गरिने, फील्ड देखि भेला छैन, र जो मा असिना पर्नु हुनेछ, मर्नेछन्। ' "
9:20 फिरऊनले को सेवकहरू बीचमा प्रभुको वचन मानिसहरू डराउँदैनन् जो उहाँले घरहरू मा सँगै भाग्न आफ्नो सेवक र गाई कारण.
9:21 तर प्रभुको वचन वास्तै गर्ने उहाँले क्षेत्रहरू मा आफ्नो सेवक र गाई जारी.
9:22 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "आकाशतिर हात टिक्ने, त्यहाँ मिश्र को सम्पूर्ण देशमा असिना हुन सक्छ भनेर, मानिसहरू मा, र जन्तुहरूसित मा, र मिश्र देशमा क्षेत्र हरेक बोट मा। "
9:23 मोशाले आकाशतिर आफ्नो कर्मचारी विस्तार, र प्रभु गर्जन र असिना पठाइएको, पृथ्वी भर पनि बिजुली फुरतीला. र प्रभु मिश्र देशमा मा तल असिना rained.
9:24 र असिना र intermingled आगो सँगै मा चलाए. र यो कहिल्यै अघि मिश्र को सम्पूर्ण देशमा देखेको थियो जस्ता परिमाण को थियो, त्यस राष्ट्रका गठन भएको थियो जब समय देखि.
9:25 र असिना प्रहार, मिश्र को सबै भूमि भर, खेतहरुमा थियो सबै, मानिस देखि पनि जनावरको गर्न. र असिना तल क्षेत्र हरेक बोट प्रहार, र यो क्षेत्र हरेक रूख भङ्ग.
9:26 मात्र Goshen देशमा, इस्राएलका छोराहरू थिए जहाँ, को असिना पर्नु भएन.
9:27 र फिरऊनले पठाएको र मोशा र हारून भनिन्छ, तिनीहरूलाई यसो: "म अब सम्म पनि पाप. प्रभु बस. म र मेरा मानिसहरू impious छन्.
9:28 प्रभु प्रार्थना, परमेश्वर र असिना को thundering बन्द गर्न सक्छ भन्ने त, त्यसैले म जारी गर्न सक्छ भन्ने, र यति भनेर कुनै हालतमा यहाँ कुनै पनि अब बाँकी हुन सक्छ। "
9:29 मोशाले भने: "जब म शहर देखि प्रस्थान गरेका छन्, म प्रभु मेरो हात विस्तार हुनेछ, र thunders बन्द हुनेछ, र असिना छैन, तपाईं पृथ्वीमा प्रभु पर्छ भनेर थाहा हुन सक्छ भनेर.
9:30 तर मलाई थाहा तपाईं र तपाईंका सेवकहरू दुवै अझै प्रभु परमेश्वरको डर छैन भनेर। "
9:31 अनि त, को सन र जौ क्षतिग्रस्त थिए, किनभने जौ बढ्दै थियो, र सन पहिले नै विकास भएको थियो अनाज.
9:32 गहुँ र spelled क्षतिग्रस्त थिएनन् तर, किनभने तिनीहरूले लेट थिए.
9:33 मोशाले, शहर बाहिर फिरऊनले देखि प्रस्थान, प्रभु तिर आफ्नो हात राखे. र thunders र असिना भएनन्, न त्यहाँ गरे देशमा मा कुनै पनि थप वर्षा ड्रप.
9:34 त्यसपछि फिरऊनले, यस वर्षा कि देखेर, र असिना, र thunders भएनन् थियो, आफ्नो पाप थपियो.
9:35 र आफ्नो हृदय दबाउने थियो, आफ्ना सेवकहरूको कि साथ, र यो अति कठोर थियो. न त उहाँले इस्राएलका छोराहरू जारी गरे, जस्तै प्रभु मोशाको हात द्वारा निर्देशन दिनुभएको थियो.
10:1 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "फिरऊनलाई प्रविष्ट गर्नुहोस्. म आफ्नो हृदय कठोर छ लागि, र आफ्ना सेवकहरूको कि, त्यसैले म यी सबै पूरा गर्न सक्छ भन्ने, मेरो संकेत, उहाँमा,
10:2 र तपाईं कति आफ्नो छोरा र आफ्नो grandsons को कान गर्न वर्णन ताकि म मिश्रीहरूले विरोध र तिनीहरूलाई बीचमा मेरो संकेत गढा, र तपाईं म प्रभु हुँ भनी थाहा हुन सक्छ भनेर। "
10:3 त्यसैले, मोशा र हारून फिरऊनलाई प्रविष्ट, र तिनीहरूले उहाँलाई भने: "यसरी हिब्रू को परमेश्वरले भन्नुहुन्छ: तपाईं कसरी लामो अनिच्छुक मलाई विषय हुन हुनेछ? मेरो मान्छे मलाई बलिदान गर्न जारी.
10:4 तर तपाईं प्रतिरोध यदि, र तपाईं तिनीहरूलाई जारी गर्न अनिच्छुक छन्, हेर, भोलि म आफ्नो सीमाना मा सलह ल्याउनेछ.
10:5 र तिनीहरूले पृथ्वीको अनुहार कवर पर्छ, नत्र यो कुनै पनि भाग देख्न सकिन्छ. हो, र असिना देखि रहन्छ के खाएको गरिनेछ. तिनीहरूले भन्ने क्षेत्रहरू मा वसन्त सबै रूखहरू टाढा gnaw गर्नेछ.
10:6 र तिनीहरूले आफ्नो घर भर्न हुनेछ, र आफ्नो सेवकहरूको ती सबै मिश्रीहरूका: त्यसैले आफ्नो बाबु र पुर्खाहरूको धेरै देखेको छैन, तिनीहरूले पृथ्वीमा उठेर कि समय देखि, पनि यो वर्तमान दिन सम्म। "अनि उहाँले दूर आफूलाई गरिएका, र उहाँले फिरऊनले देखि प्रस्थान.
10:7 त्यसपछि फिरऊनले को सेवकहरू उहाँलाई भने: "हामी कसरी लामो यो घोटाले सहन पर्छ? मानिसहरू जारी, क्रममा प्रभु आफ्नो परमेश्वरको बलिदान. तपाईं मिश्र डरावना छ हेर्न छैन?"
10:8 र तिनीहरूले मोशा र हारून फिरऊनलाई फिर्ता भनिन्छ, जो तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "जानुहोस्, प्रभु तपाईंको परमेश्वरको बलिदान. तिनीहरूले जो जाने हुन्?"
10:9 मोशाले भने: "हामी हाम्रो साना र हाम्रो वृद्ध संग यात्रा हुनेछ, हाम्रो छोरा र छोरी संग, हाम्रो भेडा र बथान संग. यसको लागि हाम्रो प्रभु परमेश्वर एक solemnity छ। "
10:10 र फिरऊनले जवाफ: "त्यसैले प्रभु तपाईंसँग होस्. तर म भने तपाईं र तपाईंको साना जारी गर्न, जसले तपाईंलाई केही ठूलो दुष्टताको अभिप्राय कि शङ्का थियो?
10:11 यो त छैन. तर, मानिसहरू मात्र जाने, र प्रभुको बलिदान. यसका लागि, पनि, तुरुन्तै तिनीहरूले फिरऊनलाई को दृष्टि देखि फ्याँकिएको थियो तिमीहरू के अनुरोध छ। "अनि.
10:12 त्यसपछि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "मिश्र देशमा तपाइँको हात टिक्ने, को सलह तिर, तिनीहरूले यो भन्दा माथि उठ्नेछ ताकि, र असिना देखि रहन्छ जो हरेक बोट निल्न। "
10:13 मोशाले मिश्र देशमा आफ्ना कर्मचारी विस्तार. र प्रभु एक जल हावा सबै दिन र रात ल्याए. र बिहान आउँदा, बलिरहेको हावा माथि सलह उठाएर.
10:14 र तिनीहरूले मिश्र को सम्पूर्ण भूमि माथि जानुभयो. र तिनीहरूले मिश्रीहरूका सबै भागमा बसे: अनगिन्ती, जस्तै कि समय अघि गएको थियो, न त कहिल्यै त्यसको हुनेछ.
10:15 र तिनीहरूले भूमि को सम्पूर्ण अनुहार ढाकिएको, सबै थोक बर्बाद बिछाउने. र भूमि बिरुवाहरु devoured थिए, जो संग फल पेड थिए, जो असिना त्यागेका. र greenery को सबै केही पेड वा मिश्र को सबै पृथ्वीको बिरुवाहरु मा रहेका.
10:16 यस कारण, फिरऊनले hurriedly मोशा र हारून भनिन्छ, र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "म प्रभु आफ्नो परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका, र तपाईं विरुद्ध.
10:17 तर अब, मेरो पाप पनि यो समय मलाई जारी, र प्रभु आफ्नो परमेश्वरको आवेदन, उहाँले मलाई टाढा मृत्यु लाग्न सक्छ भनेर। "
10:18 मोशाले, फिरऊनले को दृष्टि देखि प्रस्थान, प्रभुको प्रार्थना.
10:19 अनि उहाँले पश्चिम बाट झटका गर्न धेरै बलियो हावा कारण, र, को सलह नहट्ने, यो लाल समुद्र मा उनलाई कास्ट. त्यहाँ मिश्र को सबै भागहरु मा त एक धेरै बाँकी.
10:20 र प्रभु फिरऊनले को हृदय कठोर; न उहाँले इस्राएलका छोराहरू जारी गरे.
10:21 त्यसपछि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "आकाशतिर हात टिक्ने. र त्यहाँ मिश्र देशमा भन्दा एक अन्धकार होस्, तिनीहरूले महसुस गर्न सक्षम हुन सक्छ भनेर बाक्लो। "
10:22 मोशाले आकाशतिर आफ्नो हात विस्तार. र त्यहाँ तीन दिनको लागि मिश्र को सम्पूर्ण देशमा एक भयानक अन्धकार आए.
10:23 कुनै एक आफ्नो भाइ देखे, न त आफूलाई उहाँले ठाउँमा बाहिर सारियो. तर इस्राएलका छोराहरू जहाँ जीवित थिए, त्यहाँ हल्का थियो.
10:24 र फिरऊनले मोशा र हारूनलाई बोलाए, र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "जानुहोस्, प्रभुको बलिदान. मात्र आफ्नो भेडा गरौं र बथान पछि रहन. आफ्नो साना तपाईं संग हुन सक्छ। "
10:25 मोशाले भने: "तपाईं पनि सिकार र holocausts हामीलाई अनुमति पर्छ, जो हामी हाम्रो प्रभु परमेश्वर गर्न प्रदान गर्न सक्छ.
10:26 सबै बगाल हाम्रो साथ यात्रा गर्नेछ. तिनीहरूलाई को एक टाप पछि रहनेछ छैन. तिनीहरूले प्रभु हाम्रो परमेश्वरको उपासनाको लागि आवश्यक छन्, विशेष गरी देखि हामी थाहा छैन के immolated सक्नुपर्छ, जब सम्म हामी धेरै ठाउँमा आइपुग्छन्। "
10:27 तर प्रभु फिरऊनले को हृदय कठोर, र उहाँले तिनीहरूलाई जारी गर्न इच्छुक थियो.
10:28 र फिरऊनले मोशालाई भन्नुभयो: "मलाई देखि निकासी, र तपाईं अब मेरो अनुहार हेर्न कि सावधान रहन. जो दिन मा तपाईं मेरो दृष्टि देखिने, तपाईं मर्नेछन्। "
10:29 मोशाले प्रतिक्रिया: "त्यसैले यो हुन, बस रूपमा भने छ. म अब आफ्नो अनुहार हेर्न हुनेछ। "
11:1 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "म एउटा थप विपत्ति संग फिरऊन र मिश्र छुनेछ, र यी कुराहरू पछि उहाँले तपाईं जारी गर्नेछन्, र उहाँले तपाईं बाहिर जान compel हुनेछ.
11:2 त्यसैले, तपाईं सोध्नु सबै मानिसहरू भन्नेछु, आफ्नो मित्र को एक मानिस, र उनको छिमेकी एक महिला, चाँदी र सुनको जहाजहरु लागि.
11:3 त्यसपछि प्रभु मिश्रीहरूका दृष्टि आफ्ना जनहरूलाई अनुमोदन प्रदान गर्नेछ। "मोशाले मिश्र देशमा धेरै ठूलो मानिस थिए, फिरऊनले को सेवकहरूको दृष्टि र सबै मानिसहरूको.
11:4 अनि उहाँले भन्नुभयो: "यसरी प्रभु भन्छन्: 'रात को बीचमा म मिश्र प्रवेश गर्नेछ.
11:5 र मिश्रीहरूका देशमा हरेक जेठो मर्नेछन्, फिरऊनले जेठो देखि, जो आफ्नो सिंहासनमा बस्छन, पनि handmaid जेठो गर्न, जो millstone छ, र बोझको जनावरहरु को सबै जेठो.
11:6 र त्यहाँ मिश्र को सम्पूर्ण भूमि भर ठूलो पुकारा हुनेछ, यस्तो पहिले भएको छैन रूपमा, न त कहिल्यै पछि हुनेछ.
11:7 तर त्यहाँ इस्राएलका सबै छोराहरू बीच एक कुकुर बाट पनि एक mutter हुन हुँदैन, मानिस देखि, पनि गाई गर्न, ताकि तपाईं प्रभु इस्राएलका देखि मिश्रीहरूले कसरी चमत्कारपूर्ण ढङ्गमा विभाजन थाहा हुन सक्छ। '
11:8 र यी सबै, आफ्नो सेवक, मलाई धमकना पर्छ र मलाई श्रद्धाको पर्छ, यसो गरेर: '--आउट, तपाईं र सबै यी कुराहरू पछि तपाईं अधीनमा छन् मानिसहरू। ', हामी प्रस्थान गर्नेछ। "
11:9 र उहाँले फिरऊनले अति क्रोधित देखि बाहिर गए. त्यसपछि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "फिरऊनले तपाईं सुन्न छैन, ताकि धेरै संकेत मिश्र देशमा पूरा हुन सक्छ। "
11:10 अब मोशा र हारून लेखिएका छन् कि सबै विचित्रताहरू गरे, फिरऊनले को दृष्टि मा. र प्रभु फिरऊनले को हृदय कठोर; न आफ्नो भूमि देखि इस्राएलका छोराहरू जारी गरे.
12:1 प्रभु पनि मिश्र देशमा मोशा र हारूनलाई भन्नुभयो:
12:2 "यो महिना लागि महिना को शुरुवात हुनेछ. यो वर्ष को महिना मा पहिलो हुनेछ.
12:3 इस्राएलका छोराहरू सम्पूर्ण विधानसभा कुरा, र तिनीहरूलाई भन्न: यो महिनाको दशौं दिनमा, सबैलाई एक पाठो गरौं, आफ्नो परिवार र घरहरू द्वारा.
12:4 तर नम्बर पाठो उपभोग गर्न सक्षम हुन suffice सक्छ भन्दा कम छ भने, उहाँले आफ्नो छिमेकीलाई स्वीकार गर्नेछु, थुमा खान सक्षम हुन suffice सक्छ प्राण संख्या अनुसार आफ्नो घर सामेल गरिएको छ जो.
12:5 र यो दोष बिना पाठो हुनेछ, एक वर्ष पुरानो पुरुष. यो अनुष्ठान अनुसार, तपाईं पनि एक जवान बाख्रा लिन पर्छ.
12:6 र तपाईं यस महिनाको चौधौँ दिन सम्म यो पालन गर्नेछु. र इस्राएलका छोराहरू सम्पूर्ण भीड साँझ तिर यो immolate पर्छ.
12:7 र उनि आफ्नो रगत बाट लिन पर्छ, र ढोका पोष्ट र घरहरू माथिल्लो सीमा दुवै मा यो ठाँउ, मा उनि यसलाई उपभोग गर्नेछ.
12:8 र त्यो रात तिनीहरूले शरीरका खानु पर्छ, आगो द्वारा भुना, जंगली सलाद संग र अखमिरी रोटी.
12:9 तपाईंले यसलाई कच्चा देखि केहि उपभोग छैन, न त पानी मा उसिनेर, तर केवल आगो द्वारा भुना. तपाईं आफ्नो खुट्टा र आंत संग टाउको निल्न पर्छ.
12:10 न त त्यहाँ बिहान सम्म यो बाट केहि रहनेछ. केहि माथि बायाँ हुनेछ गरिएका यदि, तपाईं आगो यसलाई बाल्न पर्छ.
12:11 अब तपाईं यसरी यो उपभोग गर्नेछ: तपाईं आफ्नो कमर कस्न पर्छ, र तपाईं आफ्नो खुट्टा मा जूता पाउनेछ, आफ्नो हात मा staves पकड, र तपाईं हतार मा उपभोग गर्नेछ. यसको लागि निस्तार छ (छ, को पार) प्रभुको.
12:12 र म मिश्र देशमा त्यो रात मार्फत पार, र म मिश्र देशमा तल सबै जेठो प्रहार गर्नेछ, मानिस देखि, पनि गाई गर्न. र म मिश्र को सबै देवताहरूको न्यायदण्ड ल्याउने. म प्रभु हुँ.
12:13 तर रगत तपाईं कहाँ हुनेछ भवन एक हस्ताक्षर रूपमा लागि हुनेछ. र म रगत देख्ने, र म तिमी माथि पारित हुनेछ. तपाईं नष्ट गर्न साथ र विपत्ति हुने छैन, जब म मिश्र देशमा प्रहार.
12:14 त्यसपछि तपाईं एक सम्झनाको रूपमा यो दिन हुनेछ, र तपाईं प्रभु गर्न एक solemnity रूपमा मनाउन पर्छ, आफ्नो पुस्ताहरू, अनन्त भक्ति रूपमा.
12:15 सात दिनको लागि, तपाईं अखमिरी रोटी खानु पर्छ. पहिलो दिनमा तपाईंको घरहरू कुनै खमिर हुनेछ. जसले केहि उपभोग गर्नेछ leavened, पहिलो दिन देखि, पनि सातौं दिन सम्म, कि प्राण इजरायल बाट नष्ट गर्नेछु.
12:16 पहिलो दिन पवित्र र Solemn हुनेछ, र सातौं दिन नै festivity संग venerated गरिनेछ. तपाईंले यी दिनमा कुनै काम गर्नु पर्छ, कि बाहेक खाने कुन सम्बन्धित छ.
12:17 र तपाईं अखमिरी रोटी को भोजमा पालन गर्नेछु. यो नै दिनको लागि, म मिश्र देशमा बाहिर आफ्नो सेना नेतृत्व गर्नेछन्, र तपाईं यस दिन पालन गर्नेछु, आफ्नो पुस्ताहरू, एक सदैव अनुष्ठान रूपमा.
12:18 पहिलो महिना मा, मा महिनाको चौधौँ दिन, साँझ तिर, तपाईं अखमिरी रोटी उपभोग गर्नेछ, एउटै महिनाको बीस-पहिलो दिन सम्म, साँझ तिर.
12:19 सात दिनको लागि, तपाईंको घरहरू मा खमिर फेला परेन गरिनेछ. जसले खमिर खान हुनेछ, आफ्नो प्राण इस्राएलका विधानसभा देखि नष्ट हुनेछ, रूपमा भूमि निवासी संग रूपमा newcomers धेरै.
12:20 तपाईं कुनै पनि खमिर उपभोग छैन. आफ्नो सबै वासस्थान ठाउँमा, तपाईं अखमिरी रोटी खानु पर्छ। "
12:21 त्यसपछि मोशाले इस्राएलका छोराहरू सबै प्राचीन भनिन्छ, र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "जानुहोस्, आफ्नो परिवार द्वारा जनावरको लिइरहेको, र निस्तार बलिदान.
12:22 र प्रवेश छ जो रगत hyssop को एक सानो बन्डल डिप, र यो संग माथिल्लो सीमा छिडकना, र ढोका पोस्ट दुवै. तपाईं को कुनै पनि बिहान सम्म आफ्नो घर को ढोका बाहिर जाने.
12:23 लागि प्रभु मार्फत पार, मिश्रीहरूले स्ट्राइकिङ्. र उहाँले माथिल्लो सीमा मा रगत देख्ने गर्दा, र दुवै ढोका पोस्टमा, उहाँले घर को ढोका माथि पास र छैन आफ्नो घरहरू प्रवेश गर्न स्ट्राइकर अनुमति वा हानि गर्न.
12:24 तपाईं र तपाईंको छोरा लागि व्यवस्था यस शब्द पालन गर्नेछु, सधैंभरि.
12:25 र तपाईं भूमि मा प्रवेश गरेका छन् जब प्रभु दिनेछु कि, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ जस्तै, तपाईंले यी समारोह पालन गर्नेछु.
12:26 र आफ्नो छोरा तपाईंलाई भन्न हुनेछ जब, 'यो धार्मिक उत्सव को अर्थ के हो?'
12:27 तपाईं तिनीहरूलाई भनौं: 'यो प्रभुको पार सिकार छ, उहाँले मिश्रको इस्राएलका छोराहरू घरहरू लुप्त गर्दा, मिश्रीहरूले स्ट्राइकिङ्, र हाम्रो घरहरू मानिसहरू खाली। ' "अनि, तल निहुरेको, पूजा.
12:28 र इस्राएलका छोराहरू, प्रस्थान, जस्तै प्रभु मोशा र हारून निर्देशन दिनुभएको थियो गर्नुभयो.
12:29 त्यसपछि यो भयो, रात को बीचमा: प्रभु मिश्र देशमा प्रत्येक जेठो तल प्रहार, फिरऊनले जेठो देखि, जो आफ्नो सिंहासनमा बस्छन, पनि जेलमा थियो जो कैद स्त्रीको जेठो गर्न, र गाई को सबै जेठो.
12:30 र फिरऊनले रात उठेर, र आफ्ना सबै सेवकहरूलाई, र मिश्र को सबै. र त्यहाँ मिश्रको ठूलो पुकारा उठ्दा. त्यहाँ छैन कुनै एक मृत राख्नु जसमा एक घर थियो.
12:31 र फिरऊनलाई, कल रात मा मोशा र हारून, भने: "खडा र मेरो मान्छे बीच निस्कनेछ, तपाईं र इस्राएलका छोराहरू. जानुहोस्, प्रभुको बलिदान, तपाईं भन्न जस्तै.
12:32 तपाईंको भेडा र बथान तपाईं संग लिन, तपाईंले अनुरोध रूपमा, र तपाईं टाढा जाने रूपमा, मलाई आशीर्वाद। "
12:33 र मिश्रीहरूले चाँडै देशमा टाढा जान मानिसहरूलाई आग्रह, यसो, "हामी सबै मर्नेछन्।"
12:34 त्यसैले, मानिसहरूले यसलाई leavened अघि रोटी आटा लिए. र आफ्नो cloaks मा बांधन, तिनीहरूले काँध मा राखिएको.
12:35 मोशाले निर्देशन दिनुभएको थियो र इस्राएलका छोराहरू बस गरे. र तिनीहरूले चाँदी र सुन को जहाजहरु लागि मिश्रीहरूले बिन्ती, र धेरै धेरै लुगा.
12:36 त्यसपछि प्रभु मिश्रीहरूका दृष्टि मा मानिसहरूलाई पक्षमा प्रदान, तिनीहरूले तिनीहरूलाई bestowed भनेर. र तिनीहरूले मिश्रीहरूले despoiled.
12:37 र इस्राएलका छोराहरू Soccoth गर्न Rameses देखि बाहिर सेट, पैदल बारेमा छ सय हजार मानिसहरू, साना बाहेक.
12:38 तर पनि साधारण मान्छे को एक अनगिन्ती मिश्रण तिनीहरूलाई जानुभयो, भेडा र बथान र विविध प्रकारका जनावर, अति धेरै.
12:39 र तिनीहरूले रोटी पकाउँथे, जो एक सानो गर्दा पहिले तिनीहरूले मिश्र बाहिर आटा रूपमा लिएका थिए. र तिनीहरूले अखमिरे रोटी खरानी अन्तर्गत सुखा बनाएका. यो सक्षम थिएन लागि leavened गर्न, मिश्रीहरूले सशक्त तिनीहरूलाई छोड्न र कुनै पनि ढिलाइ गराउन तिनीहरूलाई अनुमति. न त तिनीहरूले कुनै पनि मासु तयार गर्न अवसर थियो.
12:40 इस्राएलका छोराहरू अब Habitation, तिनीहरूले मिश्र मा रहेका बेला, चार सय र तीस वर्ष थियो.
12:41 भइरहेको पूरा गरिएको, त्यही दिन प्रभुको सबै सेना मिश्र देशमा बाट प्रस्थान.
12:42 यो रात प्रभु को एक योग्य उत्सव छ, उहाँले मिश्र देशमा तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्दा. इस्राएलका सबै छोराहरू तिनीहरूको पुस्ताहरू पालन गर्नुपर्छ.
12:43 र परमप्रभुले मोशालाई र हारूनलाई भन्नुभयो: "यो चाडको धार्मिक उत्सव हो. कुनै विदेशीले यो बाट खानु पर्छ.
12:44 तर हरेक किनेको दास खतना गरिनेछ, र त त्यो यो खाने सक्छ.
12:45 नवागंतुक र ज्यालादारी कामदारको यसलाई देखि खान हुँदैन.
12:46 एक घर मा खाएको गरिनेछ; तपाईं आफ्नो शरीर बाहिर बोक्न पर्छ, न त यसको हड्डी तोड पर्छ.
12:47 इस्राएलका छोराहरू सम्पूर्ण विधानसभा यो गर्नु पर्छ.
12:48 र कुनै पनि sojourner आफ्नो बन्दोबस्त मा भन्दा पार गर्न इच्छुक हुनेछ भने, र प्रभुको निस्तार राख्न, आफ्ना सबै पुरुषहरु पहिलो खतना गरिनेछ, त्यसपछि उहाँले अनुष्ठान मनाउन पर्छ. र उनले देशमा एक मूल जस्तै हुनेछ. तर यदि कुनै मानिस खतना गरिएको छैन, उहाँले यसलाई देखि खान हुँदैन.
12:49 व्यवस्था जन्म मूल को लागि र तपाईं sojourns गर्ने मुंहतोड लागि नै हुनेछ। "
12:50 र इस्राएलका सबै छोराहरू प्रभु मोशा र हारून निर्देशन दिनुभएको थियो गरेझैं गरे.
12:51 र त्यही दिन, प्रभु आफ्नो कम्पनीहरु द्वारा मिश्र देशमा बाहिर इस्राएलका छोराहरू नेतृत्व.
13:1 र परमप्रभुले मोशालाई कुरा, यसो:
13:2 "मलाई गर्भमा खोल्छ जो इस्राएलका छोराहरू बीच हरेक जेठो पवित्र, गाई को रूपमा मानिसहरूको धेरै. तिनीहरूले सबै मेरो हो। "
13:3 र मोशाले मानिसहरूलाई भने: "यो दिन सम्झना, जो मा तपाईं मिश्रबाट र servitude को घर देखि टाढा लगियो. बलियो हातले लागि प्रभु तपाईंलाई यो स्थान टाढा नेतृत्व छ. त्यसैले, तपाईं कुनै leavened रोटी खानु पर्छ.
13:4 आज, तपाईं नयाँ अन्नको महिनाको मा निस्केको जाने.
13:5 र प्रभु कनानी भूमि मा तपाईं ल्याएको छ जब, र हित्ती, र एमोरी, र Hivite, र Jebusite, जो उहाँले तपाईंलाई दिन भनेर आफ्नो बाबु शपथ खानुभयो, दूध र मह संग बगिरहेको भूमि, तपाईं यस महिना मा पवित्र रीतिथितिहरू यस तरिका मनाउन हुनेछ.
13:6 सात दिनको लागि, तपाईं अखमिरी रोटी खान्छन् पर्छ. र सातौं दिन, यसलाई प्रभुको solemnity हुनेछ.
13:7 तपाईं सात दिन लागि अखमिरे रोटी उपभोग गर्नेछ. केहि त्यहाँ देखेको छैन हुन तपाईंसँग leavened, न त आफ्नो सबै भागहरु मा.
13:8 र तपाईं त्यस दिन आफ्नो छोरा बताउन हुनेछ, यसो: 'यो के प्रभु म मिश्र बाट लगिएको थियो जब मेरो लागि गरे।'
13:9 र यो आफ्नो हातमा चिन्ह जस्तै हुन र आफ्नो आँखा अगाडि स्मारक रुचि हुनेछ. र यति प्रभुको व्यवस्था सधैं आफ्नो मुखमा हुन सक्छ. बलियो हातले लागि, प्रभु मिश्र देशमा तपाईंले टाढा नेतृत्व.
13:10 तपाईं यस उत्सवको राख्न हुनेछ, को स्थापना समयमा, दिन दिन देखि.
13:11 र प्रभु कनानी भूमि मा तपाईं ल्याएको छ जब, उहाँले तपाईं र तपाईंको पुर्खाहरूले शपथ खानुभयो जस्तै, र त्यो तपाईं दिन हुनेछ जब,
13:12 त्यसपछि तपाईं गर्भमा खोल्छ सबै प्रभु लागि छुट्याइएको पर्छ र सबै आफ्नो गाई बीच निस्कने जाने पहिलो छ. तपाईं पुरुष सेक्स को हुनेछ जो, तपाईं प्रभुको consecrate पर्छ.
13:13 एक गधा को जेठो तपाईं भेडालाई लागि आदान प्रदान गर्नेछ. र तपाईंले यसलाई उद्धार हुनेछ भने, तपाईं मृत्यु यसलाई राख्नु पर्छ. तर आफ्नो छोरा बीच मानिसको हरेक जेठो, तपाईं एक मूल्य संग उद्धार गर्नेछ.
13:14 र आफ्नो छोरा भोलि प्रश्न हुनेछ जब, यसो, 'यो के हो?'तपाईं प्रतिक्रिया हुनेछ, 'बलियो हातले प्रभु हामीलाई मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व, servitude को घर देखि.
13:15 लागि फिरऊनले कठोर गरिएको गर्दा र थियो हामीलाई जारी गर्न अनिच्छुक थियो, प्रभु मिश्र देशमा प्रत्येक जेठो हत्या, मानिसको जेठो देखि, पनि जनावरहरु को जेठो गर्न. यस कारण, म प्रभुको immolate गर्भमा खोल्दछ पुरुष सेक्स को सबै, र मेरो छोरा को सबै जेठो म उद्धार। '
13:16 त्यसैले, यसलाई आफ्नो हात कुरा र जस्तै चिन्ह एक सम्झनामा आफ्नो आँखा बीच झुन्डिएको जस्तै हुनेछ, किनभने प्रभु हामीलाई मिश्र टाढा नेतृत्व छ बलियो हातले। "
13:17 अनि त, फिरऊनले मानिसहरूलाई टाढा पठाएका थिए जब, भगवान पलिश्तीहरू भूमि को बाटो तिनीहरूलाई नेतृत्व छैन, जो नजिकै छ, सायद तिनीहरूले पलटा सक्छ विचार, तिनीहरूले देखे यदि युद्ध तिनीहरूलाई विरुद्ध खडा, र त्यसपछि तिनीहरूले मिश्र फर्कन सक्छ.
13:18 तर मरुभूमि को बाटो द्वारा वरिपरि तिनीहरूलाई नेतृत्व, जो लाल समुद्र अर्को छ. र यति इस्राएलका छोराहरू जानुभयो, सशस्त्र, मिश्र देशमा बाहिर.
13:19 पनि, मोशाले उसलाई यूसुफको हड्डी लिए, उहाँले इस्राएलका छोराहरू गर्न sworn थियो किनभने, यसो: "परमेश्वरले तपाईंलाई भ्रमण हुनेछ. तपाईं संग यहाँ टाढा मेरो हड्डी बोक्न। "
13:20 र Soccoth देखि बाहिर सेट, तिनीहरूले Etham मा encamped, उजाडस्थानमा सबैभन्दा टाढा भागहरु मा.
13:21 अब प्रभु उनलाई बाटो देखाउन preceded, बादल खाँबो संग दिन, र आगो को खाँबो संग रात द्वारा, उहाँले दुवै समयमा आफ्नो यात्रा को नेता हुन सक्छ भनेर.
13:22 यी कहिल्यै असफल: दिन बादल खाँबो, र राती आगोको खाँबो, मान्छे को दृष्टि मा.
14:1 त्यसपछि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, यसो:
14:2 "इस्राएलका छोराहरू गर्न बोल्नुहोस्. तिनीहरूलाई फिर्ता बारी गरौं र Pihahiroth को क्षेत्रबाट Encamp टाढा, जो Migdol र समुद्र बीच छ, विपरीत बाल-zephon. यसको दृष्टि मा तपाईं आफ्नो शिविरमा राख्न पर्छ, समुद्र माथि.
14:3 र फिरऊनलाई इस्राएलका छोराहरू बारेमा भन्नेछन्, 'तिनीहरूले भूमि द्वारा सीमित गरिएको छ; मरुभूमिमा तिनीहरूलाई संलग्न छ। '
14:4 र म आफ्नो हृदय कठोर हुनेछ, र त त्यो तपाईं पछि लाग्न हुनेछ. र म फिरऊनलाई मा महिमा हुनेछ, र आफ्ना सबै सेना मा. र मिश्रीहरूले थाहा हुनेछ म प्रभु हुँ भनी। "अनि तिनीहरूले यसो.
14:5 र यो मिश्रीहरूका राजालाई रिपोर्ट थियो मान्छे भागेका थिए कि. अनि फिरऊन र उहाँको सेवकहरूको हृदय मानिसहरूले परिवर्तन भएको थियो, र तिनीहरूले भने, "हामीले के अभिप्राय गर्नुभयो, ताकि हामी सेवा इस्राएलका जारी?"
14:6 त्यसैले, उहाँले आफ्नो रथ harnessed, र उहाँले उसलाई आफ्ना सबै मानिसहरूलाई लिए.
14:7 र उहाँले छ सय चुनिएको रथहरू लिए, र जो रथहरू मिश्र थिए, र पनि सम्पूर्ण सेना को नेताहरूले.
14:8 र प्रभु फिरऊनले को हृदय कठोर, मिश्र राजा, र उहाँले इस्राएलका छोराहरू अपनाए. तर उनि एक उच्च हात द्वारा लगिएको थियो.
14:9 र मिश्रीहरूले तिनीहरूलाई preceded गर्नेहरूलाई को पाइला पछि जब, तिनीहरूले समुद्र माथि शिविरमा तिनीहरूलाई फेला. सबै घोडाहरू र फिरऊनकी रथहरू, र सम्पूर्ण सेना, Pihahiroth थिए, विपरीत बाल-zephon.
14:10 र जब फिरऊनले नजिकै आएको थियो, इस्राएलका छोराहरू, आफ्नो आँखा माथि उठाने, तिनीहरूलाई पछि मिश्रीहरूले देखे. र तिनीहरूले धेरै डराएका थिए. र तिनीहरूले प्रभु पुकारे.
14:11 र तिनीहरूले मोशालाई भने: "सायद त्यहाँ मिश्र कुनै चिहानहरू थिए, जो कारण लागि हामीलाई उजाडस्थानमा मर्न लिए. यसलाई तपाईं के गर्न अभिप्रेरित गर्ने के हो, मिश्र बाहिर हामीलाई अग्रणी मा?
14:12 हामी मिश्र तपाईं बोल्नुभयो कि यो शब्द छ, यसो: हामीलाई देखि निकासी, हामी मिश्रीहरूले सेवा गर्न सक्छन् भनेर? यो धेरै राम्रो थियो तिनीहरूलाई सेवा गर्न, उजाडस्थानमा मर्न भन्दा। "
14:13 र मोशाले मानिसहरूलाई भने: "नडराऊ. दृढ र प्रभुको महान विचित्रताहरू हेर्न, उहाँले आज जो गर्नेछ. मिश्रीहरूले लागि, जसलाई तपाईं अहिले हेर्न, फेरि कहिल्यै देखेको गरिनेछ, सधैंभरि.
14:14 प्रभु तपाईंको तर्फबाट लड्न हुनेछ, र तपाईं मौन रहनेछ। "
14:15 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "किन मलाई कराउन? मा जारी इस्राएलका छोराहरू भन्नुहोस्.
14:16 अब, आफ्नो कर्मचारी माथि उचाल्न, र समुद्र भन्दा आफ्नो हात विस्तार र यसलाई विभाजित, ताकि इस्राएलका छोराहरू सुक्खा जमीन मा समुद्रको बीचमा मार्फत हिंड्न सक्छ.
14:17 त्यसपछि म मिश्रीहरूका हृदय कठोर हुनेछ, तपाईं पछि लाग्न ताकि. र म फिरऊनलाई मा महिमा हुनेछ, र आफ्ना सबै सेना मा, र आफ्नो रथहरू मा, र आफ्नो घोडसवारले मा.
14:18 र मिश्रीहरूले थाहा हुनेछ म प्रभु हुँ भनी, जब म फिरऊन मा महिमा हुनेछ, र आफ्नो रथहरू मा, साथै आफ्नो घोडसवारले जस्तै। "
14:19 र परमेश्वरको स्वर्गदूत, जो इस्राएलका छाउनी preceded, आफूलाई माथि उठाने, तिनीहरूलाई पछि गए. र क्लाउड को खाँबो, सँगै उसलाई, को रियर लागि अगाडि बायाँ
14:20 र मिश्रीहरूका शिविर र इस्राएलका छाउनी बीच उभिए. र यो एक गाढा बादल थियो, अझै यो रात उज्यालो, तिनीहरू सबै त्यो रात कुनै पनि समयमा एक अर्को आउँदै मा सफल सकून् भनेर छैन.
14:21 र मोशाले समुद्र आफ्नो हात विस्तार थियो जब, प्रभु एक तीव्र बलिरहेको हावा गरेर टाढा लिए, रात भर उड्ने, र उहाँले सुक्खा जमीन यसलाई बन्द. र पानी विभाजित भएको थियो.
14:22 र इस्राएलका छोराहरूले सुकेको समुद्रको बीचमा मार्फत गए. पानी को लागि आफ्नो दाहिने र आफ्नो बायाँ हात मा एक पर्खाल जस्तै थियो.
14:23 र मिश्रीहरूले, तिनीहरूलाई पछि लाग्दा, तिनीहरूलाई पछि गए, फिरऊनले को घोडाहरू को सबै संग, आफ्नो रथहरू र घोडसवारले, समुद्रको बीचमा मार्फत.
14:24 र अब बिहान हेर्ने आइपुगेका थिए, र हेर, भगवान, आगो को र क्लाउड को खाँबो मार्फत मिश्रीहरूका शिविरमा मा तल देख, मृत्यु आफ्नो सेना गर्न राख्नु.
14:25 अनि उहाँले रथहरू को पाङ्ग्रा पल्टाइदिनुभयो, र तिनीहरूले गहिरो मा लगे थिए. त्यसैले, मिश्रीहरूले भने: "हामीलाई इस्राएलका भाग्न गरौं. प्रभु हामीलाई विरुद्ध तर्फबाट झगडे। "
14:26 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "समुद्र भन्दा आफ्नो हात टिक्ने, ताकि पानी मिश्रीहरूले मा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो रथहरू र घोडसवारले भन्दा। "
14:27 र मोशाले समुद्र विपरीत आफ्नो हात विस्तार थियो जब, यसलाई फिर्ता भएको थियो, पहिलो प्रकाश मा, यसको पूर्व ठाउँमा. र भागिरहेका मिश्रीहरूले पानी भेटे, र प्रभु को छालहरू बीचमा तिनीहरूलाई जोडतोडले.
14:28 र पानी फर्के थिए, र तिनीहरूले फिरऊनलाई सम्पूर्ण सेना को रथहरू र घोडसवारले ढाकिएको, जो, निम्न, समुद्र मा प्रवेश गरेका थिए. र यति धेरै तिनीहरू एक जीवित बाँकी थियो.
14:29 तर इस्राएलका छोराहरूले सुकेको समुद्रको बीचमा मार्फत प्रत्यक्ष जारी, र पानी सही र बाँया मा एक पर्खाल जस्तै तिनीहरूलाई थिए.
14:30 र त प्रभु मिश्रीहरूका हात बाट त्यस दिन इस्राएलका मुक्त.
14:31 र तिनीहरूले मिश्रीहरूले प्रभु तिनीहरूलाई विरुद्ध exercised थियो समुद्रको किनारमा र ठूलो हात मा मरेको देखे. र मान्छे प्रभु मानिसहरू डराउँदैनन्, र तिनीहरूले प्रभु र मोशाले आफ्नो सेवक विश्वास.
15:1 त्यसपछि मोशा र इस्राएलका छोराहरू प्रभु यो गीत गाए, र तिनीहरूले भने: "हामीलाई प्रभु भजन गाउन दिनुहोस्, लागि उहाँले gloriously म्याग्निफाइन्ड गरिएको छ: घोडा र सवार उहाँले समुद्रमा हालिन्छ छ.
15:2 प्रभु मेरो बल र मेरो प्रशंसा छ, र उहाँले मेरो मुक्तिको भएको छ. उहाँले मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, र म उहाँको महिमा गर्नेछु. उहाँले मेरो बुबाको परमेश्वर हुनुहुन्छ, र म उसलाई उच्च पार्ने पर्छ.
15:3 प्रभु एक लड मानिस जस्तै छ. सर्वशक्तिमान आफ्नो नाम हो.
15:4 फिरऊनले को रथहरू, र आफ्नो सेना, उहाँले समुद्र हालिन्छ छ; आफ्नो चुन्नु नेताहरूले लाल समुद्रमा डूब गएको छ.
15:5 पातालमा तिनीहरूलाई ढाकिएको छ. तिनीहरूले एक पत्थर जस्तै गहिराइमा मा descended.
15:6 आफ्नो दायाँ हात, हे प्रभु, बल मा म्याग्निफाइन्ड गरिएको छ. आफ्नो दायाँ हात, हे प्रभु, शत्रु तल प्रहार गरेको छ.
15:7 र आफ्नो महिमा को भीड मा तपाईं आफ्नो विरोधीहरू तल राख्नु छ. तपाईं आफ्नो क्रोध बाहिर पठाइएको, जो stubble जस्तै तिनीहरूलाई devoured.
15:8 र आफ्नो उतेजना को सास द्वारा, पानी भेला थिए. को बगिरहेको छालहरू अझै पनि खडा. पातालमा समुद्रको बीचमा जम्मा भएको थियो.
15:9 शत्रु भने: 'म पछि लाग्न र तिनीहरूलाई लाग्नेछन् हुनेछ. म भताभुंग पार्छ विभाजन हुनेछ. मेरो प्राण भरिएको हुनेछ. म मेरो तरवार unsheathe हुनेछ. मेरो हात मृत्यु तिनीहरूलाई राख्नु हुनेछ। '
15:10 सास उडायो, र समुद्र तिनीहरूलाई ढाकिएको. तिनीहरूले शक्तिशाली पानी मा नेतृत्व जस्तै डूब थिए.
15:11 कसले बल तपाईं जस्तै छ, हे प्रभु? जसले तपाईंलाई जस्तै छ: शुद्धि मा भव्य, भयानक र अझै प्रशंसनीय, चमत्कार पूरा?
15:12 तपाईं आफ्नो हात विस्तार, र पृथ्वी तिनीहरूलाई devoured.
15:13 तपाईंको कृपा मा, के तपाईं उद्धार गर्नुभएको छ जसलाई मानिसहरूलाई नेता भएको. र आफ्नो बल मा, तपाईं आफ्नो पवित्र बासस्थान तिनीहरूलाई लगे छन्.
15:14 मानिसहरूले उठेर रिसाए. दुःखको पलिश्ती बासिन्दाहरू को पकड लिए.
15:15 त्यसपछि एदोम नेताहरू भड्काए थिए, र कामेको मोआबका मजबूत को पकड लिए. कनान सबै बासिन्दाहरू पेट्रीफाइड थिए.
15:16 डर गरौं र तिनीहरूमाथि गिरावट भय, आफ्नो हात को परिमाण द्वारा. तिनीहरूलाई पत्थर जस्तै immobilized होस्, आफ्नो मान्छे मार्फत पार सम्म, हे प्रभु, यो सम्म, तपाईं अधिकार कसलाई आफ्नो मान्छे, मार्फत पार.
15:17 तपाईंले उनीहरूलाई नेतृत्व र तिनीहरूलाई रोपेर पर्छ, आफ्नो उत्तराधिकार को पर्वतमा, आफ्नो सबैभन्दा दृढ वासस्थान ठाउँमा, जो तपाईं गठन गरेको छ, हे प्रभु, तपाईंको पवित्र मन्दिरमा, हे प्रभु, जो आफ्नो हात गरेका छन् दृढ.
15:18 प्रभु सदाको र बाहिर शासन गर्नेछ.
15:19 को सवार फिरऊनले लागि, आफ्नो रथहरू र घोडसवारले संग, समुद्रमा ल्याइयो. र प्रभु समुद्रको पानी तिनीहरूमाथि फिर्ता ल्याए. तर इस्राएलका छोराहरू यसको बीचमा सुक्खा जमीन मार्फत हिंडे। "
15:20 र यति मरियम, को भविष्यवक्ता भनेर, हारूनको बहिनी, उनको हातमा एउटा timbrel उठाए. र सबै महिला timbrels र नृत्य संग उनको पछि लागे.
15:21 र त्यो भविष्यवाणी, यसो: "हामीलाई प्रभु भजन गाउन दिनुहोस्, लागि उहाँले gloriously म्याग्निफाइन्ड गरिएको छ. घोडा र त्यसको सवार, उहाँले समुद्र हालियो छ। "
15:22 त्यसपछि मोशाले लाल समुद्र देखि इजरायल लिए, र तिनीहरूले Shur को मरुभूमि मा गयो. र तिनीहरूले उजाडस्थानमा मार्फत तीन दिनको लागि अलमलिएको, र तिनीहरूले कुनै पानी फेला.
15:23 र तिनीहरूले Marah आइपुगेको. तिनीहरूले तीतो थिए किनभने तिनीहरू Marah को पानी पिउन असमर्थ. त्यसैले, उहाँले पनि ठाउँ त्यसैअनुसार नाम स्थापित, यो कल 'Marah,'छ, तीता.
15:24 र मान्छे मोशा विरुद्ध गनगन गरे, यसो: "हामी के लगाउँला?"
15:25 त्यसैले तिनले प्रभु पुकारे, जो एक रूख देखाए. र त्यो पानी यसलाई डाली थियो जब, तिनीहरूले मिठास मा गरिएका थिए. त्यस स्थान मा, उहाँलाई लागि निर्देशन स्थापित, र पनि इन्साफ. र उहाँले तिनलाई त्यहाँ परीक्षण,
15:26 यसो: "तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आवाज सुन्न हुनेछ भने, र आफ्नो दृष्टि मा सही छ के, र उहाँका आज्ञाहरू पालन, र आफ्ना सबै आदेशहरू पालन, म मिश्र मा लगाएको भन्ने दुःखको कुनै पनि तिमीहरूमा ल्याउन छैन. म प्रभु हुँ, आफ्नो चिकित्सा। "
15:27 त्यसपछि इस्राएलका छोराहरू Elim आइपुगे, जहाँ पानी को बाह्र फोहराहरू र सत्तरी खजूरको रूखहरू थिए. र तिनीहरूले पानी अर्को छाउनीमा बसोबास.
16:1 र तिनीहरूले Elim देखि बाहिर सेट. र इस्राएलका छोराहरू सम्पूर्ण भीड पापको मरुभूमि आइपुगेको, जो Elim र सिनाई बीच छ, मा दोस्रो महिनाको पन्ध्रौँ दिन, तिनीहरूले मिश्र देशमा बाट प्रस्थान पछि.
16:2 र इस्राएलका छोराहरू सम्पूर्ण मण्डलीको उजाडस्थानमा मोशा र हारून विरुद्ध गनगन गरे.
16:3 र इस्राएलका छोराहरू तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "यदि मात्र हामी मिश्र देशमा प्रभुको हात मृत्यु भएको थियो, हामी मासु कटोरे वरिपरि बसे र भरिएको सम्म रोटी खाए जब. किन हामीलाई टाढा नेतृत्व गरेको, यो मरुभूमि मा, तपाईं अनिकाल संग सम्पूर्ण भीड मार्न सक्छ भनेर?"
16:4 त्यसपछि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "हेर, म तपाईं को लागि रोटी स्वर्गबाट ​​तल वर्षा हुनेछ. मानिसहरू बाहिर जाने र प्रत्येक दिन को लागि पर्याप्त छ के सङ्कलन गरौं, त्यसैले म तिनीहरूलाई परीक्षण गर्न सक्छ भन्ने, रूपमा वा छैन मेरो व्यवस्था हिंड्न हुनेछ.
16:5 तर मा छैटौं दिन, तिनीहरूलाई तिनीहरूले पूरा लागि के प्रयोग तयार गरौं, र त्यहाँ तिनीहरू एक दिन संकलन गर्न accustomed थिए के डबल होस्। "
16:6 र मोशा र हारून इस्राएलका छोराहरू भने: "साझमा, तपाईं प्रभु तपाईं मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व छ भनेर थाहा हुनेछ.
16:7 र बिहान, तपाईं प्रभुको महिमा देख्नेछन्. उहाँले प्रभु विरुद्ध आफ्नो गनगन सुने छ लागि. तर हाम्रो लागि रूपमा, साँच्चै हामी के हुन्, तपाईं हामी विरुद्ध लेकानेखुसीगर्छ भनेर?"
16:8 र मोशाले भने: "साझमा, प्रभु तपाईं खान मासु दिनुहुनेछ, र बिहान, रोटी पूर्णतामा मा. उहाँले तपाईंलाई उहाँको विरुद्धमा गनगन गरे गर्नुभएको तपाईंको गनगन सुने छ लागि. हामी के हुन् लागि? आफ्नो गनगन हाम्रो विरुद्धमा छैन, प्रभु विरुद्ध तर। "
16:9 मोशाले पनि हारूनलाई भन्नुभयो: "इस्राएलका छोराहरू सम्पूर्ण मण्डलीलाई भन्नुहोस्, 'प्रभु अघि दृष्टिकोण. उहाँले आफ्नो गनगन सुने छ लागि। ' "
16:10 र हारून इस्राएलका छोराहरू सम्पूर्ण विधानसभा कुरा गर्दा, तिनीहरूले उजाडस्थानमा तिर बाहिर देख्यो. अनि हेर, प्रभुको महिमा बादलमा मा देखा.
16:11 त्यसपछि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, यसो:
16:12 "म इस्राएलका छोराहरू गनगन सुनेका. तिनीहरूलाई भन्न: 'साझमा, तपाईं शरीर खान हुनेछ, र बिहान, तपाईं रोटी भरिएको हुनेछ. र तपाईं म प्रभु तपाईंको परमेश्वर हुँ भनेर थाहा हुनेछ। ' "
16:13 त्यसैले, यो साँझ भयो: quails, माथि बढ्दो, शिविरमा ढाकिएको. त्यसै गरी, बिहानी पख, एक शीत शिविर आसपास सबै राख्नु.
16:14 र यो पृथ्वीको अनुहार ढाकिएको थियो जब, यसलाई देखा, उजाडस्थानमा, सानो र भने एक pestle संग चोट, जमीनमा hoar-चिसो समान.
16:15 इस्राएलका छोराहरू यो देखेका थिए जब, तिनीहरूले अर्को एक भन्नुभयो: "Manhu?"जसको अर्थ" यो के हो?"तिनीहरूले थाहा थिएन के यो थियो. मोशाले तिनीहरूलाई भने: "यो कि प्रभु तपाईं खान दिइएको छ रोटी छ.
16:16 यो प्रभु निर्देशन छ कि शब्द छ. खान पर्याप्त छ रूपमा प्रत्येक एक यो धेरै सङ्कलन गरौं. प्रत्येक टाउको लागि एक ओमेर. जो पाल बस्ने आफ्नो प्राण संख्या अनुसार, त्यसैले तपाईं यो हुनेछ। "
16:17 र इस्राएलका छोराहरू यति गरे. र तिनीहरूले संकलित: अझै बढी, अरूलाई कम.
16:18 र उनि एक ओमेर को उपाय मापन. जसले थप संकलित, धेरै छैन; न त कम तयार जसले गरे, धेरै सानो फेला. तर हरेक एक तिनीहरूले खान सके के अनुसार भेला.
16:19 मोशाले तिनीहरूलाई भने, "कुनै एक यो कुनै पनि पछि बिहान सम्म छोड्न गरौं।"
16:20 र तिनीहरूले उहाँलाई सुनेनन्, तर तिनीहरू बिहान सम्म पछि यो केही बाँकी, र यो कीडे संग दल गर्न थाले, र यो putrefied. मोशाले तिनीहरूलाई विरुद्ध रिसाए.
16:21 त्यसपछि प्रत्येक एक संकलित, बिहानी पख, धेरै खान पर्याप्त हुनेछ रूपमा. र सूर्य तातो भयो पछि, यो पग्लियो.
16:22 तर मा छैटौं दिन, तिनीहरूले एक डबल भाग संकलित, छ, प्रत्येक मानिस लागि दुई omers. त्यसपछि भीड बीच सबै नेताहरूले आए, र तिनीहरूले मोशालाई संग discoursed.
16:23 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "यो प्रभु के भन्नु भएको छ छ: भोलि, विश्राम दिन बाँकी दिन, प्रभुको पवित्र गरिएको छ. जो गरेका थियो, अब यसलाई के. र जो पकाएको हुनेछ, अब यसलाई पकाउन. माथि बायाँ गरिएका हुनेछ, त्यसपछि केहि, बिहान सम्म यो भण्डारण गर्नुहोस्। "
16:24 मोशाले निर्देशन दिनुभएको थियो र तिनीहरूले बस गरे, र यो putrefy थिएन, न त त्यहाँ पाइने कुनै पनि कीडे थिए.
16:25 र मोशाले भने: "आज यो खानुहोस्, यसलाई प्रभुको विश्राम दिन छ किनभने. आज यो क्षेत्रमा फेला गरिनेछ.
16:26 छ दिनको लागि भेला. तर सातौं दिन, यसलाई प्रभुको विश्राम दिन छ, जो कारण लागि यो भेटिएन गरिनेछ। "
16:27 र सातौं दिन आइपुगे. र केही मान्छे को, यसलाई सङ्कलन बाहिर जा गर्न, यो पाउनुभयो.
16:28 त्यसपछि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "मेरो आज्ञाहरू र मेरो व्यवस्था पालन गर्न तपाईं कसरी लामो अनिच्छुक हुनेछ?
16:29 कसरी प्रभु तपाईं विश्राम दिन दिइएको छ हेर्नुहोस्, र, किनभने यो, मा छैटौं दिन उहाँले एक डबल भाग तपाईं वितरण. प्रत्येकले आफ्नै संग रहने गरौं, र कुनै एक सातौं दिन आफ्नो स्थान निस्कनेछ गरौं। "
16:30 र मान्छे सातौं दिन विश्राम दिन पालन.
16:31 र इस्राएलका घर यसको नाम भनिन्छ 'मन्ना।' यो सेतो धनिया बीउ जस्तै थियो, र यसको स्वाद मह संग गहुँको पीठो जस्तै थियो.
16:32 त्यसपछि मोशाले भने: "यो प्रभु निर्देशन छ कि शब्द छ: यो एक ओमेर भर्न, र यो अगाडी हिड भविष्य पुस्ताका लागि राखिने गरौं, तिनीहरूले रोटी थाहा हुन सक्छ भनेर, जो संग म उजाडस्थानमा तपाईं nourished, जब तपाईं मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व गरेका थिए। "
16:33 मोशाले हारूनलाई भने, "एक पोत लिनुहोस्, र यो मा मन्न राखे, रूपमा एक ओमेर धेरै पकड गर्न सक्षम छ. र प्रभुको दृष्टि मा भण्डारण, आफ्नो पुस्तामा लागि राख्न,
16:34 बस परमप्रभुले मोशालाई निर्देशन रूपमा। "अनि यति, हारूनले बासस्थानको मा राखिएको, आरक्षित मा.
16:35 अब इस्राएलका छोराहरू चालीस वर्षसम्म मन्न खाए, तिनीहरूले एक Habitable देशमा आइपुगे सम्म. यो खाना तिनीहरूले nourished थिए, तिनीहरूले कनान सीमानाहरू छोयो पनि सम्म.
16:36 अब एक ओमेर एक ephah एक दशौं भाग हो.
17:1 अनि त, इस्राएलका छोराहरू सम्पूर्ण भीड, चरणमा पापको मरुभूमि बाट बाहिर सेट भएको, प्रभुको वचन अनुसार, Rephidim मा शिविरमा गरे, जहाँ मान्छे पिउन लागि कुनै पानी थियो.
17:2 र मोशा विरुद्ध बहस, तिनीहरूले भने, "हामीलाई पानी दिनुहोस्, हामी पिउन सक्छन्। "अनि यति भनेर मोशाले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: "किन मलाई विरुद्ध तर्क? के कारणले तपाईं प्रभु लोभ्याउन गर्छन्?"
17:3 र त मान्छे भनेर ठाउँमा तिर्खाएको थिए, कारण पानी scarcity गर्न, र तिनीहरूले मोशा विरुद्ध गनगन गरे, यसो: "तपाईं किन हामीलाई मिश्र बाहिर जान कारण गर्नुभयो, हामी र हाम्रो छोराछोरीलाई मार्न ताकि, साथै हाम्रो गाई रूपमा, तिर्खा संग?"
17:4 त्यसपछि मोशाले प्रभु पुकारे, यसो: "मैले के यो मान्छे संग गर्नु पर्छ? एक सानो गर्दा थप र तिनीहरूले ढुङ्गा मलाई हुनेछ। "
17:5 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "मानिसहरू अघि जानुहोस्, र तपाईंसँग इस्राएलका बूढा केही लिन. र आफ्नो हात कर्मचारीहरु लिन, जो तपाईंलाई नदी प्रहार, र अग्रिम.
17:6 यसलाई, म पहिले त्यो ठाउँमा खडा हुनेछ, Horeb को रक मा. र तपाईं रक प्रहार गर्नेछु, र पानी यसलाई निस्कनेछ, मानिसहरूलाई पिउन सक्छ भनेर। "मोशाले इस्राएलका एल्डरहरूको दृष्टि मा त गरे.
17:7 र त्यो ठाउँ को नाम 'प्रलोभनको भनिन्छ,'किनभने इस्राएलका छोराहरू बहस को, र किनभने तिनीहरूले प्रभु परीक्षा, यसो: "प्रभु हामीलाई छ, कि हैन?"
17:8 र अमालेक आए र Rephidim मा इजरायल विरुद्ध लडेको.
17:9 मोशाले यहोशूलाई भन्नुभयो: "मानिसहरू छनौट. र तपाईं बाहिर जाने हुँदा, अमालेक लडाइँ. भोलि, म पहाडी माथि खडा हुनेछ, मेरो हात मा परमेश्वरको कर्मचारी पकड। "
17:10 मोशाले बोली थियो रूपमा यहोशू गरे, र उहाँले अमालेक विरुद्ध लडेको. तर मोशा र हारून र hur हिल को शीर्ष जानुभन्दा.
17:11 अनि जब मोशाले आफ्ना हात उठाएर, इस्राएलका प्रबल. तर उहाँले तिनीहरूलाई सानो हुँदा जारी गर्दा, अमालेक overcame.
17:12 त्यसपछि मोशाले हात भारी भयो. अनि त, एउटा ढुङ्गा लिएर, तिनीहरूले उहाँलाई मुनि यो राखिएको, र त्यो मा बसे. त्यसपछि हारून र hur दुवै पक्ष आफ्नो हात सम्हाल्नुभएको. र यो आफ्नो हात सूर्य को सेटिङ सम्म टायर गरेनन् भनेर भयो.
17:13 र यहोशू तरवार किनारा द्वारा उडान अमालेक र तिनका मानिसहरूलाई राख्न.
17:14 त्यसपछि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "यो लेख्नुहोस्, पुस्तक मा एक सम्झनाको रूपमा, र यहोशूको कान यसलाई छुटकारा. म स्वर्गमा अन्तर्गत अमालेकीहरूलाई स्मृति पुछिदिनुहुनेछ टाढा। "
17:15 मोशाले एक वेदी निर्माण. र उहाँले आफ्नो नाम भनिन्छ, 'भगवान, मेरो Exaltation। 'लागि उहाँले भन्नुभयो:
17:16 "प्रभुको सिंहासन को हात, र प्रभुको युद्ध, पुस्ता देखि पुस्ता गर्न अमालेक विरुद्ध हुनेछ। "
18:1 र जब Jethro, मिद्यानमा को पुजारी, मोशाको नातेदारले, परमेश्वरले मोशालाई लागि गरेको थियो सबै सुनेका, र आफ्नो मान्छे को लागि इजरायल, र प्रभु मिश्र टाढा इस्राएलका नेतृत्व गरेको,
18:2 उहाँले Zipporah ल्याए, मोशाको पत्नी, उहाँले उसलाई फर्कन जसलाई थियो,
18:3 र दुई छोरा, जसलाई एक भनिन्थ्यो Gershom, (आफ्नो बुबा भने लागि, "म विदेशी भूमिमा एक नव आगन्तुक भएको,")
18:4 र सत्य मा अन्य एलीएजर थियो, ("मेरो बुबा परमेश्वर लागि," उसले भन्यो, "मेरो मदतगार हुनुहुन्छ, र मलाई फिरऊनको को तरवार देखि उद्धार गरेको छ। ")
18:5 र यति Jethro, मोशाको नातेदारले, आफ्नो छोरा र उनको पत्नी संग, मरुभूमिमा मोशालाई आए, जहाँ उहाँले परमेश्वरको पर्वतमा अर्को encamped थियो.
18:6 र उहाँले मोशालाई शब्द पठाइएको, यसो: "म, Jethro, आफ्नो नातेदारले, तपाईं आएका छन्, आफ्नो पत्नी संग, र आफ्नो उनको दुई छोरा। "
18:7 र आफ्नो नातेदारले भेट्न बाहिर जाँदै, उहाँले reverenced र उहाँलाई चुम्बन. र तिनीहरूले शान्तिपूर्ण शब्दहरू प्रत्येक अन्य saluted. र त्यो पाल आइपुगेको थियो जब,
18:8 मोशाले आफ्नो नातेदारले बताए प्रभु इस्राएलका तर्फबाट फिरऊनलाई र मिश्रीहरूले गर्न गरेको थियो सबै कि, र यात्रामा तिनीहरूलाई befallen थियो जो सबै कठिनाइ, र प्रभु तिनीहरूलाई कसरी छुटकारा थियो.
18:9 र Jethro सबै प्रभु इस्राएलका लागि गरेको थियो राम्रो भन्दा gladdened थियो, उहाँले मिश्रीहरूका हात तिनीहरूलाई उद्धार गरेको थियो किनभने.
18:10 अनि उहाँले भन्नुभयो: "धन्य प्रभु छ, जो आफ्नो मान्छे मिश्रीहरूका हात बाट र फिरऊनलाई को हात बाट मुक्त छ; उहाँले मिश्र को हात बाट आफ्नो मान्छे उद्धार गरेको छ.
18:11 अब म ठूलो प्रभु सबै देवताहरूको माथि छ भनेर थाहा. तिनीहरूले विरुद्ध arrogantly हुन्थे किन यो छ। "
18:12 र यति Jethro, मोशाको नातेदारले, परमेश्वरको प्रस्ताव holocausts र बलिदान. र हारून इस्राएलका सबै प्राचीन संग आइपुगे, परमेश्वरको दृष्टि उहाँसँग रोटी खान क्रममा.
18:13 त्यसपछि, अर्को दिन, मोशाले मानिसहरूलाई न्याय गर्न बसे, र तिनीहरूले बिहान देखि मोशाले छेउमा उभिए, पनि साँझ सम्म.
18:14 र जब, को पाठ्यक्रम, आफ्नो नातेदारले उहाँले मानिसहरूका बीचमा गरे कि सबै देखे, उहाँले भन्नुभयो: "यो के हो भनेर मान्छे बीच के? तपाईं एक्लै किन बस्न गर्छन्, जबकि सबै मानिसहरू खडा, बिहान देखि, पनि साँझ सम्म?"
18:15 मोशाले तिनलाई जवाफ: "मानिसहरू परमेश्वरको जूरीको फैसला खोजिरहेका मलाई आउन.
18:16 र जब विवाद कुनै पनि प्रकारको तिनीहरूलाई बीच हुन्छ, तिनीहरूले बीचमा न्याय गर्न मलाई आउन, र परमेश्वर र उहाँका नियमहरू को आदेशहरू प्रकट गर्न। "
18:17 तर उहाँले भन्नुभयो, "यो राम्रो छ, तिमी के गर्दैछौँ.
18:18 तपाईं मूर्ख प्रयासमा द्वारा खपत हुनेछ, तपाईं र तपाईंसँग भएका यस मान्छे दुवै. कार्य आफ्नो बल परे छ; तपाईं सक्षम एक्लै यो सहन हुनेछैन.
18:19 तर मेरो शब्दहरू र योजना सुन्न, त्यसपछि परमेश्वरले तपाईंलाई साथ हुनेछ. परमेश्वरको सम्बन्धित छ जो कि मानिसहरूको उपलब्ध हुन, तिनीहरूले उहाँलाई के भन्नुहुन्छ संकेत गर्न ताकि,
18:20 र मानिसहरू समारोह गर्न प्रकट गर्न, र उपासनाको संस्कार, र बाटो जो तिनीहरूले उन्नति गर्नुपर्छ, र काम तिनीहरूले के गर्नुपर्छ भनेर.
18:21 त्यसपछि प्रदान, मानिसहरू सबै, मानिसहरू सक्षम र परमेश्वरको भय राख्ने, जसलाई मा सत्य छ र जो avarice घृणा, र तिनीहरूलाई tribunes देखि नियुक्त, र सयौं नेता, र अर्द्धशतकको को, र दसौं,
18:22 जो सबै समय मा मान्छे न्याय हुन सक्छ. त्यसपछि, जब ठूलो केहि भयो हुनेछ, तिनीहरूले तपाईंलाई यो संकेत हुन सक्छ, र तिनीहरूलाई मात्र कम मामिलामा न्याय गरौं. र त यो तपाईं को लागि हल्का हुन सक्छ, को बोझ अरूलाई बीचमा विभाजित भइरहेको.
18:23 तपाईं यो गर्नेछ भने, तपाईं परमेश्वरको आदेश पूरा हुनेछ, र तपाईं आफ्नो आदेशहरू पालन गर्न सक्षम हुनेछ. र यो सम्पूर्ण मानिसहरूलाई शान्ति आफ्नो ठाउँमा फर्कन हुनेछ। "
18:24 यो सुने भएको, मोशाले तिनलाई सुझाव थियो कि सबै गरे.
18:25 र इस्राएलका सबै virtuous मानिसहरू छान्ने, उहाँले मानिसहरूलाई को नेताहरूले तिनीहरूलाई नियुक्त: tribunes, र सयौं नेता, र अर्द्धशतकको को, र दसौं.
18:26 र तिनीहरू सबै कहिलेकाहीं मानिसहरूले न्याय. तर जे थप गम्भीर थियो, तिनीहरूले उहाँलाई उल्लेख, र तिनीहरूले मात्र सजिलो मामिलामा न्याय.
18:27 र उहाँले आफ्नो नातेदारले खारेज, जो, फिर्ता खोल्दै, आफ्नै देशमा गए.
19:1 मिश्र देशमा देखि इस्राएलका प्रस्थान को तेस्रो महिना मा, त्यो दिन मा, तिनीहरूले सिनाई को उजाडस्थानमा आइपुगे.
19:2 त्यसैले, Raphidim देखि बाहिर सेट, र सिनाई को मरुभूमि सीधा जा, तिनीहरूले नै ठाउँमा encamped, र त्यहाँ इस्राएलीहरू पहाड को क्षेत्र बाट टाढा आफ्नो पाल पिच.
19:3 त्यसपछि मोशाले परमेश्वरलाई जानुभयो. र प्रभु पहाड देखि उहाँलाई भनिन्छ, र, उहाँले भन्नुभयो: "यो तपाईं याकूबको घरमा भनौं, र इस्राएलका छोराहरू गर्न घोषणा:
19:4 'तपाईं म मिश्रीहरूले गर्न गरेका के देखेको छु, कुन तरिकामा म चीलले को पखेटा मा तपाईं लगे र म लागि लिएका छन् कसरी.
19:5 यदि, त्यसैले, तपाईं मेरो आवाज सुन्न हुनेछ, र तपाईं मेरो करार पालन गर्नेछन्, तपाईं सबै मान्छे बाहिर एक विशेष सम्पत्तिको मलाई हुनेछ. सबै को लागि पृथ्वी मेरो हो.
19:6 र तपाईं एक पूजाहारीको राज्य, र एक पवित्र जाति हुनेछ। 'यी तपाईंले इस्राएलका छोराहरू कुरा भन्ने शब्दहरू हुन्। "
19:7 मोशाले गए, र सँगै ती मानिसहरूलाई बीचमा जन्म द्वारा ठूलो कल, उहाँले सबै प्रभु आज्ञा दिनुभएको थियो जो शब्दहरू निस्केको सेट.
19:8 र सबै मानिसहरू सँगै प्रतिक्रिया: "प्रभु बोली छ कि सबै कुरा, मोशाले प्रभु गर्न मान्छे को शब्द सम्बन्धित थियो जब हामी गर्नु पर्छ। "अनि,
19:9 प्रभु उहाँलाई भने: "चाँडै अब, म एक क्लाउड को तुवालो तपाईं हुनेछ, ताकि मानिसहरूले मलाई बोल्दै सुन्न सक्छ, र तिनीहरूले तपाईंलाई लगातार विश्वास हुन सक्छ भनेर। "त्यसैले, मोशाले प्रभु गर्न मान्छे को शब्द रिपोर्ट,
19:10 जो उहाँलाई भने: "मानिसहरू जानुहोस्, र आज तिनीहरूलाई पवित्र, र भोलि, र तिनीहरूलाई आफ्नो लुगा धुनुपर्छ गरौं.
19:11 र तिनीहरूलाई तेस्रो दिन मा तयार होस्. तेस्रो दिन मा लागि, प्रभु धमकना हुनेछ, सबै मान्छे को दृष्टि मा, सीनै पर्वतमा भन्दा.
19:12 र तपाईं चारैतिर मानिसहरूको लागि सीमा स्थापना, र तपाईं तिनीहरूलाई भन्न हुनेछ: 'पहाड गर्न चढ्नु छैन हेरविचार लिनुहोस्, र यसको भागहरु नछोऊ. पर्वतमा स्पर्श गर्ने सबै, एक मृत्यु मर्नेछन्। '
19:13 हात उहाँलाई छुन हुँदैन, तर उहाँले ढुङ्गा चोट गरिनेछ, वा उहाँले डार्ट्स संग मार्फत घायल गरिनेछ. चाहे त्यो एक जनावर वा मानिस हुन, उहाँले बाँच्न हुँदैन. लागि बिगुल ध्वनि सुरु गर्दा, सायद तिनीहरूले पहाड तिर गएर सक्छ। "
19:14 र मोशाले मानिसहरूलाई पहाड बाट आए, र उहाँले तिनीहरूलाई पवित्र. र तिनीहरूले आफ्नो लुगा धोए थियो जब,
19:15 उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "तेस्रो दिन मा तयार हुनुहोस्, र पत्नीलाई नजिक छैन। "
19:16 र अब, तेस्रो दिन आइपुगे र बिहान dawned. अनि हेर, thunders सुने गर्न थाले, र पनि बिजुली निस्क्यो, र एक धेरै बाक्लो बादल पर्वतमा ढाकिएको, र बिगुल को हल्ला vehemently resounded. र शिविरमा थिए जो मानिसहरू डराएका थिए.
19:17 मोशाले तिनीहरूलाई नेतृत्व थियो जब परमेश्वरले पूरा गर्न, शिविरमा को स्थान बाट, तिनीहरूले पहाड को आधार मा उभिए.
19:18 त्यसपछि सीनै पर्वतमा सबै धूम्रपान थियो. प्रभु लागि आगोले यो भन्दा descended थियो, र धुवाँ यो देखि जानुभयो, दन्किरहेको देखि रूपमा. र सम्पूर्ण पहाड भयानक थियो.
19:19 र बिगुल ध्वनि बिस्तारै जोर हुन वृद्धि, र अब हुन विस्तार. मोशाले बताइरहेका थिए, र परमेश्वरले उहाँलाई जवाफ थियो.
19:20 र प्रभु सीनै पर्वतमा भन्दा descended, पर्वतमा को धेरै माथि, र उहाँले आफ्नो शिखर मोशाले भनिन्छ. र उहाँले त्यहाँ जानुभयो जब थियो,
19:21 उहाँले तिनलाई भन्नुभयो: "धमकना, र साक्षी मानिसहरूलाई कल, नत्र तिनीहरूले सीमा transgress गर्न इच्छुक हुन सक्छ, प्रभु हेर्न ताकि, र तिनीहरूलाई एक धेरै ठूलो जमात नष्ट हुन सक्छ.
19:22 त्यसै गरी, प्रभु तिर भेट्नुपर्छ जसले पूजाहारीहरू, तिनीहरूलाई पवित्र पारियोस्, उहाँले तिनीहरूलाई तल प्रहार नत्र। "
19:23 र मोशाले प्रभु भन्नुभयो: "मानिसहरू सीनै पर्वतमा गर्न चढ्नु गर्न सक्षम छन्. तपाईं testified लागि, र तपाईं आज्ञा, यसो: 'पहाड वरिपरि सीमा सेट, र यो पवित्र। ' "
19:24 अनि प्रभु उहाँलाई भने, "जानुहोस्, धमकना. र तपाईं चढ्नु पर्छ, र तपाईंसँग हारून. तर पूजाहारीहरूले वा मान्छे सीमा transgress छैन गर्छन्, न त प्रभु गर्न चढ्नु, सायद नत्र उहाँले मृत्यु तिनीहरूलाई राख्नु हुन सक्छ। "
19:25 र मोशाले मानिसहरूलाई descended, र उहाँले तिनीहरूलाई सबै कुरा व्याख्या.
20:1 र प्रभु यी सबै शब्दहरू:
20:2 "म प्रभु तपाईंको परमेश्वर हुँ, जसले तपाईंलाई मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व, servitude घरमा बाहिर.
20:3 तिमी मलाई अघि अनौठो देवताहरूको छैन पर्छ.
20:4 तपाईं आफैलाई एक graven छवि लागि बनाउन हुँदैन, न त केहि को एक स्वरूपमा माथि वा तल पृथ्वीमा स्वर्गमा छ, न त ती कुराहरू जो पृथ्वीमा अन्तर्गत पानी हो को.
20:5 तपाईंले तिनीहरूलाई पुजा गर्नु हुँदैन, न त तिनीहरूको पूजा गर्नेछन्. म प्रभु तपाईंको परमेश्वर हुँ: बलियो, जोसिलो, मलाई घृणा गर्नेहरूलाई तेस्रो र चौथो पुस्ता गर्न छोराहरू मा बाबु को iniquity भ्रमण,
20:6 र मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई हजारौं कृपा देखाउन र मेरो आदेशहरू पालन.
20:7 तपाईं व्यर्थमा आफ्नो परमेश्वरको प्रभुको नाम लिन हुँदैन. लागि प्रभु अहानिकारक एक झूटो प्रभु आफ्नो परमेश्वरको नाम लिन्छ पकड छैन.
20:8 तपाईं विश्राम दिन को दिन पवित्र छन् कि सम्झना.
20:9 छ दिनको लागि, तपाईं काम र आफ्नो सबै कार्यहरू पूरा गर्नेछ.
20:10 तर सातौं दिन परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको विश्राम दिन छ. तपाईंले यसलाई कुनै पनि काम हुँदैन: तपाईं र तपाईंको छोरा र आफ्नो छोरी, तपाईंको पुरुष सेवक र आफ्नो महिला सेवक, तपाईंको जनावर र आफ्नो ढोकाहरू भित्र छ जो नव आगन्तुक.
20:11 लागि छ दिन प्रभु स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु, र समुद्र, र सबै कुराहरू भनी छन्, र त त्यो सातौं दिन विश्राम. यस कारण, प्रभु विश्राम दिन को दिन आशीर्वाद र यो पवित्र छ.
20:12 आफ्नो बुबा र आमाको आदर गर्नू, तपाईं भूमि मा लामो जीवन हुन सक्छ भनेर, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो.
20:13 तपाईं हत्या हुँदैन.
20:14 तपाईं व्यभिचार हुनेछैन.
20:15 तपाईं चोरी नहीं गर्नेछन्.
20:16 तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई विरुद्धमा झूटा गवाही बोल्न हुँदैन.
20:17 तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई घरमा Covet छैन; न तपाईं आफ्नो पत्नी चाहन्छन् पर्छ, न त पुरुष सेवक, न त महिला सेवक, न त गोरु, न त गधा, न त केहि आफ्नो हो भनेर। "
20:18 त्यसपछि सबै मानिसहरू आवाज छलफल, र रोशनी, र बिगुल ध्वनि, र धूम्रपान पहाड. र आत्तिनुपर्ने र डर संग प्रहार भइरहेको, तिनीहरूले एक दूरी उभिरहेका,
20:19 मोशालाई यसो: "हामीलाई भन्नुहोस्, र हामी सुन्न हुनेछ. प्रभु हामीलाई कुरा गर्न दिनुहोस्, सायद नत्र हामी मर्न सक्छ। "
20:20 र मोशाले मानिसहरूलाई भने: "नडराऊ. परमेश्वरको लागि परीक्षण गर्न आए, र भनेर उहाँलाई खूंखार तपाईंसँग हुन सक्छ, र तपाईं पाप छैन। "
20:21 र मान्छे टाढा उभिए. तर मोशाले तुवालो तिर नजिक, जो परमेश्वरको थियो.
20:22 त्यसपछि, परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "यो तपाईं इस्राएलका छोराहरूलाई भनौं: तपाईं म स्वर्गमा तपाईंले बोलेको छु भनेर देखेको छ.
20:23 तपाईं चाँदी देवताहरूको बनाउन हुँदैन, न त सुन को आफूलाई देवताहरूको लागि बनाउन पर्छ.
20:24 तिमी मेरो लागि पृथ्वी एउटा वेदी बनाउन पर्छ, र तपाईं यसलाई मा आफ्नो holocausts र शान्ति-प्रसाद प्रस्ताव पर्छ, तपाईंको भेडा र बैलों, हरेक ठाउँमा जहाँ मेरो नाम को स्मृति हुनेछ. म तपाईंलाई आउनेछ, र म दिनुहुनेछ.
20:25 र तिमी मेरो लागि ढुङ्गा को एक वेदी बनाउन भने, तपाईं कट पत्थर देखि निर्माण हुँदैन; तपाईं यो भन्दा एक उपकरण उचाल यदि लागि, यो defiled गरिनेछ.
20:26 तिमी मेरो वेदी गर्न कदम द्वारा चढ्नु हुँदैन, नत्र आफ्नो nakedness प्रकट। "
21:1 "यी तपाईंले तिनीहरूलाई अघि राख्न पर्छ जो इन्साफ:
21:2 तपाईं एक हिब्रू दास किन्न भने, छ वर्ष उहाँले तपाईंलाई सेवा गर्नेछौं; सातौं मा, उहाँले खुलेर प्रस्थान गर्नेछ, शुल्क बिना.
21:3 जो वस्त्र उहाँले आइपुगे, संग जस्तै उसलाई प्रस्थान गरौं. उहाँले एक पत्नी छ भने, पत्नी पनि प्रस्थान गर्नेछ, एउटै समयमा.
21:4 तर उहाँलाई आफ्नो प्रभु एक पत्नी दिनुभयो भने, र त्यो छोरा र छोरी सार्ने छ, महिला र उनको बच्चाहरु उनको प्रभु आबद्ध पर्छ. यद्यपि अझै पनि, उहाँले आफ्नो वस्त्र बाहिर जाने.
21:5 र यदि सेवक भन्न हुनेछ, 'म मेरो प्रभु प्रेम, र मेरी श्रीमती र छोराछोरीलाई, म खुलेर प्रस्थान छैन,'
21:6 त्यसपछि आफ्नो प्रभु आकाश उसलाई लागि एक भेटी गर्नेछ, र यो ढोका र पोस्ट लागू गरिनेछ, र उहाँले एक AWL आफ्नो कान पियर्स हुनेछ. र उहाँले perpetuity मा आफ्नो सेवक हुनेछ.
21:7 जो कोहीले बेच्छ भने आफ्नो छोरी सेवक हुन, एक महिला सेवक बाहिर जान accustomed छ रूपमा त्यो प्रस्थान छैन.
21:8 त्यो उनको प्रभुको आँखा मन पर्दैन भने, त्यो बुझाइएको थियो जसलाई, उहाँले उनको खारेज गर्नेछन्. तर उहाँले एक विदेशी मानिसहरूलाई उनको बेच्न कुनै अधिकार पाउनेछ, पनि उनको despises यदि.
21:9 तर उहाँले आफ्नो छोरा उनको betrothed छ भने, उहाँले छोरी संग अनुकूलन अनुसार उनको व्यवहार गर्नेछन्.
21:10 र यदि त्यो उहाँको लागि अर्को लिन्छ, उहाँले प्रथम वैवाहिक प्रदान गर्नेछ, र वस्त्र, र उनको नैतिक शुद्धता को मूल्य इन्कार छैन.
21:11 उहाँले यी तीन कुराहरू के गर्दैन भने, त्यो खुला प्रस्थान गर्नेछ, पैसा बिना.
21:12 जसले एक मानिस प्रहार, हत्या इरादा, मृत्युदण्ड गरिनेछ.
21:13 तर उहाँले उसलाई प्रतीक्षा मा झूठ गर्नुभएन भने, तर परमेश्वरले आफ्नो हातमा उहाँलाई बुझाइएको, त्यसपछि म जो उहाँले भाग्न गर्नुपर्छ लागि एक ठाउँ नियुक्त गर्नेछ.
21:14 यदि कसैले हत्या deliberation आफ्नो छिमेकीलाई, पर्खाइ मा झूट द्वारा, तिमी मेरो वेदी देखि उसलाई दूर आंसू पर्छ, उहाँले मर्न सक्छ भनेर.
21:15 जसले आफ्नो बुबा वा आमा प्रहार एक मृत्यु मर्नेछन्.
21:16 जसले एक मानिस चोरी र उसलाई बेचिएको हुनेछ, अपराध को दोषी गरिएको होने, मृत्युदण्ड गरिनेछ.
21:17 जसले आफ्नो बुबा वा आमा को दुष्ट बोल्छ एक मृत्यु मर्नेछन्.
21:18 यदि मानिसहरू quarreled हुनेछ, र तिनीहरूलाई को एक पत्थर वा मुट्ठी आफ्नो छिमेकीलाई प्रहार गरेको छ, र उहाँले मर्दैन, तर बिस्तर मा निहित छ,
21:19 उहाँले फेरि उठ्छ र आफ्नो कर्मचारी मा बाहिर हिंड्न सक्छौं भने, उहाँले जो उसलाई निर्दोष हुनेछ प्रहार, तर उहाँले उहाँको कामद्वारा र चिकित्सकहरु को लागत लागि पर्याप्त चुकौता बनाउँछ भने मात्र.
21:20 जसले एक कर्मचारी आफ्नो पुरुष वा महिला सेवक प्रहार, र यदि तिनीहरूले आफ्ना हात द्वारा मृत्यु, उहाँले एक अपराध को दोषी हुनेछ.
21:21 तर उहाँले एक दिन वा दुई को लागि survives यदि, उहाँले दण्ड विषय हुन हुँदैन, यसलाई आफ्नो पैसा छ किनभने.
21:22 यदि मानिसहरू quarreled हुनेछ, र तिनीहरूलाई को एक गर्भवती महिला प्रहार गरेको छ, र फलस्वरूप त्यो miscarries, तर त्यो आफु survives, महिला को पति उहाँबाट आवेदन पर्छ उहाँले धेरै क्षति विषय हुनेछ, वा रूपमा arbitrators न्याय.
21:23 तर यदि उनको मृत्यु पछि हुनेछ, उहाँले एक जीवन को लागि एक जीवन चुक्ता हुनेछ,
21:24 एक आँखा को लागि एक आँखा, एक दाँत लागि दाँत, एक हात को लागि एक हात, एक खुट्टा को लागि एक खुट्टा,
21:25 एक खुर्केर सफा गर्नु लागि खुर्केर सफा गर्नु, एक घाउ लागि घाउ, एक चोट को लागि एक चोट.
21:26 जो कोहीले आफ्नो पुरुष वा महिला सेवक को आँखा प्रहार गरेका छन् भने, एक आँखा तिनीहरूलाई बाँकी भएको, उहाँले खुलेर तिनीहरूलाई जारी गर्नेछ, किनभने आँखा को त्यो बाहिर राख्नु छ कि.
21:27 त्यसै गरी, यदि उसले आफ्नो पुरुष वा महिला सेवक को एक दाँत बाहिर घचघच्याउनुहुन्छ, उहाँले यस्तै तिनीहरूलाई खुलेर जारी गर्नेछ.
21:28 एक बैल एक मानिस वा आफ्नो सिङ संग एक महिला प्रहार गरेको छ भने, तिनीहरूले मर्न भने र, यसलाई ढुंगाले हानेर गरिनेछ. र यसको शरीर खाएको हुन पर्छ; पनि, यस गोरु मालिक निर्दोष हुनेछ.
21:29 तर गोरु आफ्नो सिङ संग धक्का गरिएको थियो भने, हिजो र दिन अघि देखि, र तिनीहरूले आफ्नो मालिक चेतावनी दिए, तर त्यो सीमित राख्नु भएन, र यो एक मानिस वा एक महिला हत्या हुनेछ, त्यसपछि गोरु ढुंगाले हानेर गरिनेछ, र आफ्नो मालिक हत्या गरिनेछ.
21:30 तर यदि तिनीहरूले उहाँलाई मूल्य लगाएको छ, उहाँले दिन हुनेछ, आफ्नो जीवनको लागि विनिमय मा, जो आग्रह छ.
21:31 त्यसै गरी, यदि यो एक छोरा वा यसको सिङसहित एक छोरी प्रहार गरेको छ, यो एक समान जूरीको फैसला विषय हुनेछ.
21:32 यो एक पुरुष वा महिला सेवक आक्रमण भने, उहाँले आफ्नो प्रभु गर्न चाँदी तीस शेकेल दिन पर्छ, अहिलेसम्म साँचो गोरु ढुंगाले हानेर गरिनेछ.
21:33 एक मानिस digs वा cistern खोल्छ भने, र यो कवर गर्दैन, र एक गोरु वा गधा यसलाई मा पतन,
21:34 त्यसपछि cistern को मालिकले जनावरहरु को मूल्य चुक्ता गर्नेछु, र के मरिसकेको छ उहाँलाई आबद्ध हुनेछ.
21:35 यदि पराई घाउ अर्को गोरु को बैल, र यो मृत्यु भएको छ, त्यसपछि तिनीहरूले प्रत्यक्ष गोरु बेच्न र मूल्य विभाजित गर्नेछ, तर मरेको एक को लास तिनीहरूले बीच वितरण गर्नेछ.
21:36 तर उहाँले आफ्नो गोरु यसको सिङसहित धक्का भनेर थाह थियो भने, हिजो र दिन अघि, र यसको मालिकले यसलाई सीमित राख्नु भएन, त्यसपछि उहाँले एक गोरु लागि गोरु चुक्ता गर्नेछु, र उहाँले सारा लास प्राप्त गर्नेछ। "
22:1 "कसैले एउटा गोरु वा भेडा चोरी हुनेछ भने, र यदि त्यो हत्या वा बेच्छ, त्यसपछि उहाँले एक गोरु लागि पाँच बैलों बहाल गर्नेछ, र एक भेडा लागि चार भेडा.
22:2 चोर एक घर बिच्छेद पत्ता हुनेछ गरिएका यदि, वा यसलाई अन्तर्गत digging, र त्यो एक नश्वर घाउ प्राप्त गरेको छ, उहाँले जो रगतको दोषी छैन उसलाई तल प्रहार.
22:3 तर सूर्य उहाँले गर्नुभयो भने पुगेको थियो, उहाँले एक हत्यारो perpetrated छ, र उहाँले मर्नेछन्. उहाँले चोरी लागि चुकौता बनाउन हालतमा छ गर्दैन भने, उहाँले बेच्न पर्छ.
22:4 जो यदि उहाँले चोरेछ उहाँलाई फेला परेन गर्नुपर्छ, एक जीवित प्राणीहरूको, एक गोरु त, वा गधा, वा भेडा, उहाँले डबल चुक्ता गर्नेछु.
22:5 यदि एक क्षेत्र वा दाखबारी कुनै पनि क्षति छ, उहाँले पराई भूमि मा खर्क आफ्नो गाई जारी गरेको छ जब, उहाँले आफ्नै क्षेत्रमा छ के को सबै भन्दा राम्रो चुक्ता गर्नेछु, वा आफ्नै दाखबारीको, को क्षति को अनुमान अनुसार.
22:6 आगो ब्रश देखि प्रस्थान पत्ता हुनेछ गरिएका यदि, र अन्नको स्ट्याकहरूको मा पकड लिइरहेको, वा बाली मा क्षेत्रहरू खडा, जसले आगो को क्षति चुक्ता गर्नेछु ignited.
22:7 जो कोहीले पैसा सुम्पिएको छ भने, वा कन्टेनर, आफ्नो मित्र राख्न, र यी यदि तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने एक देखि चोरी भएको छ: यदि चोर पाइन्छ, उहाँले डबल चुक्ता गर्नेछु.
22:8 चोर अज्ञात छ भने, घर को मालिक आफ्नो छिमेकीलाई को माल मा आफ्नो हात राख्नु भएन भनेर कसम गर्न आकाश अघि ल्याइनेछ,
22:9 कुनै पनि ठगी perpetrate रूपमा त, एक बैल संग जस्ता, वा गधा, वा भेडा, वा वस्त्र, न त क्षति गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने केहि गर्न. दुवै को मामला आकाश अघि ल्याए गरिनेछ. र तिनीहरूले उहाँको विरुद्धमा न्याय दिन भने, उहाँले आफ्नो छिमेकीलाई गर्न डबल चुक्ता गर्नेछु.
22:10 कुनै एक गधा सुम्पिएको छ भने, एक बैल, एक भेडा, वा आफ्नो छिमेकीलाई को पालन गरेमा कुनै पनि पशु, र यो मृत्यु हुनेछ, वा अक्षम बन्न, वा शत्रुहरूले कब्जा गरेको छ, र कुनै एक देखे,
22:11 त्यसपछि त्यहाँ तिनीहरूलाई बीच एक शपथ हुनेछ, उहाँले आफ्नो छिमेकीलाई को माल मा आफ्नो हात राख्नु भएन कि. र मालिकले शपथ स्वीकार गर्नेछु, र उहाँले चुकौता बनाउन छैन compelled गरिनेछ.
22:12 तर यदि यो चोरी द्वारा लगिएको गरिएको हुनेछ, उहाँले मालिक गर्न हर्जाना चुक्ता गर्नेछु.
22:13 यदि यो एक जङ्गली जनावर द्वारा खाएको गरिएको छ, उसलाई उसलाई के मृत्यु भएको ले, त्यसपछि उहाँले चुकौता बनाउन हुँदैन.
22:14 जो कोहीले आफ्नो छिमेकीलाई यी कुराहरू कुनै पनि borrows भने, र यो मृत्यु वा मालिक वर्तमान थिएन जब असक्षम गरिएको छ, उहाँले चुकौता बनाउन compelled गरिनेछ.
22:15 तर मालिक उपस्थित थियो भने, उहाँले चुकौता बनाउन हुँदैन, विशेष गरी यदि यो भाडामा कामको लागि ल्याएको थियो.
22:16 एक मानिस एक कुमारी अझै betrothed छैन हराउनु नेतृत्व गरेको छ भने, र उहाँले तिनलाई सुत्थ्यौं छ, उहाँले उनको दाइजो तिर्न र एक पत्नी रूपमा उनको पाउनेछ.
22:17 यदि कुमारी पिता छैन उनको दिन इच्छुक छ, उहाँले एक दाइजो को तरिका अनुसार पैसा तिर्न पर्छ, जो कन्याहरूले प्राप्त गर्न accustomed छन्.
22:18 तपाईं बाँच्न कालो कला को चिकित्सकहरु अनुमति छैन.
22:19 जसले जनावरको यौन सहवास छ मृत्युदण्ड गरिनेछ.
22:20 जसले देवतालाई immolates, प्रभु भन्दा अन्य, हत्या गरिनेछ.
22:21 तपाईं नव आगन्तुक सताउन छैन, न त उसलाई पिरोल्छ पर्छ. तिमीहरू लागि मिश्र देशमा newcomers एक पटक थिए.
22:22 तपाईं एक विधवा वा अनाथ हानि हुँदैन.
22:23 तपाईंले तिनीहरूलाई चोट भने, तिनीहरूले मलाई कराउन हुनेछ, र म आफ्नो कराउँदै सुन्न हुनेछ.
22:24 र मेरो उतेजना enraged गरिनेछ, र म तरवारले तल तपाईं प्रहार गर्नेछ. र पत्नीलाई विधवा हुनेछ, र आफ्नो छोरा अनाथ हुनेछ.
22:25 तपाईं बीचमा बस्ने मेरो मान्छे को गरीब पैसा उधारो भने, तपाईं एक कलेक्टर जस्तै तिनीहरूलाई बाध्य गर्नु हुँदैन, न त usury तिनीहरूलाई दमन.
22:26 तपाईं एक बचन रूपमा आफ्नो छिमेकीलाई देखि एक लुगा लिन भने, तपाईं सूर्य को सेटिङ अघि फेरि उहाँलाई यो फिर्ता पर्छ.
22:27 यसको लागि उसले आफूलाई ढाक्न छ सबै छ, आफ्नो शरीर लुगा लगाउनु गर्न; न त उहाँले केहि छैन जो सुत्न. उहाँले मलाई रुन्छिन् भने, म उहाँलाई सुन्न हुनेछ, किनभने म दयालु छु.
22:28 तपाईं आकाश disparage छैन, र तपाईं आफ्नो मान्छे को नेता को दुष्ट कुरा छैन.
22:29 तपाईं आफ्नो दशांश र आफ्नो पहिलो-फल तिर्ने ढिलाइ छैन. तिमी मलाई आफ्नो छोरा को जेठो दिन पर्छ.
22:30 तपाईं बैलों र भेडाको उन संग त्यसै गर्नु पर्छ. सात दिनको लागि, यसलाई आफ्नो आमा संग गरौं; आठौं दिन मलाई यो चुक्ता गर्नेछु.
22:31 तिमी मेरो लागि पवित्र मानिसहरू हुनेछ. शरीरका, जो बाट जन्तुहरूसित स्वाद हुनेछ, तपाईं खान छैन, तर तपाईं कुकुर यसलाई फेंक हुनेछ। "
23:1 "तपाईं एक झूट आवाज स्वीकार गर्नेछैनन्. को impious मा तर्फबाट झूटा गवाही दिन ताकि न तपाईं आफ्नो हात सामेल हुनेछन्.
23:2 तपाईं दुष्ट गरिरहेको मा भीड पालना हुँदैन. न त तपाईं न्याय मा हराउनु जानेछौ, बहुमत राय संग सहमत द्वारा, सत्य अलग्गै.
23:3 त्यसै गरी, तपाईं गरिब को न्याय मा दया देखाउन हुँदैन.
23:4 तपाईं एउटा गोरु वा आफ्नो शत्रु को एक गधा मार्फत आउन भने, जो बरालिएकाछौं छ, उहाँलाई यो फिर्ता नेतृत्व.
23:5 तपाईं एक को गधा हेर्न भने जसले तपाईंलाई घृणा, यसको बोझ अन्तर्गत खसेको, तपाईं उसलाई यसलाई नउठाई द्वारा पारित गर्नेछ.
23:6 तपाईं गरिब को न्याय मा हटना छैन.
23:7 तपाईं झूट भाग्न पर्छ. निर्दोष र बस तपाईं मार्न हुँदैन. म impious त्याग्नुपर्छ लागि.
23:8 न त तपाईं रिश्वत स्वीकार गर्नेछु, जो पनि बुद्धिमानी अन्धा र बस शब्दहरू subvert.
23:9 तपाईं एक sojourner सताउन छैन, लागि एक नव आगन्तुक को जीवन थाहा. तपाईं को लागि आफूलाई पनि मिश्र देशमा sojourners थिए.
23:10 छ वर्ष, तपाईं आफ्नो भूमि छर्न र यसको उत्पादन भेला गर्नेछु.
23:11 तर सातौं वर्षमा, तपाईं यसलाई जारी र यो आराम गर्न गराउन पर्छ, त्यसैले आफ्नो मान्छे को गरीब खान सक्छ. र जो रहलपहल, क्षेत्र को जन्तुहरूसित यसलाई खान गरौं. त्यसैले तपाईंले आफ्नो दाखबारी र आफ्नो जैतून निकुन्ज संग गर्नु पर्छ.
23:12 छ दिनको लागि, तपाईं काम गर्नेछ. सातौं दिनमा, तपाईं बन्द हुनेछन्, आफ्नो गोरु र आफ्नो गधा आराम गर्न सक्छ भन्ने त, र त नव आगन्तुक र आफ्नो handmaid छोरा ताजा हुन सक्छ कि.
23:13 म भने गरेको सबै सुरक्षित. र विदेशी देवताहरूको नाम तपाईंलाई कसम छैन; न यी आफ्नो मुखबाट सुनेका गरिनेछ.
23:14 प्रत्येक वर्ष तीन पटक, तपाईं मलाई चाडहरूमा मनाउन पर्छ.
23:15 तपाईं अखमिरी रोटी को solemnity पालन गर्नेछु. सात दिन लागि अखमिरी रोटी खानु पर्छ, म निर्देशन गरेझैं, नयाँ अन्नको महिनाको समय, तपाईं मिश्रबाट प्रस्थान गर्दा. तिमी मेरो दृष्टि खाली-हस्तान्तरण देखा पर्छ,
23:16 यसको लागि आफ्नो काम को पहिलो-फल को कटनीको solemnity छ, जो तपाईं क्षेत्रमा छरिएको छ. त्यसै गरी, यो सिजन अन्त मा एक solemnity छ, तपाईं क्षेत्र आफ्नो सबै बाली भेला हुनेछ जब.
23:17 एक वर्ष तीन पटक, आफ्नो सबै पुरुषहरु प्रभु तपाईंको परमेश्वरको सामु देखा पर्छ.
23:18 तपाईं खमिर भन्दा मेरो शिकार रगत immolate छैन, न त मेरो solemnity को बोसो बिहान सम्म रहनेछ.
23:19 तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको घरमा देशमा पहिलो अन्न बोक्न पर्छ. तपाईं आफ्नो आमा को दूध मा एक युवा बाख्रा पकाउन छैन.
23:20 हेर, म मेरो दूतलाई पठाउने, जसले तपाईंलाई अघि जाने, र आफ्नो यात्रा मा तपाईं संरक्षण, र म तयार छु भन्ने ठाउँ मा तपाईं नेतृत्व.
23:21 उहाँलाई पालन, र आफ्नो आवाज सुन्न, र अवहेलना उहाँलाई पकड छैन. उहाँले तपाईंलाई पाप जब तपाईं जारी गर्नेछन् लागि, र मेरो नाम उहाँलाई छ.
23:22 तर यदि तपाईं आफ्नो आवाज सुन्न र म भन्न सबै के, म आफ्नो शत्रुहरूलाई शत्रु हुनेछ, र म जसले तपाईंलाई दुर्व्यवहार र अन्याय सहनु ती सताउनेछैन.
23:23 र मेरो स्वर्गदूतले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछ, र उहाँले एमोरी तपाईं ल्याउनेछ, र हित्ती, र Perizzite, र कनानी, र Hivite, र Jebusite, जसलाई म नाश गर्नेछ.
23:24 तपाईं आफ्नो देवताहरूलाई पुजा गर्नु हुँदैन, न त तिनीहरूको पूजा. तपाईं आफ्नो काम गर्न हुँदैन, तर तपाईंले तिनीहरूलाई नाश र आफ्नो मूर्तिहरू अलग पर्छ.
23:25 र तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको सेवा गर्नेछौं, म आफ्नो रोटी र आफ्नो पानी आशीर्वाद ताकि, र म आफ्नो बीचमा देखि रोग लाग्न सक्छ भनेर टाढा.
23:26 तपाईंको देशमा निरर्थक वा बाँझो व्यक्तिहरूलाई छैन. म आफ्नो दिन को संख्या अप भर्न हुनेछ.
23:27 म अगाडी चलाउन मेरो आतंक पठाउने, र म तपाईंलाई प्रविष्ट हुनेछ जसलाई सबै मानिसहरू मार्नेछ. र म तपाईंलाई अघि आफ्नो सबै शत्रुलाई को पीठ हुनेछ,
23:28 अगाडि wasps पठाउने, तिनीहरूले उडान गर्ने Hivite गर्न राख्नु हुनेछ भनेर, र कनानी, र हित्ती, तपाईं प्रविष्ट अघि.
23:29 म एक वर्ष मा आफ्नो अनुहार देखि बाहिर तिनीहरूलाई डाली छैन, देशमा नत्र एक उजाड कम गर्न र जङ्गली जनावर तपाईं विरुद्ध वृद्धि.
23:30 म आफ्नो दृष्टि देखि साना द्वारा साना तिनीहरूलाई धपाउने हुनेछ, तपाईं विस्तार र देशमा अधिकार हुन सक्छन् सम्म.
23:31 त्यसपछि म इजरायल को सागर गर्न लाल समुद्र देखि हुन आफ्नो सीमा सेट गर्नेछ, र मरुभूमि सबै तरिका नदी गर्न. म तपाईंको हातमा देशमा बासिन्दाहरू बचाउनुहुनेछ, र म आफ्नो दृष्टि बाहिर तिनीहरूलाई डाली हुनेछ.
23:32 तपाईं तिनीहरूलाई संग एक सम्भ्कौता प्रवेश गर्नेछैनन्, न त आफ्नो देवताहरूलाई संग.
23:33 तिनीहरूले आफ्नो भूमि लाइभ सक्छ, सायद नत्र तिनीहरूले तपाईंलाई मेरो विरुद्धमा पाप गर्न सक्छ, यदि तपाईं आफ्नो देवताहरूलाई सेवा, जो निश्चित तपाईं को लागि एक प्रलोभनको हुनेछ। "
24:1 उहाँले पनि मोशालाई भन्नुभयो: "प्रभुको Ascend, तपाईं र हारून, Nadab र Abihu, र सत्तरी प्राचीन इस्राएलका बाहिर, र एक दूरी देखि पुजा गर्नु.
24:2 मोशाले मात्र प्रभु गर्न चढ्नु हुनेछ, र यी दृष्टिकोण छैन. न त मानिसहरूले उसलाई चढ्नु पर्छ। "
24:3 त्यसैले, मोशाले प्रभु सबै शब्द गए र मानिसहरूलाई बताए, साथै इन्साफ. र सबै मानिसहरू एक आवाज संग प्रतिक्रिया: "हामीले प्रभुलाई सबै शब्द गर्नेछ, जो उहाँले बोलेको छ। "
24:4 त्यसपछि मोशाले प्रभुको सबै शब्द लेखे. र बिहान अप बढ्दो, उहाँले पहाड को आधार मा एक वेदी निर्माण, बाह्र शीर्षक इस्राएलका बाह्र कुल अनुसार संग.
24:5 र उहाँले इस्राएलका छोराहरू देखि युवाहरूले पठाएको, र तिनीहरूले holocausts प्रस्ताव, र तिनीहरूले प्रभु शान्ति-प्रसाद रूपमा calves immolated.
24:6 र यति मोशाले रगतको आधा भाग लिए, र उहाँले कटोरे यसलाई राख्नु. त्यसपछि बाँकी अंश उहाँले वेदी माथि पोखे.
24:7 र करारको पुस्तक अप लिइरहेको, उहाँले मान्छे को सुनुवाइ मा पढ्ने, जसले यसो भने: "सबै कि प्रभु बोली छ, हामी गर्ने छौं, र हामी आज्ञाकारी हुनेछ। "
24:8 सत्य मा, रगत माथि लिएर, उहाँले मानिसहरूलाई यो छर्कियो, र, उहाँले भन्नुभयो, "यो करारको रगत छ, जो प्रभु तपाईंले यी सबै शब्द विषयमा संग गठन गरेको छ। "
24:9 मोशा र हारून र, Nadab र Abihu, र इस्राएलका बूढा को सत्तरी जानुभयो.
24:10 र तिनीहरूले इस्राएलका परमेश्वरको देखे. र आफ्नो खुट्टा अन्तर्गत नीलम पत्थर को काम जस्तै केहि थियो, वा आकाश जस्तै, जब यो निर्मल छ.
24:11 न त उहाँले एक दूरी मा थिए इस्राएलका छोराहरू ती मा आफ्नो हात राख्नु गरे. र तिनीहरूले परमेश्वरको देखे, र तिनीहरूले खाए र पिए.
24:12 त्यसपछि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "पर्वतमा मलाई Ascend, र त्यहाँ. र म तपाईंलाई ढुङ्गाको पाटीमा दिनेछु, व्यवस्था र म लिखित छ कि आज्ञा र. ताकि तपाईं तिनीहरूलाई सिकाउन सक्छ। "
24:13 मोशाले उठेर, यहोशू आफ्ना सेवक संग. मोशाले, परमेश्वरको पर्वतमा उक्लनुभन्दा,
24:14 एल्डरहरूले भन्नुभयो: "यहाँ प्रतीक्षा, जब सम्म हामी तपाईं फर्कन. के तपाईं संग हारून र hur छ. यदि कुनै पनि प्रश्न खडा, तपाईं तिनीहरूलाई यो संकेत गर्नेछु। "
24:15 र मोशा जानुभयो थियो, बादलले पहाड कवर.
24:16 र प्रभुको महिमा मा सिनाई बास, छ दिनको लागि बादलले यसलाई कवर. र सातौं दिन, उहाँले तुवालो को बीचमा देखि उहाँलाई भनिन्छ.
24:17 अब प्रभुको महिमा को उपस्थिति इस्राएलका छोराहरू दृष्टि मा पहाड को शिखर माथि बलिरहेको आगो जस्तै थियो.
24:18 मोशाले, बादल बीचमा मा प्रवेश, पर्वतमा जानुभयो. र उहाँले चालीस दिन र चालीस रात को लागि थियो.
25:1 र परमप्रभुले मोशालाई कुरा, यसो:
25:2 "इस्राएलका छोराहरू गर्न बोल्नुहोस्, तिनीहरूले मलाई पहिलो-फल लाग्न सक्छ भनेर. तपाईं आफ्नो अनुसार को प्रदान गर्दछ जो हरेक मानिस यी स्वीकार गर्नेछु.
25:3 अब यी तपाईं स्वीकार गर्नुपर्छ कि कुराहरू छन्: सुन, र चाँदी, र पीतल,
25:4 जलकुंभी र बैजनी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, र मलमलको, बाख्राको केश,
25:5 र मेढे को खाल, रंगा रातो, र बैंगनी को खाल, र setim काठ,
25:6 रोशनी तयार तेल, nanodiamonds उपयोग गरदै र मीठो-गन्ध धूप रूपमा aromatics,
25:7 गोमेद पत्थर र रत्न छातीको पाता रूपमा साथै ephod सजाउनु गर्न.
25:8 र तिनीहरूले मेरो लागि एक पवित्र मन्दिरमा गर्नेछ, र म तिनीहरूका बीचमा बस्नेछन्.
25:9 बासस्थानलाई को सही स्वरूपमा अनुसार, र यसको संस्कार लागि जहाजहरू सबै, म तपाईंलाई प्रकट हुनेछ, त्यसैले तपाईं यसलाई बनाउन पर्छ.
25:10 setim काठ को एक जहाज सँगै सामेल, जसको लम्बाइ दुई र एक आधा हात पकड पर्छ; चौडाई, एक र आधा हात; उचाइ, त्यसै गरी, एक र आधा हात.
25:11 र तपाईं उत्कृष्ट सुन यसलाई ओभरले पर्छ, भित्र र बाहिर. र यो भन्दा बढी, तपाईं सबै वरिपरि सुन मुकुट फेशन पर्छ,
25:12 र चार सुन छल्ले, जो तपाईं जहाज को चार कुनामा मा सेट गर्नेछ. दुई छल्ले अन्य एक र दुई पक्षमा होस्.
25:13 त्यसै गरी, तपाईं setim काठ को बारहरू बनाउन र सुन तिनीहरूलाई ढाक्न पर्छ.
25:14 र तपाईं जहाज को पक्ष मा हो छल्ले मार्फत तिनीहरूलाई राख्नु पर्छ, ताकि यसलाई तिनीहरूलाई लगे हुन सक्छ.
25:15 यी सधैं छल्ले हुनुपर्छ, औ तिनीहरूले कहिल्यै तिनीहरूलाई बाहिर आएको गरिनेछ.
25:16 र तपाईं गवाही राख्न पर्छ, जो म तिमीहरूलाई दिनेछु, जहाज मा.
25:17 तपाईं पनि उत्कृष्ट सुनको प्रायश्चितको गर्नेछ. यसको लम्बाइ दुई र एक आधा हात पकड पर्छ, र चौडाई, एक र आधा हात.
25:18 त्यसै गरी, तपाईं गठन सुन दुई Cherubim गर्नेछ, को Oracle दुवै पक्षलाई.
25:19 एक करूब एक छेउमा होस्, र अन्य अन्य हुन.
25:20 र तिनीहरूलाई प्रायश्चितको दुवै पक्षलाई ढाक्ने, आफ्नो पखेटा फैलाउने र Oracle कवर, र तिनीहरूलाई अर्को तिर बाहिर हेरौं, आफ्नो अनुहार को प्रायश्चितको तिर गरिएका भइरहेको, जो संग जहाज छोप्नुपर्छ छ,
25:21 जसमा मैले तिमीहरूलाई दिनेछु भनी गवाही राख्नेछ.
25:22 त्यहा बाट, म तिमीलाई चेतावनी र कुरा हुनेछ, यस प्रायश्चितको माथि र दुई Cherubim बीचबाट, जो गवाही को जहाज माथि हुनेछ, म मार्फत इस्राएलका छोराहरू आज्ञा भनेर बारेमा सबै कुरा.
25:23 तपाईं पनि setim काठ को तालिका बनाउन पर्छ, लम्बाइ दुई हात भएको, र चौडाइ एक cubit, उचाइ र एक cubit र आधा हात.
25:24 र तपाईं शुद्ध सुन यसलाई ओभरले पर्छ. र तपाईं सबै वरिपरि सुन ओठ यसलाई बनाउन पर्छ,
25:25 र ओठ नै एक कुँदिएका मुकुट लागि, चार औंलाहरु उच्च, र यो माथि अर्को सानो सुन मुकुट.
25:26 त्यसै गरी, तपाईं चार सुन छल्ले तयार र एउटै तालिकाको चार कुनामा मा सेट गर्नेछ, प्रत्येक खुट्टा माथि.
25:27 मुकुट अन्तर्गत, त्यहाँ सुन छल्ले हुनेछ, त्यसैले बारहरू तिनीहरूलाई मार्फत राख्नु भन्ने र हुन सक्छ तालिका लगे हुन सक्छ.
25:28 त्यसै गरी, पट्टी आफूलाई तपाईं setim काठ को गर्नेछ, र सुन तिनीहरूलाई चारै ओर, तालिका अप उचाल्न.
25:29 तपाईं पनि सानो कप तयार गर्नेछ, साथै कटोरे, censers, र नाप्ने कप, जो संग libations प्रस्ताव गरिनेछ, शुद्ध सुन बाहिर.
25:30 र तपाईं तालिका मा उपस्थिति को रोटी राख्न पर्छ, सधैं मेरो दृष्टि मा.
25:31 तपाईं पनि एक lampstand गर्नेछ, उत्कृष्ट सुन बाट गठन, यसको स्टेम र हतियार सहित, यसको कचौरा र साना क्षेत्रहरू, साथै लिली यसलाई देखि बढ्नु रूपमा.
25:32 छ शाखा को पक्ष बाट बाहिर जानेछौ: तीन एक पक्ष बाहिर र तीन अन्य बाहिर.
25:33 तीन कटोरे, पागल को आकार, प्रत्येक शाखामा हुनेछ, र यो एउटा सानो क्षेत्र, र एक लिली. र तीन समान कटोरे, पागल को स्वरूपमा मा, अन्य शाखामा हुनेछ, र यो एउटा सानो क्षेत्र, र एक लिली. यो छ शाखा को रूप हुनेछ, जो स्टेम देखि अगाडि बढ्न छन्.
25:34 त्यसपछि, को lampstand नै, त्यहाँ चार कटोरे हुनेछ, पागल को आकार, र साना क्षेत्रहरू र लिली संग प्रत्येक.
25:35 तीन ठाउँमा दुई शाखा अन्तर्गत सानो क्षेत्रहरू, जो सँगै छ बनाउन, को stems एक देखि अगाडि बढ्न पर्छ.
25:36 यसरी सानो क्षेत्रहरू र शाखा दुवै एउटै कुरा बनाउनुभयो गरिनेछ: सम्पूर्ण शुद्ध सुन बाट गठन.
25:37 तपाईं पनि सात दीपक गर्नेछ, र तपाईं lampstand मा उनलाई राख्न पर्छ, तिनीहरूले हरेक दिशा मा प्रकाश दिन सक्छ भनेर.
25:38 त्यसै गरी, यस मैनबत्ती snuffers, जहाँ मोमबत्ती निभाउँछ हुनेछ र स्थान, शुद्ध सुन बनाइएका गरिनेछ.
25:39 को कैंडलस्टिक सम्पूर्ण वजन, यसको सबै भागहरु संग, शुद्ध सुनको एउटा प्रतिभा पकड पर्छ.
25:40 पालन, र त्यसपछि यो पहाड मा तपाईं देखाइएको थियो कि उदाहरण अनुसार बनाउन। "
26:1 "साँच्चै, यसरी तपाईं बासस्थान बनाउन पर्छ: तपाईंलाई राम्रो मुड सनी को दस पर्दे गर्नेछ, र बैजनी रूपमा साथै जलकुंभी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, विविध कढाई संग.
26:2 एक पर्दा को लम्बाइ बीस-आठ हात पाउनेछ. चौडाई चार हात हुनेछ. पर्दे को सम्पूर्ण सेट एक उपाय को हुनेछ.
26:3 पाँच पर्दे आपसमा सामेल गरिनेछ, र अन्य पाँच त्यस्तै सँगै मिलेर गरिनेछ.
26:4 तपाईं पर्दे को किनाराको मा पक्षले जलकुंभी को लूपहरूको गर्नेछ, तिनीहरूले आपसमा सामेल गर्न सक्षम हुनेछ भनेर.
26:5 एउटा पर्दाले दुई पक्ष प्रत्येक मा पचास लूपहरूको पाउनेछ, पाश पाश विरुद्ध आउन सक्छ कि एक यस्तो तरिका मा सम्मिलित, र एक अन्य सज्जित गर्न सकिन्छ.
26:6 तपाईं पनि सुन पचास छल्ले गर्नेछ, जो संग पर्दे को veils सामेल गर्न छन्, यो एक बासस्थान हुनेछ भनेर.
26:7 तपाईं पनि बासस्थानको को छत ढाक्न एघार haircloth canopies गर्नेछ.
26:8 एक चदंवा को लम्बाइ तीस हात पकड पर्छ, र चौडाई, चार. सबै canopies को उपाय बराबर हुनेछ.
26:9 पाँच आफूलाई द्वारा तपाईँ सामेल हुनेछन् यी को, र छ यी तपाईं हुनेछ आपसमा जोडी, यस्तो तरिका मा छत को सामने मा छैटौं चदंवा दोहोरो रूपमा.
26:10 तपाईं पनि एक चदंवा किनारा साथ पचास लूपहरूको गर्नेछ, यसलाई सक्षम हुन सक्छ भनेर अन्य संग सामेल गर्न, र अन्य चदंवा किनारा साथ पचास लूपहरूको, ताकि यसलाई अन्य संग मिलेर हुन सक्छ.
26:11 तपाईं पनि पचास पीतल buckles गर्नेछ, जो संग लूपहरूको सामेल हुन सक्छ, हुन सक्छ भनेर एक सबै बाहिर कवर.
26:12 त्यसपछि के भन्दा हुनेछन् छत लागि तयार छन् जो canopies को, छ, अधिक छ, जो एक चदंवा, यो आधा देखि तपाईं बासस्थानको पछाडि कवर पर्छ.
26:13 र एक cubit एक पक्ष तल रचनाहरू हुनेछ, र अन्य पक्षमा अर्को, जो पर्दे को लम्बाइ भन्दा बढि छ, बासस्थानलाई दुवै पक्षलाई संरक्षण.
26:14 तपाईं पनि मेढे को खाल देखि छत लागि अर्को कवर गर्नेछ, रंगा-रातो, र माथि फेरि, बैंगनी-रंग खाल को अर्को कवर.
26:15 तपाईं पनि setim काठ देखि बासस्थान को खडा प्यानल बनाउन पर्छ.
26:16 यी को, प्रत्येक लम्बाइमा दस हात पाउनेछ, र चौडाइ मा, एक र आधा.
26:17 को प्यानल को पक्ष मा, त्यहाँ दुई dovetails गरे गरिनेछ, जो एक प्यानल अर्को प्यानल जडान हुन सक्छ; र यसरी सबै प्यानल तयार गरिनेछ.
26:18 यी को, बीस को मेरिडियन मा हुनेछ, जो दक्षिण तिर निहित.
26:19 यी लागि, तपाईं चाँदी चालीस आधारमा डाली पर्छ, दुई आधारमा यसको दुई कुनामा मा प्रत्येक प्यानल अन्तर्गत झूठ हुनेछ भनेर.
26:20 त्यसै गरी, बासस्थानलाई को दोस्रो छेउमा, जो उत्तर गर्न निहित, त्यहाँ बीस प्यानल हुनेछ,
26:21 चाँदी चालीस आधारमा भइरहेको; दुई आधारमा प्रत्येक प्यानल समर्थन गर्नेछ.
26:22 साँच्चै, बासस्थानलाई को पश्चिमी भाग तिर, तपाईं छ प्यानल बनाउन पर्छ,
26:23 र फेरि अर्को दुई, जो कुनामा मा खडा गरिनेछ, बासस्थानलाई पछाडि पछाडि.
26:24 र यी माथि तल देखि सँगै सामेल गरिनेछ, र एक संयुक्त ती सबै राख्ने पर्छ. त्यसै गरी, दुई प्यानल को, जो कुनामा मा सेट गरिनेछ, यस्तै जोइन्टहरूमा द्वारा सेवा गरिनेछ.
26:25 र सँगै यी आठ प्यानल हुनेछ, र चाँदीले आधारमा, सोह्र, प्रत्येक प्यानल लागि दुई आधारमा गणना.
26:26 तपाईं पनि setim काठ पाँच बारहरू बनाउन पर्छ, बासस्थानलाई को एक पक्ष मा प्यानल जडान गर्न,
26:27 र अन्य पक्षमा पाँच अरूलाई, र पश्चिमी भाग तिर नै नम्बर.
26:28 यी प्यानल को बीचमा साथ सेट गरिनेछ, एक अन्त सबै तरिका अन्य अन्त गर्न.
26:29 त्यसै गरी, को प्यानल आफूलाई तपाईं सुन ओभरले पर्छ, र तपाईं तिनीहरूलाई सुनको छल्ले स्थापना गर्नेछ, जो द्वारा प्यानल को बारहरू जडान हुन सक्छ. यी तपाईंले सुनको पत्रमार्फत कवर पर्छ.
26:30 र तपाईं पर्वतमा तपाईं देखाइएको थियो जो उदाहरण अनुसार बासस्थान उठाउनु पर्छ.
26:31 तपाईं पनि जलकुंभी एक पर्दा गर्नेछ, र बैजनी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, र ठीक मुड सनी, लगातार र सुन्दर कढाई को एक विविधता संग गढा.
26:32 र तपाईं setim काठ को चार स्तम्भहरू अघि निलम्बन पर्छ, जो आफूलाई पक्कै सुन ओभरले गरिनेछ, र सुनको टाउको, तर चाँदीको आधारमा.
26:33 त्यसपछि पर्दा छल्ले मार्फत सम्मिलित गरिनेछ. को पर्दा बाहिर, तपाईं गवाही को जहाज राख्न पर्छ, जहाँ बासस्थान र अभयारण्य को बासस्थान दुवै विभाजित गरिनेछ.
26:34 र तपाईं गवाही को जहाज अधिक प्रायश्चितको राख्न पर्छ, Holies को पवित्र मा.
26:35 र तालिकाले पर्दा बाहिर हुनेछ. र तालिका विपरीत भएको lampstand हुनेछ, बासस्थानलाई को मेरिडियन मा. लागि तालिका उत्तरी छेउमा खडा गर्नेछु.
26:36 तपाईं पनि जलकुंभी देखि बासस्थान को प्रवेश मा पाल बनाउन पर्छ, र बैजनी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, र ठीक मुड सनी, कढाई संग गढा.
26:37 र तपाईं setim काठ को सुन पाँच स्तम्भहरू संग ओभरले पर्छ, जो माथि पाल आएको गरिनेछ. यी को टाउको सुनको हुनेछ, पीतल को र आधारमा। "
27:1 "तपाईं पनि setim काठ को एक वेदी बनाउन पर्छ, जो लम्बाइ पाँच हात हुनेछ, र चौडाइ नै, छ, चार बराबर पक्ष, र उचाइ तीन हात.
27:2 अब त्यहाँ को चार कुनामा मा सीङ हुनेछ, र तपाईं पीतल यसलाई कवर पर्छ.
27:3 र तपाईं बनाउन पर्छ, यसको प्रयोगका लागि, धूपदान को खरानी प्राप्त गर्न, र संडसी साथै साना हुक, र आगो लागि receptacles. तपाईं पीतल देखि यसको जहाजहरू सबै fabricate पर्छ,
27:4 एक नेट को तरिका मा पीतल को एक झंझरी साथ. यसको चार कुनामा मा त्यहाँ पीतल चार छल्ले हुनेछ,
27:5 जो तपाईं वेदी को आधार अन्तर्गत राख्न पर्छ. र झंझरी वेदी को बीचमा पनि विस्तार हुनेछ.
27:6 तपाईं पनि गर्नेछ, वेदी लागि, setim काठ को दुई बारहरू, जो तपाईं पीतल को पत्रमार्फत कवर पर्छ.
27:7 र तपाईं छल्ले मार्फत तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्नेछन्, र तिनीहरूले बोक्नु वेदी दुवै पक्षलाई हुनेछ.
27:8 तपाईंले यसलाई ठोस बनाउन हुँदैन, तर भित्री मा खाली र खोक्रो, यो पहाड मा तपाईं देखाइएको थियो जस्तै.
27:9 तपाईं पनि बासस्थानको को Atrium गर्नेछ, दक्षिणी भाग मा जो को, को मेरिडियन विपरीत, त्यहाँ राम्रो मुड सनी को पर्दे हुनेछ: एक पक्ष लम्बाइ एक सय हात लागि विस्तार.
27:10 र तपाईं पीतल को आधारमा एउटै नम्बर बीस स्तम्भहरू गर्नेछ, को टाउको जो, आफ्नो नक्काशी संग, चाँदी बनेको गरिनेछ.
27:11 जस्तै तरिका पनि, उत्तरी पक्ष को लम्बाइ भर, त्यहाँ एक सय हात को पर्दे हुनेछ, र बीस स्तम्भहरू, र पीतल को आधारमा एउटै नम्बर, र चाँदीले नक्काशी आफ्नो टाउको.
27:12 यद्यपि साँच्चै, कि पश्चिम तिर बाहिर देखिन्छ यस Atrium को चौडाई साथ, त्यहाँ पचास हात को पर्दे हुनेछ, र दस स्तम्भहरू, र आधारमा एउटै नम्बर.
27:13 त्यसै गरी, कि पूर्व तिर बाहिर देखिन्छ यस Atrium को चौडाई साथ, त्यहाँ पचास हात हुनेछ,
27:14 जो साथ त्यहाँ एक पक्ष लागि पन्ध्र हात को पर्दे नियुक्त गरिनेछ, र तीन स्तम्भहरू, र आधारमा एउटै नम्बर.
27:15 र, अन्य पक्ष साथ, त्यहाँ कब्जा पन्ध्र हात पर्दे हुनेछ, तीन स्तम्भहरू र आधारमा एउटै नम्बर.
27:16 यद्यपि साँच्चै, को Atrium को प्रवेश मा, बीस हात को एक झुन्डिएका त्यहाँ गरे गरिनेछ, जलकुंभी र बैजनी को, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, र ठीक मुड सनी, कढाई संग गढा. यसलाई चार स्तम्भहरू पाउनेछ, आधारमा एउटै नम्बर.
27:17 को Atrium घटेका सबै स्तम्भहरू चाँदी पत्रमार्फत ढाकिएको गरिनेछ, चाँदी टाउको, पीतल को आधारमा संग र.
27:18 लम्बाइमा, को Atrium एक सय हात कब्जा गर्नेछन्, चौडाई मा, पचास; उचाइ पाँच हात को हुनेछ. र यो ठीक मुड सनी बनेको गरिनेछ, र यो पीतल को आधारमा हुनेछ.
27:19 बासस्थानलाई सबै जहाजहरू, सबै प्रयोगहरू र समारोह को लागि, पनि यसको Atrium लागि पाल pegs गर्न, तपाईं पीतल को गर्नेछ.
27:20 तिनीहरूले तपाईंलाई भद्राक्षको रूखहरू शुद्ध तेल ल्याउन सक्छ भनेर इस्राएलका छोराहरू निर्देशन, एक pestle संग चोट, बत्ती सधैं बाल्न सक्छ भनेर
27:21 गवाहीलाई को बासस्थान मा, गवाहीलाई enshrouds कि पर्दा बाहिर. र हारून र तिनका छोराहरूलाई यो व्यवस्था गर्नेछ, यसलाई प्रभुको उपस्थिति मा प्रकाश दिन सक्छ भनेर, बिहान सम्म. यो इस्राएलका छोराहरू बीच एक सदैव उत्सव हुनेछ, आफ्नो successions भर। "
28:1 "साथै, आफैलाई सामेल आफ्नो भाइ हारून, इस्राएलका छोराहरू बीचमा आफ्नो छोरा संग, तिनीहरूले मेरो लागि पुजारीको खेती हुन सक्छ भनेर: हारून, Nadab र Abihu, एलाजार र ईतामारसित.
28:2 र तपाईं हारून लागि पवित्र vestment गर्नेछ, आफ्नो भाइ, महिमा र शान संग.
28:3 र तपाईं हृदयको बुद्धिमानी सबै कुरा गर्नेछन्, म प्रूडेंस को आत्माको जसलाई भरिएको छ, तिनीहरूले हारूनको vestments बनाउन सक्छ भनेर, जसमा, पवित्र होने, उहाँले मलाई मन्त्री सक्छन्.
28:4 अब यी तिनीहरूले गर्नेछ भन्ने vestments हुनेछ: एक छातीको पाता र एक ephod, एक अंगरखा र नजिकको-फिट सनी लुगा, एक headdress र व्यापक बेल्ट. तिनीहरूले आफ्नो भाइ हारून र तिनका छोराहरूलाई लागि पवित्र vestments गर्नेछ, तिनीहरूले मेरो लागि पुजारीको खेती हुन सक्छ भनेर.
28:5 र तिनीहरूले सुन प्राप्त गर्नेछ, र जलकुंभी, र बैजनी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, र मलमलको.
28:6 त्यसपछि तिनीहरूले सुनको ephod गर्नेछ, र जलकुंभी, र बैजनी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, र ठीक मुड सनी, विविध रंग संग गढा.
28:7 यो दुई किनारा दुवै पक्षले माथि सामेल हुनेछ, तिनीहरूले रूपमा प्रतिक्रिया सक्छ भनेर.
28:8 त्यसै गरी, को बुनाई र सबै विवरण काम सुनको हुनेछ, र जलकुंभी, र बैजनी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, र ठीक मुड सनी.
28:9 र तपाईं दुई गोमेद पत्थर इस्राएलका छोराहरू नाम लिन र तिनीहरूलाई कुद्नु पर्छ:
28:10 एक पत्थर मा छ नाम, र बाँकी छ अन्य मा, आफ्नो जन्म क्रम अनुसार.
28:11 एक मूर्ति को काम र एक जौहरी को कौशल द्वारा, तपाईं इस्राएलका छोराहरू नाम तिनीहरूलाई कुद्नु पर्छ, संलग्न र सुन encompassed.
28:12 र तपाईं ephod दुवै पक्षलाई तिनीहरूलाई राख्न पर्छ, इस्राएलका छोराहरू एक सम्झनाको रूपमा. र हारून परमप्रभुको अघि आफ्नो नाम बोक्न पर्छ, दुवै काँधमा, एक सम्झनामा रूपमा.
28:13 तपाईं पनि सुनको हुक गर्नेछ,
28:14 र शुद्ध सुन दुई साना चेन, एक अर्को लिङ्क, जो तपाईं हुक सम्मिलित पर्छ.
28:15 त्यसै गरी, तपाईं न्यायको छातीको पाता बनाउन पर्छ, को ephod को बुनाई अनुसार विविध रंग संग गढा: सुनको, जलकुंभी र बैजनी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, र ठीक मुड सनी.
28:16 यसलाई चार कुनामा पाउनेछ र दुगुना हुन. यो एक हातको हत्केलामा को उपाय हुनेछ, लम्बाइ र चौडाइ दुवै.
28:17 र तपाईं पत्थर को यो चार पङ्क्तिहरू भित्र सेट पर्छ. पहिलो पंक्ति मा, त्यहाँ एक sardius पत्थर हुनेछ, र एक पुखराज, र एक Emerald.
28:18 दोस्रो, त्यहाँ एक गारनेट हुनेछ, एक नीलम, र एक बिल्लौर.
28:19 तेस्रो मा, त्यहाँ एक जिक्रोन हुनेछ, एक agate, र एक नीलम.
28:20 चौथो मा, त्यहाँ एक chrysolite हुनेछ, एक गोमेद, र एक Beryl. तिनीहरूले पङ्क्तिहरू द्वारा सुन सेट गरिनेछ.
28:21 र यी इस्राएलका छोराहरू नाम पाउनेछ. बाह्र नाम तिनीहरूले कुँदिएका गरिनेछ: बाह्र कुल देखि एक नाम संग प्रत्येक ढुङ्गा.
28:22 तपाईं शुद्ध सुनको चेन बनाउन पर्छ, अर्को एक लिङ्क, छातीको पाता मा,
28:23 र सुन दुई छल्ले, जो तपाईं छातीको पाता दुवै समाप्त मा राख्न पर्छ.
28:24 र सुनको चेन, तपाईं छल्ले गर्न सामेल हुनेछन्, यसको किनारा मा जो.
28:25 र चेन आफूलाई को अन्त्य, तपाईं दुई हुक संग हुनेछ जोडी, को ephod दुवै पक्षलाई, जो छातीको पाता तिर देखिन्छ.
28:26 तपाईं पनि सुन दुई छल्ले गर्नेछ, जो तपाईं छातीको पाता को अन्त्य मा राख्न पर्छ, को ephod को क्षेत्रबाट टाढा छन् र जो आफ्नो फिर्ता तिर हेर्न जो सीमाना मा.
28:27 र त तपाईं पनि सुनको अन्य दुई छल्ले गर्नेछ, जो ephod को तल दुवै पक्षले निलम्बित गर्न हो, जो कम juncture को अनुहार विपरीत बाहिर देखिन्छ, छातीको पाता को ephod गर्न सज्जित गर्न सकिन्छ भनेर.
28:28 र यो छातीको पाता को छल्ले गर्न तंग आएको गरिनेछ, को ephod को छल्ले द्वारा, एक जलकुंभी ब्यान्ड संग, राम्रो तरिकाले-निर्माण juncture ठाउँमा रहनेछ भनेर, र छातीको पाता र ephod एक अर्को अलग गर्न सक्षम हुने छैन.
28:29 र हारून आफ्नो छाती मा न्यायको छातीको पाता मा इस्राएलका छोराहरू नाम बोक्न पर्छ, उहाँले बासस्थान मा प्रवेश गर्दा, सदाको प्रभुको उपस्थिति मा एक सम्झनाको रूपमा.
28:30 त्यसपछि तपाईं न्यायको छातीको पाता मा राख्न पर्छ, सिद्धान्त र सत्य, जो त्यसपछि हारून छाती मा हुनेछ, उहाँले प्रभु अघि प्रवेश गर्दा. र उहाँले आफ्नो छाती मा इस्राएलका छोराहरू न्याय लगाउने पर्छ, सधैं प्रभुको दृष्टि मा.
28:31 र तपाईं सम्पूर्ण जलकुंभी को ephod लागि अंगरखा गर्नेछ,
28:32 र टाउको आफ्नो मध्य माथि हुनेछ, यसलाई वरिपरि बुना एक हेम संग, बस सामान्यतया लुगा अन्त भागहरु मा बनेको छ रूपमा, कि यो सजिलै भाँचिनेछैन हुन सक्छ त.
28:33 यद्यपि साँच्चै, यो मुनि, एउटै अंगरखा को आधार मा, सबै तिर, तपाईं अनार जस्तै केहि गर्नेछ, जलकुंभी देखि, र बैजनी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, संग सानो Bells तिनीहरूका बीचमा सेट.
28:34 त्यसैले त, त्यहाँ एक सानो सुनको घण्टी र एक दारिम हुनेछ, र फेरि अर्को सुनको घण्टी र एक दारिम.
28:35 र हारून संग निहित हुनेछ सेवकाईको कार्यालय समयमा, उहाँले प्रवेश र बासस्थान बाहिरिन्छ गर्दा आवाज सुने हुन सक्छ कि त, प्रभुको दृष्टि मा, र यति भनेर उहाँले मर्न सक्छ.
28:36 र तपाईं शुद्ध सुन को एक थाली बनाउन पर्छ, जसमा तपाईं कुद्नु पर्छ, एक मूर्ति को कौशल संग, 'प्रभु गर्न पवित्र।'
28:37 र तपाईं जलकुंभी एक दल संग कस्नु पर्छ, र यो headdress मा हुनेछ,
28:38 उच्च पुजारी अगाडि झुन्डिएको. र हारून इस्राएलका छोराहरू प्रस्ताव र पवित्र छन्, जो कि को iniquities बोक्न पर्छ, आफ्नो सबै उपहार र दानको मा. तर प्लेट सधैं आफ्नो निधारमा मा हुनेछ, ताकि प्रभु उनीहरूसँग राम्रो खुसी हुन सक्छ.
28:39 र तपाईं मलमलको संग अंगरखा तंग आकर्षित गर्नेछ, र तपाईं मलमलको एक headdress गर्नेछ, र एक विस्तृत बेल्ट, कढाई संग गढा.
28:40 यसबाहेक, हारूनका छोराहरू लागि, तपाईं सनी tunics तयार गर्नेछ, र व्यापक बेल्ट साथै headdresses, महिमा र शान संग.
28:41 र यी सबै संग तपाईं आफ्नो भाइ हारून बनियान पर्छ, र उसलाई आफ्नो छोरा. र तपाईं आफ्नो सबै हात consecrate पर्छ, र तपाईं तिनीहरूलाई पवित्र पर्छ, तिनीहरूले मेरो लागि पुजारीको खेती हुन सक्छ भनेर.
28:42 तपाईं पनि सनी undergarments गर्नेछ, आफ्नो nakedness को शरीर ढाक्न क्रममा, को अन्तस्करणले देखि जांघों सबै तरिका.
28:43 तिनीहरूले गवाही को बासस्थान प्रविष्ट गर्दा र हारून र तिनका छोराहरूलाई तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नेछ, र जब उनि वेदी तिर दृष्टिकोण, बासस्थान मा मन्त्री गर्न, lest, iniquity दोषी रहेको, तिनीहरूले मर्न सक्छ. यो हारून लागि सधैंभरि व्यवस्था हुनेछ, र आफ्नो सन्तानको लागि उहाँलाई पछि। "
29:1 "तर तपाईंले पनि यो गर्नु पर्छ, ताकि तिनीहरूले पुजारीको मा मलाई consecrated हुन सक्छ: बथानलाई देखि एक बाछो लिन, र दुई बेदाग मेढे,
29:2 र अखमिरी रोटी, र तेल छर्कियो गरिएको खमिर बिना पाप्रो, त्यसै गरी, तेल गंदा अखमिरी केक. तपाईं नै गहुँको पीठो ती सबैलाई गर्नेछ.
29:3 र, बास्केट तिनीहरूलाई राखिएको होने, तपाईंले तिनीहरूलाई प्रस्ताव पर्छ, को बाछो र दुई मेढे साथ.
29:4 र तपाईं अगाडी हारून र तिनका छोराहरूलाई ल्याउन पर्छ, गवाहीलाई को बासस्थान को ढोका गर्न. र तपाईं पानी मा आफ्नो छोरा संग पिता धोए हुनेछ जब,
29:5 तपाईं आफ्नो vestments मा हारून लुगा लगाउनु पर्छ, छ, को सनी संग, र अंगरखा, र ephod, र छातीको पाता, जो तपाईं व्यापक बेल्ट साथ सँगै आकर्षित गर्नेछ.
29:6 र तपाईं headdress मा उनको टाउको मा headdress र पवित्र प्लेट राख्न पर्छ.
29:7 र तपाईं आफ्नो टाउको माथि जोश को तेल खन्याउन पर्छ. अनि त, यो अनुष्ठान द्वारा, उहाँले consecrated गरिनेछ.
29:8 त्यसै गरी, तपाईं आफ्नो छोरा अगाडि ल्याउन पर्छ, र तपाईं सनी tunics तिनीहरूलाई लुगा लगाउनु पर्छ, र व्यापक बेल्ट तिनीहरूलाई र्याप:
29:9 हारून, पक्कै पनि, साथै तिनका छोराहरूलाई रूपमा. र तपाईं तिनीहरूका headdresses आयातित पर्छ. र तिनीहरूले एक सदैव ordinance द्वारा मलाई पूजाहारीहरू हुनेछ. तपाईं आफ्नो हात सुरु गरेपछि,
29:10 तपाईं बाछो पनि अगाडि ल्याउन पर्छ, गवाहीलाई को बासस्थान को उपस्थिति मा. र हारून र तिनका छोराहरूलाई आफ्नो शिरमा आफ्नो हात राख्नु पर्छ.
29:11 र तपाईं प्रभुको दृष्टि मा बलिदान पर्छ, गवाहीलाई को बासस्थान को ढोका छेउमा.
29:12 र बाछाको रगत केही लिएर, तपाईं आफ्नो औंला वेदी को सीङ मा यो ठाँउ पर्छ, तर रगत को शेष तपाईं आफ्नो आधार अर्को खन्याउन पर्छ.
29:13 र यसको intestines कवर जो सबै बोसो लाग्न पर्छ, र कलेजो को जाल, साथै दुई अन्तस्करणले रूपमा, र तिनीहरूलाई छ कि बोसो, र तपाईं वेदीमा एक जलेको बलिको रूपमा तिनीहरूलाई प्रस्ताव पर्छ.
29:14 यद्यपि साँच्चै, को बाछाको मासु, को लुकाउने र गोबर र, तपाईं बाहिर बाल्न पर्छ, शिविरमा परे, किनभने यो पापको लागि छ.
29:15 त्यसै गरी, तपाईंले एक राम लिन पर्छ, र यसको शिरमा हारून र तिनका छोराहरूलाई आफ्नो हात राख्नु पर्छ.
29:16 र जब तपाईं यो बलिदान हुनेछ, तपाईं आफ्नो रक्त देखि लिन र वेदी वरिपरि यो खन्याउन पर्छ.
29:17 त्यसपछि तपाईं टुक्रा मा राम कटौती गर्नेछ, र, यसको intestines र खुट्टा धोए भएको, तपाईं कट-अप शरीर मा र यसको शिरमा यी राख्न पर्छ.
29:18 र तपाईं वेदीमा एक जलेको बलिको रूपमा सम्पूर्ण राम प्रस्ताव पर्छ. यो प्रभु गर्न oblation छ, प्रभु सिकार एक भन्दा मीठो गन्ध.
29:19 त्यसै गरी, तपाईं अन्य राम लिन पर्छ, जसको शिरमा हारून र तिनका छोराहरूलाई आफ्नो हात राख्नु पर्छ.
29:20 र जब तपाईं यो immolated हुनेछ, तपाईं आफ्नो रगत लिन पर्छ, र हारून र तिनका छोराहरूलाई को सही कान को टिप मा ठाँउ, र औंठी र आफ्नो दाहिने हात र दाहिने खुट्टा को ठूलो औंलाहरुमा, र तपाईं वेदीमा रगत खन्याउनु पर्छ, सबै तिर.
29:21 र तपाईं वेदीमा छ कि रगत लिइएको छ जब, र जोश को तेल देखि, तपाईं हारून र तिनका vestment छिडकना पर्छ, आफ्नो छोरा र आफ्नो vestments. र तिनीहरूले तिनीहरूको vestments consecrated भएपछि,
29:22 तपाईं राम को बोसो लाग्न पर्छ, र पशुको चाक, र सुंगुरको बोसो आन्तरिक अङ्गहरू समेट्छ कि, र कलेजो को जाल, र तिनीहरूलाई छ कि बोसो साथ दुई अन्तस्करणले, र सही काँध, यो consecration को राम छ किनभने,
29:23 र रोटी को एक पालो, तेल छर्कियो एक पाप्रो, र अखमिरी रोटी को टोकरी देखि एक केक, जो प्रभुको दृष्टि मा राखिएको थियो.
29:24 र तपाईं हारून र तिनका छोराहरूलाई को हात मा यी सबै ठाँउ पर्छ, र तपाईं तिनीहरूलाई पवित्र पर्छ, प्रभुको दृष्टि उनलाई उठाने.
29:25 र तपाईं आफ्नो हात यी सबै कुराहरू लिन र आहुति रूपमा वेदीमा तिनीहरूलाई बाल्न पर्छ, प्रभुको दृष्टि मा एक भन्दा मीठो गन्ध रूपमा, यसलाई आफ्नो oblation छ किनभने.
29:26 त्यसै गरी, तपाईं राम को छाती लिन पर्छ, जो संग हारून सुरु, र तपाईंले यसलाई पवित्र पर्छ, प्रभुको दृष्टि मा यसलाई उठाने, र यो आफ्नो शेयर गर्न पतन हुनेछ.
29:27 र तपाईं consecrated छाती र तपाईं राम अलग कि काँध दुवै पवित्र पर्छ,
29:28 जो संग हारूनले आफ्नो छोरा संग शुरू, र यी हारून र तिनका छोराहरूलाई को शेयर गर्न पतन हुनेछ, इस्राएलका छोराहरू एक सदैव शपथ रूपमा. यी लागि सबैभन्दा ठूलो र शान्ति आफ्नो सिकार को पहिलो, जो तिनीहरूले प्रभु गर्न प्रस्ताव.
29:29 तर पवित्र vestment, जो हारून प्रयोग गर्नेछ, तिनका छोराहरूलाई उहाँको पछि अधिकार गर्नेछन्, तिनीहरूले अभिषिक्त हुन भनेर र हुन सक्छ आफ्नो हात consecrated हुन सक्छ.
29:30 सात दिनको लागि, आफ्नो ठाउँमा पूजाहारी छ र जो जसले यसको प्रयोग गर्नेछु बासस्थान मा मन्त्री गर्न गवाही को बासस्थान प्रवेश.
29:31 तर तपाईं consecration को राम लिन र पवित्र ठाउँमा यसको शरीर पकाउन पर्छ.
29:32 र हारून र तिनका छोराहरूलाई यो खान्छन् पर्छ. त्यसै गरी, जो टोकरी मा हो रोटी, तिनीहरूले गवाही को बासस्थान को vestibule मा उपभोग गर्नेछ,
29:33 ताकि यो एक appeasing बलिदान हुन सक्छ, र यति गर्ने प्रस्ताव ती हातमा पवित्र हुन सक्छ कि. पराई यी देखि खान हुँदैन, तिनीहरूले पवित्र छन्.
29:34 र बिहान सम्म के रहने सक्छ, को consecrated शरीरका वा रोटी, तपाईं आगोले यी remnants बाल्न पर्छ. यी खाएको हुन पर्छ, किनभने तिनीहरूले पवित्र छन्.
29:35 म निर्देशन गरेको सबै तपाईं हारून र तिनका छोराहरूलाई विषयमा, तपाईं गर्नु पर्छ. सात दिन लागि आफ्नो हात consecrate पर्छ,
29:36 र प्रत्येक दिन मा पापको लागि एक बाछो प्रस्ताव पर्छ, एक प्रायश्चित्त रूपमा. तपाईं expiation सिकार immolated हुनेछ जब र तपाईं वेदी शुद्ध पर्छ, र तपाईं पवित्रीकरण लागि यो अभिषेक पर्छ.
29:37 सात दिनको लागि, तपाईं expiate र वेदी पवित्र पर्छ, र यो holies को पवित्र हुनेछ. यसलाई स्पर्श गर्ने सबैलाई पवित्र हुनुपर्छ.
29:38 यो वेदी लागि प्राप्त गर्नेछन् के हो: दुई एक वर्षीया पाठाहरूलाई, प्रत्येक दिन निरन्तर,
29:39 बिहान एक पाठो, र साँझ अन्य;
29:40 एक पाठो लागि, ठीक पीठो एक दशौं भाग कुचल तेल छर्कियो, जो एक हिन को चौथो भाग को उपाय हुनेछ, र एक libation लागि रक्सी, एउटै उपाय को;
29:41 साँच्चै, अन्य पाठो तपाईं साँझ प्रस्ताव पर्छ, बिहान oblation को अनुष्ठान अनुसार, र अनुसार के हामी भने छ, मिठास एक गंध रूपमा.
29:42 यो प्रभु बलि छ, आफ्नो पुस्तामा बीच एक सदैव oblation द्वारा, प्रभु अघि गवाही को बासस्थान को ढोका मा, जहाँ म तपाईंलाई बोल्न समाधान.
29:43 र त्यहाँ म इस्राएलका छोराहरू निर्देशन हुनेछ, र वेदी मेरो महिमा द्वारा पवित्र गरिनेछ.
29:44 म पनि वेदी संग गवाही को बासस्थान पवित्र हुनेछ, र तिनका छोराहरूलाई संग हारून, मेरो लागि पुजारीको खेती.
29:45 र म इस्राएलका छोराहरू बीचमा बस्नेछन्, र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछ.
29:46 र तिनीहरूले म प्रभु परमेश्वरले हुँ भनी थाहा हुनेछ, मिश्र देशमा तिनीहरूलाई टाढा नेतृत्व गर्ने, म तिनीहरूलाई बीचमा बास हुन सक्छ त. म प्रभु आफ्नो परमेश्वर हुँ। "
30:1 "तपाईं पनि एक वेदी बनाउन पर्छ, धूप को जलिरहेको लागि, setim काठ बाट,
30:2 लम्बाइ एक cubit भइरहेको, र चौडाइ अर्को, छ, चार बराबर पक्ष, र उचाइ दुई हात. सींग नै देखि अगाडि बढ्न पर्छ.
30:3 र तपाईं शुद्ध सुन यसलाई लुगा लगाउनु पर्छ, यसको झंझरी र यसलाई वरिपरि पर्खाल दुवै, र पनि सीङ. र तपाईं यसलाई लागि सुनको मुकुट वृत्तमा गर्नेछ,
30:4 र प्रत्येक पक्षमा मुकुट अन्तर्गत दुई सुन छल्ले, त्यसैले बारहरू तिनीहरूलाई सेट कि गर्न सक्छ वेदी लगे हुन सक्छ.
30:5 पनि, तपाईं setim काठ को आफ्नो बारहरू बनाउन पर्छ, र तपाईं सुन तिनीहरूलाई ओभरले पर्छ.
30:6 र तपाईं पर्दा विपरीत वेदी सेट पर्छ, जो गवाही को जहाज अगाडि लटकी, गवाहीलाई समेटिएको छ जो संग प्रायश्चितको अघि, जहाँ म तिमीलाई कुरा हुनेछ.
30:7 र हारून यसलाई मा धूप पर्छ, एक मिठाई खुशबू, बिहानी पख. उहाँले दीपक रोशनी जब, उहाँले यो बाल्न पर्छ.
30:8 र जब उहाँले तिनीहरूलाई साँझ भेला, उहाँले आफ्नो पुस्तामा भर प्रभु अघि अनन्त धूप पर्छ.
30:9 तिमीहरूमा अर्को संरचना को धूप प्रस्ताव छैन, न त एक oblation, न त सिकार; न तपाईं libations प्रस्ताव पर्छ.
30:10 र हारून वर्षमा एकपटक आफ्नो सीङ भन्दा प्रार्थना गर्नेछु, पापको लागि के चढाइने को रगतले. र उहाँले आफ्नो पुस्ताहरू यो भन्दा बढी प्रायश्चित गर्नेछ. यसलाई प्रभुको holies को पवित्र हुनेछ। "
30:11 र परमप्रभुले मोशालाई कुरा, यसो:
30:12 "जब तपाईं इस्राएलका छोराहरू योगफल लिएका छन्, आफ्नो नम्बर अनुसार, प्रत्येक प्रभु आफ्नो प्राण लागि मूल्य दिन पर्छ, र त्यहाँ तिनीहरूलाई बीच कुनै महामारीले हुनेछ, जब उनि समीक्षा गरिनेछ.
30:13 त्यसपछि सबै नाम दिन पर्छ पारित गर्ने ती: आधा शेकेल, मन्दिरमा उपाय अनुसार. एक शेकेल बीस obols छ. एक शेकेल को आधा भाग प्रभु प्रस्ताव गरिनेछ.
30:14 बीस वर्ष देखि संख्यात्मक छ जो गरिएको र माथि उहाँले मूल्य दिन पर्छ.
30:15 धनी आधा शेकेल थप्न पर्छ, र गरिब केही बढ्छ पर्छ.
30:16 र पैसा प्राप्त, जो इस्राएलका छोराहरू देखि एकत्र भएको थियो, तपाईं गवाही को बासस्थान को प्रयोगका लागि छुटकारा दिनेछु, यो प्रभु अघि तिनीहरूलाई को एक स्मारक हुन सक्छ भनेर, र उहाँले आफ्नो प्राण तिर तिनीबारे राम्रो कार्य गर्न सक्छन्। "
30:17 र परमप्रभुले मोशालाई कुरा, यसो:
30:18 "तपाईं पनि धुन यसको आधार एक कांस्य washtub गर्नेछ; र तपाईं गवाही को बासस्थान र वेदी बीच ठाँउ पर्छ. र जब पानी थपिएको छ,
30:19 हारून र तिनका छोराहरूलाई यो आफ्नो हात र खुट्टा धुनु पर्छ:
30:20 जब तिनीहरूले गवाही को बासस्थान प्रविष्ट, र तिनीहरूले वेदी गर्न जाँदा जब यो मा प्रभु गर्न धूप प्रस्ताव ताकि,
30:21 अन्यथा, तिनीहरूले मर्न सक्छ. यो उहाँको अनन्त व्यवस्था हुनेछ, र आफ्नो सन्तानलाई, आफ्नो successions भर। "
30:22 र परमप्रभुले मोशालाई कुरा,
30:23 यसो: "आफैलाई aromatics लागि लिनुहोस्: पहिलो र सबै भन्दा राम्रो myrrh को, पाँच सय शेकेल, दालचिनी आधा को र धेरै, छ, दुई सय र पचास शेकेल; को मिठो झण्डा त्यस्तै दुई सय र पचास,
30:24 तर तेजपात को, बासस्थान को वजन द्वारा पाँच सय शेकेल, र जैतून को तेल को एक हिन को उपाय.
30:25 र तपाईं जोश को पवित्र तेल बनाउन पर्छ, एक perfumer को कौशल संग बनेको एक मलम,
30:26 र यो तपाईंलाई गवाहीलाई को बासस्थान अभिषेक पर्छ, र करारका जहाज,
30:27 र यसको नली संग तालिका, र lampstand र यो बर्तन, धूप को वेदीहरू
30:28 र आहुति को, र आफ्नो संस्कार गर्न pertain सबै वस्तुहरू.
30:29 र तपाईं सबै पवित्र पर्छ, र तिनीहरूले holies को पवित्र हुनेछ. तिनीहरूलाई स्पर्श गर्ने उहाँले पवित्र हुनुपर्छ.
30:30 तपाईं हारून र तिनका छोराहरूलाई अभिषेक पर्छ, र तपाईं तिनीहरूलाई पवित्र पर्छ, तिनीहरूले मेरो लागि पुजारीको खेती हुन सक्छ भनेर.
30:31 त्यसै गरी, तपाईं इस्राएलका छोराहरूलाई भनौं: 'जोश यो तेल तपाईंको पुस्तामा भर मलाई पवित्र हुनेछ.
30:32 मानिसको शरीरमा यो बाट अभिषिक्त गरिनेछ, र तपाईं कुनै पनि यस्तै मिश्रित बनाउन हुँदैन, यसलाई पवित्र गरिएको छ र यो तपाईं पवित्र हुनेछ.
30:33 जो मानिस यस्तो कुरा बनेको छ र पराई यसलाई दिइएको छ, उहाँले आफ्नो मान्छे देखि exterminated गरिनेछ। ' "
30:34 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "आफैलाई लिनुहोस् aromatics: stacte, र onycha, मीठो गन्ध को galbanum, र clearest frankincense, यी सबै बराबर वजन को हुनेछ.
30:35 र तपाईं एक perfumer को कौशल संग बनेको धूप बनाउन पर्छ, लगनशील भई मिश्रित, र शुद्ध, र पवित्रीकरण को सबै भन्दा योग्य.
30:36 र तपाईं एक धेरै राम्रो पाउडर मा यी सबै चोट जब, तपाईं गवाही को बासस्थान अघि केही ठाँउ पर्छ, म तपाईंलाई देखिने ठाउँमा मा. holies को पवित्र यो धूप तपाईं हुनेछ.
30:37 तपाईं आफ्नो प्रयोगका लागि यस्तो मिश्रित बनाउन हुँदैन, किनभने यसले प्रभु पवित्र.
30:38 जो मानिस समान केहि गरेका छन् हुनेछ, राम्ररी यसको गन्ध आनंद ताकि, उहाँले आफ्नो मान्छे देखि नष्ट गर्नेछु। "
31:2 "हेर, म नाम बजलेल URI छोरा द्वारा भनिन्छ छन्, कसरी छोरा, यहूदा कुलका देखि,
31:3 र म परमेश्वरको आत्माले उहाँलाई भरिएको छ, बुद्धि, र समझ, र हरेक शिल्प मा ज्ञान,
31:4 सुन बाट निर्मित हुनुपर्छ जो डिजाइन गर्न, र चाँदी, र पीतल,
31:5 संगमरमर देखि, र रत्नहरू, र विभिन्न जंगल.
31:6 र म उसलाई दिइएको छ, आफ्नो एसोसिएट रूपमा, Ahisamach छोरा Oholiab, दान कुलका देखि. र म हरेक कालिगढ को हृदयमा बुद्धि राखेको छु, तिनीहरूले सबै बनाउन सक्छ भनेर म निर्देशन गरेका छन् रूपमा:
31:7 करारको को बासस्थान, र गवाही को जहाज, र जो प्रायश्चितको यो भन्दा बढी छ, र सबै बासस्थान को जहाजहरु,
31:8 तालिका र यसको नली र, यसको नली संग सबैभन्दा शुद्ध lampstand, र धूप को वेदीहरू
31:9 पूर्ण आहुति को र र आफ्नो सबै जहाजहरू, यसको आधार संग washtub,
31:10 हारूनको सेवाको पुजारी लागि पवित्र vestments, र तिनका छोराहरूलाई लागि, तिनीहरूले पवित्र रीतिथितिहरू आफ्नो कार्यालय कार्यान्वयन हुन सक्छ भनेर,
31:11 जोश को तेल, र बासस्थान मा aromatics को धूप. म निर्देशन गरेका सबै कुराहरू, तिनीहरूले तुल्याउनेछ। "
31:12 र परमप्रभुले मोशालाई कुरा, यसो:
31:13 "इस्राएलका छोराहरू गर्न बोल्नुहोस्, र तपाईं तिनीहरूलाई भनौं: तिमी मेरो विश्राम दिन पालन देख्न. यसको लागि आफ्नो पुस्तामा बीचमा मलाई र तपाईं बीच एक चिन्ह हो, तपाईंलाई थाहा हुन सक्छ भनेर म प्रभु हुँ भनी, जसले तपाईंलाई पवित्र.
31:14 मेरो विश्राम दिन पालन, यसलाई तपाईं पवित्र. जसले यो प्रदूषित हुनेछ, एक मृत्यु मर्नेछन्. जसले यो कुनै पनि काम गरेका हुनेछ, आफ्नो प्राण आफ्नो मान्छे को बीचमा देखि नष्ट गर्नेछु.
31:15 छ दिनको लागि तपाईं काम गर्नु पर्छ. सातौं दिनमा, यो विश्राम दिन छ, प्रभु द्वारा पवित्र आराम. यो दिनमा गर्ने काम गरेको छ जो सबै मर्नेछन्.
31:16 इस्राएलका छोराहरू विश्राम दिन पालन गरौं, र तिनीहरूको पुस्तामा भर यसलाई मनाउन गरौं. यो एक अनन्त करार छ
31:17 मलाई र इस्राएलका छोराहरू बीच, र एक सदैव साइन. लागि छ दिन प्रभु स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु, र सातौं मा उहाँले काम भएनन्। "
31:18 र प्रभु, भइरहेको पूरा सीनै पर्वतमा मा यसरी बोल्ने, गवाही दुई ढुङ्गा ट्याब्लेटको मोशालाई दिनुभएको, परमेश्वरको औंला लिखित.
32:1 त्यसपछि मानिसहरू, मोशाले डाँडाबाट घट्दो ढिलाइ गरे भनेर देखेर, हारून विरुद्ध भेला, र भन्नुभयो: "उठेर, हामीलाई देवताहरूको बनाउन, जसले हामीलाई अघि जान सक्नुहुन्छ. तर यो मानिस मोशाको लागि रूपमा, मिश्र देशमा हामीलाई टाढा नेतृत्व गर्ने, हामी उहाँलाई befallen छ के थाहा छैन। "
32:2 र हारून तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "पत्नीलाई को कान बाट सुनको कुण्डल लिनुहोस्, र आफ्नो छोरा र छोरी, र मलाई तिनीहरूलाई ल्याउन। "
32:3 र मान्छे उहाँले आज्ञा कुरा गरे, हारून गर्न कान को बाली पूरा.
32:4 र जब उहाँले तिनीहरूलाई पाएको, उहाँले एक कास्टिङ भट्टीमा काम गरेर यी गठन, र उहाँले यी एक पिघला बाछो बनाइएका. अनि तिनीहरूले भने: "यी आफ्नो देवताहरूलाई छन्, हे इस्राएलका, जसले तपाईंलाई मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व। "
32:5 र हारून यसलाई गर्दा देखेका थिए, उहाँले यसलाई अघि वेदी निर्माण, र उहाँले घोषणा को आवाज संग कराए, यसो, "भोलि प्रभुको solemnity छ।"
32:6 र बिहान अप बढ्दो, तिनीहरूले holocausts प्रस्ताव, र शान्ति सिकार, र मान्छे खान र पिउन बसे, र तिनीहरूले खेल्न उठेर.
32:7 त्यसपछि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, यसो: "जानुहोस्, धमकना. तपाईंका मानिसहरू, जसलाई तपाईं मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व, पाप.
32:8 तिनीहरूले चाँडै तपाईं तिनीहरूलाई प्रकट बाटो अलग छ. र तिनीहरू एक पिघला बाछो लागि गरेका छन्, र तिनीहरूले पूजा गरेको. र यो सिकार immolating, तिनीहरूले भने छ: 'यी आफ्नो देवताको छन्, हे इस्राएलका, जसले तपाईंलाई मिश्र देशमा टाढा भयो। ' "
32:9 अनि फेरि, परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "म यो मान्छे कडा-necked छ कि बुझ्न.
32:10 मलाई मुक्त गर, मेरो उतेजना तिनीहरूलाई विरुद्धमा असन्तोष प्रकट हुन सक्छ भनेर, र म तिनीहरूलाई नाश हुन सक्छ, त्यसपछि म तपाईं एउटा ठूलो जाति को गर्नेछ। "
32:11 त्यसपछि मोशाले प्रभु आफ्नो परमेश्वरको प्रार्थना, यसो: "किन, हे प्रभु, आफ्नो उतेजना आफ्नो मान्छे विरुद्धमा असन्तोष प्रकट गरिएको छ, जसलाई तपाईं मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व, ठूलो शक्ति र शक्तिशाली हातले?
32:12 म तपाईंसँग प्रार्थना गर्छु, मिश्रीहरूले भन्न गरौं, 'उहाँले चलाखीपूर्ण टाढा तिनीहरूलाई नेतृत्व, उहाँले हिमाल मा मृत्यु तिनीहरूलाई राख्नु र पृथ्वी तिनीहरूलाई नष्ट सकून् भनेर। 'आफ्नो रिस quieted होस् र आफ्नो मान्छे को दुष्टताको विषयमा appeased.
32:13 अब्राहाम सम्झना, इसहाक, इस्राएलका, आफ्नो सेवक, जसलाई तपाईं आफ्नो धेरै स्वयं द्वारा कसम खाएँ, यसो: 'म स्वर्गबाट ​​ताराहरू जस्तै आफ्नो सन्तानको गुणा गर्नेछन्. र यो सम्पूर्ण भूमि, जो बारेमा म बोलेको छु, म आफ्नो सन्तानलाई दिनेछु. अनि के तपाईं सधैंभरि अधिकार हुनेछ। ' "
32:14 र प्रभु उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई विरुद्ध बोलेको थियो जो दुष्ट गर्नदेखि appeased थियो.
32:15 र मोशाले डाँडाबाट फिर्ता, आफ्नो हात मा गवाही दुई ट्याब्लेटको पूरा, दुवै पक्षले लिखित,
32:16 र परमेश्वरको काम द्वारा पूरा. पनि, परमेश्वरको लेखन को पाटीमा कुँदिएका थियो.
32:17 त्यसपछि यहोशू, shouting मान्छे को खैलाबैला मच्चाउँछन् सुनेपछि, मोशालाई भन्नुभयो: "युद्धको पुकारा शिविर मा सुना छ।"
32:18 तर उहाँले जवाफ: "यो युद्धमा गर्न आग्रह गरे भइरहेको मानिसहरूको clamor छैन, न त मानिसहरूको कराउनु भाग्न compelled भइरहेको. तर म गायन को आवाज सुन्न। "
32:19 अनि उहाँले शिविरमा नजिक थियो जब, उहाँले बाछो र नृत्य देखे. र अत्यन्त क्रोधित भएर, उहाँले आफ्नो हात बाट ट्याब्लेटको तल फाले, र त्यो पहाड को आधार मा उनलाई भङ्ग.
32:20 र बाछो नहट्ने, जो तिनीहरूले बनाएको, उहाँले यसलाई जल र यो चोट, पनि धूलो गर्न, जो उहाँले पानी छरिएका. र उहाँले पिउन इस्राएलका छोराहरू यसलाई देखि दिनुभयो.
32:21 र उहाँले हारूनलाई भन्नुभयो, "तपाईं गरेको यो मान्छे कस्तो छ, तपाईं सबैभन्दा ठूलो पाप तिनीहरूमाथि ल्याउने भनेर?"
32:22 र उहाँले जवाफ दिए: "गरौं मेरो प्रभु रिस उठ्दैन हुन. लागि यो मान्छे थाहा, तिनीहरूले दुष्ट झुकाउ छन् कि.
32:23 तिनीहरूले मलाई भन्नुभयो: 'हाम्रो लागि देवताहरूको गर्नुहोस्, जसले हामीलाई अघि जान सक्नुहुन्छ. यो मोशाको लागि, मिश्र देशमा हामीलाई टाढा नेतृत्व गर्ने, हामी उहाँलाई befallen छ के थाहा छैन। '
32:24 र म तिनीहरूलाई भन्नुभयो, 'तपाईं कुन सुन?'अनि तिनीहरूले लिए र मलाई दिनुभयो. र म आगो यसलाई फाले, र यो बाछो बाहिर आए। "
32:25 त्यसैले, मोशाले, मानिसहरूले नग्न थिए देखेर (हारून लागि उनीहरूको sordidness को निरादर तिनीहरूलाई खोसिएर नाङ्गै थियो, र उहाँले तिनीहरूलाई सेट आफ्नो शत्रुहरू बीच नाङ्गो थियो),
32:26 र शिविरमा को गेट उभिरहेको, भने: "कसैले प्रभु लागि हो भने, उहाँलाई मेरो साथ सामेल गरौं। "अनि लेवी सबै छोराहरू उहाँलाई सँगै आफूलाई भेला.
32:27 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "त्यसैले इस्राएलको परमेश्वरले भन्नुहुन्छ: मानिस आफ्नो जांघ मा आफ्नो तरवार राख्न गरौं. जानुहोस्, र त्यसपछि फिर्ता, गेट द्वारबाट, शिविरमा बीचमा मार्फत, र प्रत्येक एक आफ्नो भाइ मार्न गरौं, र मित्र, र छिमेकीलाई। "
32:28 र लेवी छोराहरू मोशाको शब्दहरू अनुसार गरे, र त्यहाँ बारेमा बीस-तीन हजार मानिसहरू त्यस दिन गिर.
32:29 र मोशाले भने: "यो दिनमा, तपाईं प्रभु आफ्नो हात consecrated छ, आफ्नो छोरा र आफ्नो भाइ प्रत्येक एक, ताकि आशिष् तपाईं दिइएको हुन सक्छ। "
32:30 त्यसपछि, जब अर्को दिन आइपुगे, मोशाले मानिसहरूलाई कुरा: "तपाईं सबैभन्दा ठूलो पाप पाप. म प्रभुको चढ्नु हुनेछ. सायद, केही तरिकामा, म आफ्नो दुष्टताको लागि उहाँलाई बिन्ती गर्न सक्षम हुन सक्छ। "
32:31 र प्रभु फर्केपछि, उहाँले भन्नुभयो: "म तपाईंसँग प्रार्थना गर्छु, यो मान्छे सबैभन्दा ठूलो पाप पाप छ, र तिनीहरू सुन देवताहरूको लागि गरेका छन्. कि त यो ठेस तिनीहरूलाई जारी,
32:32 वा, तपाईं छैन भने, त्यसपछि लेख्नुभएको छ कि पुस्तक मलाई मेटाउन। "
32:33 र प्रभु उहाँलाई जवाफ दिए: "जसले मलाई विरुद्धमा पाप गरेको छ, उसलाई मैले मेरो पुस्तक बाट मेटाउन हुनेछ.
32:34 तर तपाईं को लागि रूपमा, जाने र कहाँ म भन्नुभयो छ यो मान्छे नेतृत्व. मेरो स्वर्गदूतले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछ. त्यसपछि, मा प्रतिकार दिन, म पनि तिनीहरूको यो पाप भ्रमण हुनेछ। "
32:35 त्यसैले, प्रभु मानिसहरू बाछो को दोषी को लागि प्रहार, जो हारून बनाएको.
33:1 र परमप्रभुले मोशालाई कुरा, यसो: "बढ्नुहोस्, यो स्थान बाट चढ्नु, तपाईं र तपाईंका मानिसहरू, जसलाई तपाईं मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व, म अब्राहाम शपथ खानुभयो कि भूमिमा, इसहाक, र याकूब, यसो: आफ्नो सन्तानलाई, म दिनुहुनेछ.
33:2 र म तपाईंलाई लिनुअघि गर्न एउटा दूत पठाउने, म कनानी फ्याँकिएको ताकि, र एमोरी, र हित्ती, र Perizzite, र Hivite, र Jebusite,
33:3 र तपाईं एक देशमा प्रवेश गर्न सक्छ भनेर दूध र मह संग बगिरहेको. म तपाईं संग जाने, देखि तपाईं एक कडा-necked मान्छे हो, सायद नत्र म बाटो मा तपाईं नष्ट हुन सक्छ। "
33:4 र मा यो धेरै नराम्रो समाचार सुन्नुपर्दा, मानिसहरू शोकाकुल; र अनुकूलन अनुसार आफ्नो सजधज कुनै एक राख्न.
33:5 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "इस्राएलका छोराहरू भन्नुहोस्: तपाईं एक कडा-necked मान्छे हो. म एकैचोटि आफ्नो बीचमा मा अप जानुहोस् र तपाईंले नष्ट गर्नुपर्छ. अब तुरुन्त आफ्नो गहने पन्छाएर, त्यसैले म तिमीलाई के थाहा हुन सक्छ। "
33:6 त्यसैले, इस्राएलका छोराहरू माउन्ट Horeb अघि आफ्नो गहने पन्छाएर.
33:7 पनि, मोशाले बासस्थानको लिए र एक दूरी मा शिविरमा परे यो पिच, र उहाँले आफ्नो नाम भनिन्छ: 'करारको को भेट हुने पालको।' अनि सबै मानिसहरू, जो प्रश्न को कुनै पनि प्रकारको थियो, करारको भेट हुने पालको बाहिर गए, शिविरमा परे.
33:8 र मोशाले बासस्थान बाहिर जाँदा, सबै मानिसहरू उठेर, र प्रत्येकले मंडप को ढोका मा उभिएर, र तिनीहरूले त्यो पाल प्रविष्ट सम्म मोशाको फिर्ता अवलोकन.
33:9 र त्यो करार भेट हुने पालको गएका थिए जब, बादल को खाँबो descended र ढोकामा उभिएर, र उहाँले मोशालाई कुरा.
33:10 र सबै बादल को खाँबो भेट हुने पालको ढोका मा उभिएर कि बुझ्नुभयो. र तिनीहरूले उभिएर आफ्नो पाल को ढोका मा पूजा.
33:11 तर प्रभु अनुहार मोशाले अनुहार कुरा, मानिस आफ्नो मित्र बोल्दै प्रयोग गरिन्छ जस्तै. अनि उहाँले शिविरमा फर्कंदा, आफ्नो सेवक यहोशू, नन छोरा, एक जवान, भेट हुने पालको देखि फिर्ता गरेनन्.
33:12 त्यसपछि मोशाले प्रभु भन्नुभयो: "तपाईंले मलाई टाढा मान्छे नेतृत्व गर्न निर्देशन, र तपाईं मलाई प्रकट छैन जसलाई तिमी मेरो साथ पठाउने, विशेष देखि तपाईं भन्नुभयो छन्: 'म नाम तपाईंलाई थाहा, र तपाईंले मलाई अघि पक्षमा पाएका छन्। '
33:13 यदि, त्यसैले, म आफ्नो दृष्टि मा अनुमोदन पाएका छन्, मलाई आफ्नो अनुहार देखाउन, ताकि म तपाईंलाई थाहा हुन सक्छ र आफ्नो आँखा अघि अनुग्रह पाउन सक्छ. आफ्नो मान्छे मा तिनीबारे राम्रो हेर, यो राष्ट्र। "
33:14 अनि प्रभु भन्नुभयो, "मेरो अनुहार तपाईं लिनुअघि हुनेछ, र म तपाईंलाई आराम दिनेछु। "
33:15 र मोशाले भने: "तपाईं आफैलाई हामीलाई छैन लिनुअघि हुनेछ भने, त्यसपछि यो ठाउँ हामीलाई टाढा नेतृत्व छैन.
33:16 हामी कसरी थाह गर्न सक्षम हुनेछ, म र आफ्नो मान्छे, हामी आफ्नो दृष्टि मा अनुग्रह पाएका छन् कि, तपाईं हामीलाई हिंड्न नभएसम्म, ताकि हामी पृथ्वीमा बस्ने सबै मानिसहरू बाहिर महिमा हुन सक्छ?"
33:17 त्यसपछि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "यो पनि शब्द, जो तपाईं बोलेको छु, म के हुनेछ. लागि मलाई अघि अनुग्रह पाएका छन्, र म नाम तपाईंलाई ज्ञात छ। "
33:18 अनि उहाँले भन्नुभयो, "मलाई तपाईंको महिमा देखाउनुहोस्।"
33:19 उहाँले जवाफ: "म तिमीलाई देखाउने सबै राम्रो छ, र म तपाईंलाई अघि प्रभुको नाम बाहिर कल गर्नेछ. र म मा दया हुनेछ जसलाई म हुनेछ, र म यो मलाई जसलाई खुसी हुनेछ दयाशील हुनेछ। "
33:20 र फेरि उहाँले भन्नुभयो: "तपाईं मेरो अनुहार हेर्न सक्षम छन्. मानिस मलाई देख्न र बाँच्न पर्छ। "
33:21 अनि फेरि, उहाँले भन्नुभयो: "हेर, त्यहाँ मलाई एउटा स्थान हो, र तपाईं रक मा खडा गर्नेछु.
33:22 र मेरो महिमा भन्दा पार गर्दा, म चट्टान एक छेद तपाईं सेट गर्नेछ, र म मेरो दाहिने हातले रक्षा गर्नेछ, जब सम्म म द्वारा पारित.
33:23 र म मेरो हात लाग्न टाढा हुनेछ, र तपाईं मेरो फिर्ता देख्नेछन्. तर मेरो अनुहार हेर्न सक्षम छन्। "
34:1 र यो पछि उहाँले भन्नुभयो: पत्थर को पहिलो व्यक्तिहरूलाई समान दुई पाटी "आफैलाई लागि बाहिर कट, र म तपाईंलाई भङ्ग कि पाटीमा आयोजित थिए शब्दहरू तिनीहरूमाथि लेख्न हुनेछ.
34:2 बिहान तयार, तपाईं तुरुन्त सीनै पर्वतमा मा चढ्नु सक्छ भनेर, र तपाईं पहाड को शिखर मा मेरो साथ खडा गर्नेछु.
34:3 कुनै एक तपाईंसँग चढ्नु गरौं, र कसैले सम्पूर्ण पहाड भर देखेको होस् छैन. त्यसै गरी, को बैलों वा विरुद्ध भेडा खर्क अप गरौं छैन। "
34:4 र त त्यो पत्थर को दुई ट्याब्लेटको बाहिर कटौती, अघि थिए ती जस्तै. र रात मा बढ्दो, उहाँले सीनै पर्वतमा मा जानुभयो, जस्तै प्रभु उहाँलाई निर्देशन दिनुभएको थियो, उसलाई पूरा भएको ट्याब्लेटको.
34:5 र प्रभु एक क्लाउडमा descended थियो जब, मोशाले उसलाई उभिए, प्रभुको नाम मा कल.
34:6 र उहाँले तिनलाई अघि पार थियो, उहाँले भन्नुभयो: "शासकले, प्रभु परमेश्वर, दयालु र दयाशील, रोगी र दया भरिएको र पनि सत्यवादी,
34:7 जो कृपा एक हजार गुना जोगाउनुहुन्छ, जो iniquity टाढा लाग्छ, र दुष्टताको, र पनि पाप; र तपाईंसँग कुनै एक, र आफूलाई को, निर्दोष छ. तपाईं छोरा गर्न पुर्खाहरूले को iniquity प्रस्तुत, र पनि आफ्नो descendents गर्न तेस्रो र चौथो पुस्ता गर्न। "
34:8 र hurrying, मोशाले भूमि गर्न लमतन्न परेर पसारिएका ढोगे; र उपासना,
34:9 उहाँले भन्नुभयो: "आफ्नो दृष्टि मा भने म फेला अनुग्रह, हे प्रभु, म तपाईं हामीलाई हिंड्न माग्छु, (मानिसहरूको लागि कडा-necked छन्) र लिन हाम्रो iniquities र हाम्रो पाप टाढा, र हामीलाई अधिकार। "
34:10 प्रभु प्रतिक्रिया: "म सबै को दृष्टि मा एक सम्भ्कौता प्रवेश गर्नेछ. म पृथ्वीमा देखेको कहिल्यै जो गरिएको संकेत प्रदर्शन गर्नेछन्, न त कुनै पनि राष्ट्र बीच, त्यसैले यो मान्छे, जसको बीचमा तपाईं, प्रभुको भयानक काम म के भनेर बुझ्न सक्छ.
34:11 सबै पालन म यो दिन तपाईं आदेश कि. म आफ्नो अनुहार एमोरी अघि बाहिर ड्राइव गर्नेछन्, र कनानी, र हित्ती, र Perizzite, र Hivite, र Jebusite.
34:12 के तपाईं कहिल्यै कि भूमि को बासिन्दाहरू संग मित्रतालाई सामेल छैन भनेर होसियार हुनुहोस्, जो आफ्नो खण्डहर हुन सक्छ.
34:13 तर आफ्नो वेदीहरू नष्ट, आफ्नो मूर्तिहरू तोड्न, र आफ्नो पवित्र बगैंचाहरु तल कटौती.
34:14 कुनै पनि अनौठो परमेश्वरको उपासना गर्न इच्छुक छैन. आफ्नो नाम डाह प्रभु हो. परमेश्वर प्रतिद्वन्द्वी छ.
34:15 ती क्षेत्रहरू को मानिसहरूसँग एक सम्भ्कौता प्रवेश गर्छन्, lest, जब तिनीहरूले देवताहरूको संग fornicated र आफ्नो मूर्तिहरू पूजा हुनेछ, कसैले immolated थियो के खाने तपाईं पुकारा सक्छ.
34:16 न त तपाईं आफ्नो छोरी आफ्नो छोरा को लागि एक पत्नी लिन पर्छ, lest, तिनीहरूले पछि आफूलाई fornicated छ, तिनीहरूले देवताहरूको संग fornicate पनि आफ्नो छोरा सक्छ.
34:17 तिमीहरू कुनै पनि पिघला देवताहरूको लागि बनाउन हुँदैन.
34:18 तपाईं अखमिरी रोटी को solemnity पालन गर्नेछु. सात दिनको लागि, तपाईं अखमिरी रोटी खानु पर्छ, म निर्देशन गरेझैं, को महिनाको समय मा के नयाँ छ. लागि बहार को महिना मा तपाईं मिश्रबाट प्रस्थान.
34:19 पुरुष प्रकारको सबै, जो गर्भमा खोल्न, मेरो हुनेछ: सबै पशुहरू देखि, रूपमा भेडाको रूपमा बैलों धेरै, यो मेरो हुनेछ.
34:20 एक गधा को जेठो, तपाईं एक भेडा संग उद्धार गर्नेछ. तर तपाईं यो लागि मूल्य दिन भने छैन, यो slain गरिनेछ. तपाईं उद्धार गर्नेछ आफ्नो छोरा को जेठो. तिमी मेरो दृष्टि खाली देखिने छैन पर्छ.
34:21 छ दिनको लागि तपाईं काम गर्नेछ. सातौं दिन मा तपाईं खेती गर्न र बाली गर्न बन्द हुनेछन्.
34:22 तपाईं आफ्नो गहुँ बाली देखि अन्नको पहिलो-फल संग हप्ता को Solemnity पालन गर्नेछु, र एक Solemnity टाढा वर्ष लाभ को समय र सबै गर्दा भण्डारण गरिएको छ.
34:23 एक वर्ष तीन पटक, आफ्नो सबै पुरुषहरु सर्वशक्तिमान को दृष्टि देखा पर्छ, इस्राएलका परमेश्वरले.
34:24 म जातिहरूलाई लगिएको हुनेछ छन् आफ्नो अनुहार अघि जब लागि, र आफ्नो सीमाना बढेको, तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि देखा सम्म जानेछ जब कुनै एक आफ्नो भूमि विरुद्ध पर्खाइ मा झूठ पर्छ, एक वर्ष तीन पटक.
34:25 तपाईं खमिर भन्दा मेरो शिकार रगत immolate छैन; र त्यहाँ रहने छैन, बिहानी पख, निस्तार-चाड को Solemnity सिकार कुनै पनि.
34:26 आफ्नो भूमि को फल को पहिलो तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको घरमा प्रस्ताव पर्छ. तपाईं आफ्नो आमा को दूध मा एक युवा बाख्रा जोश छैन। "
34:27 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, "तपाईं यी शब्दहरू लेख्नुहोस्, जो मार्फत म एक करार गठन गरेको छ, तपाईं संग दुवै र इजरायल संग। "
34:28 त्यसैले, उहाँले चालीस दिन र चालीस रात लागि प्रभु संग ठाउँमा थियो; उहाँले रोटी खान थिएन र उहाँले पानी पिउन थिएन, र त्यो करारको दस शब्दहरूले पाटीमा लेखे.
34:29 मोशाले सीनै पर्वतमा देखि descended गर्दा, उहाँले गवाहीलाई दुई ट्याब्लेटको आयोजित, र उहाँले आफ्नो अनुहार प्रभु संग शब्दहरूको साझेदारी देखि उज्ज्वल थियो थाहा थिएन.
34:30 त्यसपछि हारून र इस्राएलका छोराहरू, मोशाको अनुहार उज्ज्वल थियो देखेर, नजिकै भेट्नुपर्छ गर्न डराएका थिए.
34:31 र उसलाई द्वारा भनिन्छ भइरहेको, तिनीहरूले फिर्ता गरिएका, हारून र विधानसभा नेताहरू दुवै. र उहाँले तिनीहरूलाई बोली थियो पछि,
34:32 इस्राएलका सबै छोराहरूलाई पनि अब उसलाई आए. र उहाँले सीनै पर्वतमा मा प्रभु देखि सुनेका सबै कुरा तिनीहरूलाई निर्देशन.
34:33 र यी शब्दहरू पूरा भएको, उहाँले आफ्नो अनुहार माथि पर्दा राखिएको.
34:34 तर उसलाई त्यो प्रभुको प्रवेश गर्दा र बोल्ने थियो, उहाँले यो बन्द गरे, उहाँले बन्द गरियो सम्म. त्यसपछि उहाँले तिनलाई यस्तो आज्ञा दिनुभयो गरिएको थियो इस्राएलका सबै छोराहरू कुरा.
34:35 र तिनीहरूले देखे कि मोशाको अनुहार, उहाँले बाहिर आउँदा, उज्ज्वल थियो, तर उहाँले फेरि आफ्नो अनुहार ढाकिएको, उहाँले तिनीहरूलाई जब.
35:1 त्यसैले, इस्राएलका छोराहरू सबै भीड भेला थियो जब, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "यी प्रभु गरिन गर्न आदेश दिएको छ कि कुरा हो:
35:2 छ दिनको लागि तपाईं काम गर्नु पर्छ; सातौं दिन, विश्राम दिन र प्रभु को बाँकी, तपाईं पवित्र हुनेछ; यसलाई हत्या गरिनेछ मा जसले कुनै पनि काम गरेका हुनेछ.
35:3 तपाईं विश्राम दिन को दिन भर आफ्नो वासस्थान ठाउँमा कुनै पनि आगो kindle छैन। "
35:4 मोशाले इस्राएलका छोराहरू सम्पूर्ण भीड भने: "यो जो प्रभु निर्देशन छ शब्द छ, यसो:
35:5 तपाईं बीच प्रभु पहिलो-फल अलग. इच्छुक छन् र एक तयार प्राण भएका सबै प्रभु यी प्रस्ताव गरौं: सुन, र चाँदी, र पीतल,
35:6 जलकुंभी, र बैजनी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, र मलमलको, बाख्राको केश,
35:7 र मेढे को खाल, रंगा रातो, र बैंगनी खाल, setim काठ,
35:8 र रोशनी तयार तेल र मलम उत्पादन, र सबै भन्दा प्यारो धूप,
35:9 गोमेद पत्थर र रत्न, को ephod र छातीको पाता सजाउनु गर्न.
35:10 र तपाईं बीच जसले बुद्धिमानी हुन्छ, उहाँलाई आओस् र प्रभु के आज्ञा छ बनाउन:
35:11 बासस्थानलाई, पक्कै पनि, र यसको छत, र पनि कवर, छल्ले, पट्टी संग र प्यानल, पाल pegs र आधारमा,
35:12 जहाज र यसको बारहरू, यस प्रायश्चितको, र यो अघि आएको छ कि पर्दा,
35:13 यसको बारहरू र जहाजहरु संग तालिका, र उपस्थिति को रोटी,
35:14 रोशनी पकड गर्न lampstand, यसको नली र दीपक, र पनि तेल आगो पोषण,
35:15 धूप र यसको बारहरू वेदी, र जोश को तेल, र aromatics को धूप, बासस्थानलाई को ढोका मा पाल,
35:16 पूर्ण आहुति वेदी र पीतल को आफ्नो अंगीठी, पट्टी र जहाजहरु संग, को washtub र यसको आधार,
35:17 को Atrium को पर्दे, स्तम्भहरू र आधारमा संग, को vestibule को ढोका मा झुन्डिएको,
35:18 बासस्थानलाई र Atrium को पाल pegs, आफ्नो सानो डोरियों संग,
35:19 को vestments, जो बासस्थान को सेवकाईमा प्रयोग गर्न हो, हारूनको vestments, प्रधान पुजारीलाई, साथै तिनका छोराहरूलाई ती रूपमा, क्रममा मलाई गर्न पुजारीको खेती। "
35:20 र इस्राएलका छोराहरू सबै भीड, मोशाको दृष्टि देखि प्रस्थान,
35:21 सबैभन्दा तयार र भक्त मन संग प्रभु पहिलो-फल प्रस्ताव, गवाहीलाई को बासस्थान को काम पूरा गर्न. जो उपासनाको लागि र पवित्र vestments लागि आवश्यक थियो,
35:22 प्रदान महिलाहरु संग मानिसहरू: हात बैंड र कान को बाली, छल्ले र कंगन. र सुन हरेक पोत विभाजित थियो, प्रभु दान गर्न.
35:23 जो कोहीले जलकुंभी थियो भने, र बैजनी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, मलमलको र बाख्राको केश, मेढे को खाल, रंगा रातो, र बैंगनी खाल,
35:24 चाँदी र पीतल को धातु, तिनीहरूले प्रभु यो प्रस्ताव, विभिन्न प्रयोगहरू लागि setim काठ सहित.
35:25 तर दक्ष महिला पनि काता थियो जो दिनुभयो: जलकुंभी, बैजनी, र Vermillion, साथै मलमलको रूपमा,
35:26 र बाख्राको केश, आफ्नै अनुसार को सबै दान.
35:27 यद्यपि साँच्चै, नेताहरू गोमेद पत्थर र रत्न प्रस्ताव, को ephod र छातीको पाता लागि,
35:28 र aromatics र तेल, रोशनी कायम गर्न, र मलम तयार, र पनि सबै भन्दा प्यारो गंध संग धूप उत्पादन.
35:29 सबै पुरुष र महिला एक भक्त मन संग चन्दा प्रस्ताव, कामहरू गरेको भनी सक्छ हुन त जो प्रभु मोशाको हात आदेश थियो. इस्राएलका सबै छोराहरू प्रभु स्वैच्छिक भेटी समर्पित.
35:30 मोशाले इस्राएलका छोराहरू भने: "हेर, प्रभु नाम बजलेल द्वारा भनिन्छ छ, URI छोरा, कसरी छोरा, यहूदा कुलका देखि,
35:31 र उहाँले परमेश्वरको आत्माले उहाँलाई भरिएको छ, बुद्धि, र समझ, र ज्ञान, र सबै शिक्षण,
35:32 डिजाइन र फैशन, सुन र चाँदीको र पीतल संग,
35:33 र उत्कीर्णन ढुङ्गा, र सिकर्मी को कौशल संग. जो कौशलतासाथ आविष्कार गर्न सकिन्छ,
35:34 उहाँले आफ्नो हृदय दिइएको छ. यो Oholiab संग त्यसै गरी छ, दान कुलका देखि Ahisamach छोरा.
35:35 उहाँले सिकाउनुभएको छ तिनीहरूलाई बुद्धि दुवै, बढईगीरी को काम गर्न, चित्रपट, र कढाई, जलकुंभी देखि, र बैजनी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, र मलमलको, र हरेक कपडा, र पत्ता लगाउन जो नयाँ हुन सक्छ। "
36:1 त्यसैले, बजलेलले, र Oholiab, र हरेक बुद्धिमानी मानिस, जसलाई प्रभु बुद्धि र बुद्धि दिनुभयो, कौशलतासाथ कसरी काम गर्न जान्न ताकि, गरे बासस्थान र जो प्रभुको प्रयोगका लागि आवश्यक थियो जो कि निर्देशन दिनुभएको थियो.
36:2 मोशाले तिनीहरूलाई र सिक्ने हरेक मानिस थियो जब, जसलाई प्रभु बुद्धि दिनुभएको थियो, र जो, आफ्नै अनुसार को, आफूलाई यो काम पूरा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए,
36:3 उहाँले इस्राएलका छोराहरू सबै दानको तिनीहरूलाई भन्दा हस्तान्तरण. र तिनीहरूले यो काम पछि लाग्दा बेला, तिनीहरूले प्रत्येक दिन वाचा कुरा प्रस्ताव मानिसहरू, बिहानी पख.
36:4 को कालिगढहरु जाने यो द्वारा compelled थिए
36:5 मोशालाई र भन्न, "मानिसहरू आवश्यक छ भन्दा बढी प्रस्ताव।"
36:6 त्यसैले, मोशाले यो recited गर्न आदेश, घोषणा को आवाज संग: "न मानिस न त महिला बासस्थान को काम को लागि थप केहि प्रस्ताव गरौं।" अनि त्यसैले तिनीहरू उपहार भेटी बाट भएनन्,
36:7 किनभने के चढाइने पर्याप्त थियो र एक प्रशस्त भन्दा बढी थियो.
36:8 र सबै ती हृदयको बुद्धिमानी थिए, बासस्थानलाई काम पूरा गर्न, ठीक मुड सनी बनेको दस पर्दे, र जलकुंभी, र बैजनी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, कढाई को कला द्वारा विविध कारीगरी संग.
36:9 यी प्रत्येक लम्बाइमा बीस-आठ हात थियो, र चौडाइ मा, चार. सबै पर्दे एक उपाय को थिए.
36:10 र उहाँले एक अर्को पाँच पर्दे सामेल, र अन्य पाँच उहाँले एक अर्को मिलेर.
36:11 उहाँले पनि दुवै पक्षलाई एक पर्दा किनारा साथ जलकुंभी को लूपहरूको गरे, र त्यस्तै अन्य पर्दा किनारा साथ,
36:12 को लूपहरूको एक अर्को विरुद्ध पूरा हुन सक्छ र सँगै सामेल हुन सक्छ भनेर.
36:13 यी लागि, उहाँले पनि पचास सुन छल्ले डाली, जो पर्दे को लूपहरूको राख्ने थियो र त बासस्थानको एक बनाउन.
36:14 पनि उहाँले बाख्राको केश देखि एघार canopies गरे, बासस्थानलाई को छत कवर गर्न:
36:15 एक चदंवा लम्बाइ तीस हात मा आयोजित, र चौडाइ चार हात मा. सबै canopies एक उपाय को थिए.
36:16 पाँच उहाँले आफूलाई द्वारा सामेल यी को, र अन्य अलग छ.
36:17 र उहाँले एक चदंवा किनारा साथ पचास लूपहरूको गरे, र पचास अन्य चदंवा किनारा साथ, ताकि तिनीहरूले आपसमा सामेल हुन सक्छ,
36:18 र पीतल पचास buckles, जो संग छत सँगै बुना हुन सक्छ, त्यसैले सबै canopies त्यहाँ एक कवर बनाइने भनेर.
36:19 उहाँले पनि मेढे को खाल देखि बासस्थानको लागि एक कवर गरे, रंगा-रातो; र यो माथि अर्को आवरण, बैंगनी खाल देखि.
36:20 उहाँले पनि बासस्थानको को खडा प्यानल गरे, setim काठ बाट.
36:21 दस हात एक प्यानल को लम्बाइ थियो, र एक र आधा हात चौडाई comprised.
36:22 त्यहाँ हरेक प्यानल दुई dovetails थिए, ताकि एक अन्य सामेल हुन सक्छ. यसरी उहाँले बासस्थान सबै प्यानल गरे.
36:23 यी को, बीस को मेरिडियन क्षेत्र तिर थिए, दक्षिण विपरीत,
36:24 चाँदी चालीस आधारमा संग. दुई आधारमा पनि कुनामा दुई पक्ष प्रत्येक एक प्यानल अन्तर्गत सेट थिए, जहाँ पक्ष को जोइन्टहरूमा कुनामा मा समाप्त.
36:25 त्यसै गरी, उत्तरी तिर देखिन्छ जो बासस्थानको को कि छेउमा, उहाँले बीस प्यानल गरे,
36:26 चाँदी चालीस आधारमा संग, प्रत्येक बोर्ड लागि दुई आधारमा.
36:27 यद्यपि साँच्चै, पश्चिम विपरीत, छ, जो समुद्र तिर बाहिर देखिन्छ बासस्थानलाई को भाग तिर, उहाँले छ प्यानल गरे,
36:28 र फिर्ता मा बासस्थानको प्रत्येक कुनामा दुई अरूलाई,
36:29 जो माथि तल बाट सामेल र एक संयुक्त द्वारा सँगै आयोजित थिए. त्यसैले त्यो पक्षमा दुवै कुनामा गरे.
36:30 त्यसैले त, त्यहाँ पूरै आठ प्यानल थिए, र तिनीहरूले चाँदी सोह्र आधारमा थियो, संग, को पाठ्यक्रम, प्रत्येक प्यानल अन्तर्गत दुई आधारमा.
36:31 उहाँले पनि setim काठ देखि बारहरू गरे: पाँच बासस्थान को एक पक्ष मा प्यानल सँगै पकड,
36:32 पाँच अरूलाई सँगै अन्य पक्ष को प्यानल फिट गर्न, र, यी बाहेक, बासस्थानलाई को पश्चिमी क्षेत्र तिर पाँच अन्य बारहरू, समुद्र विपरीत.
36:33 उहाँले पनि अर्को पट्टी गरे, जो कर्नर कुना बाट प्यानल को बीचमा मार्फत आए.
36:34 तर प्यानल आफूलाई उहाँले सुन ओभरले, तिनीहरूलाई लागि चाँदी आधारमा कास्टिङ. र उहाँले सुन देखि आफ्नो छल्ले गरे, जो मार्फत बारहरू आएको गर्न सक्षम हुन सक्छ. र त्यो बारहरू आफूलाई सुनको तहहरू ढाकिएको.
36:35 उहाँले पनि जलकुंभी देखि एक पर्दा गरे, र बैजनी, Vermillion साथै राम्रो मुड सनी देखि, वैविध्यपूर्ण र विशिष्ट कढाई संग,
36:36 setim काठ को र चार स्तम्भहरू, जो, आफ्नो टाउको संग, उहाँले सुन ओभरले, तिनीहरूलाई लागि चाँदी आधारमा कास्टिङ.
36:37 उहाँले पनि जलकुंभी देखि बासस्थान को प्रवेश मा पाल गरे, बैजनी, Vermillion, र ठीक मुड सनी, कढाई संग गढा,
36:38 आफ्नो टाउको र पाँच स्तम्भहरू, जसमा उनले सुन ढाकिएको, र उहाँले पीतल देखि आफ्नो आधारमा डाली.
37:1 अब बजलेल पनि setim काठ बाट जहाज गरे, लम्बाइ दुई र एक आधा हात भएको, र चौडाइ एक र आधा हात, र उचाइ पनि एक र आधा हात थियो. र उहाँले शुद्ध सुन यसलाई ढाकिएको, भित्र र बाहिर.
37:2 र यसको लागि उहाँले सबै वरिपरि सुनको मुकुट गरे,
37:3 यसको चार कुनामा मा चार सुन छल्ले कास्टिङ: एक छेउमा दुई छल्ले, अन्य र दुई.
37:4 त्यसै गरी, उहाँले setim काठ देखि बारहरू गरे, जसमा उनले सुन ढाकिएको,
37:5 र त्यो छल्ले तिनीहरूलाई राखिएको, जो जहाज को पक्ष मा थिए, यसलाई पूरा गर्न.
37:6 उहाँले पनि प्रायश्चितको गरे, छ, को Oracle, उत्कृष्ट सुन बाट, लम्बाइ दुई र एक आधा हात, र चौडाइ एक र आधा हात,
37:7 र नमनीय सुनको त्यसपछि दुई Cherubim, जो उहाँले प्रायश्चितको दुई पक्ष मा अवस्थित:
37:8 एक पक्ष माथि एक करूब, र अन्य पक्ष माथि अन्य करूब. दुई Cherubim को प्रायश्चितको प्रत्येक अन्त मा थिए,
37:9 आफ्नो पखेटा फैलाउने, र प्रायश्चितको सुरक्षा, र यो तिर र एक अर्को तिर नरहन.
37:10 उहाँले पनि setim काठ देखि तालिका गरे, दुई हात को एक लम्बाइ संग, र एक cubit एक चौडाई, जो एक र आधा हात को एक उचाइ थियो.
37:11 र उहाँले उत्कृष्ट सुन यसलाई घेरिएको, र यसको लागि उहाँले सबै वरिपरि सुनको एउटा भ्क्याल गरे,
37:12 र भ्क्याल नै लागि उहाँले सुनको पलिश मुकुट गरे, चार औंलाहरु उच्च, र नै मा, सुनको अर्को मुकुट.
37:13 र उहाँले चार सुन छल्ले डाली, जो उहाँले तालिका प्रत्येक खुट्टा मा चार कुनामा मा सेट,
37:14 मुकुट विपरीत. र उहाँले तिनीहरूलाई मा बारहरू राखिएको, तालिका लगे सकिएन भनेर.
37:15 त्यसै गरी, पट्टी आफूलाई उहाँले setim काठ बाट बनेको, र उहाँले सुन तिनीहरूलाई घेरिएको.
37:16 र त्यो तालिका को विविध प्रयोगहरू लागि जहाजहरु गरे, साथै सानो कप रूपमा, र कटोरे, र नाप्ने कप, र censers, शुद्ध सुन बाट, जसमा libations प्रस्ताव हुनेछ.
37:17 उहाँले पनि lampstand गरे, उत्कृष्ट सुन बाट गठन. हाँगाहरू, कटोरे, र साना क्षेत्रहरू, साथै लिली, यसको पट्टी देखि दीं:
37:18 दुई पक्षले छ, एक छेउमा तीन शाखा, र अन्य मा तीन.
37:19 तीन कटोरे, एक नट को आकार, प्रत्येक शाखामा थिए, सानो क्षेत्रहरू र लिली संग, र तीन कटोरे, एक नट को स्वरूपमा मा, अन्य शाखा थिए, सँगै सानो क्षेत्रले लिली संग. को छ शाखा को कारीगरी, जो lampstand को चुच्चो देखि दीं, बराबर थियो.
37:20 अब सापट मा नै चार कटोरे थिए, एक नट को आकार, र साना प्रत्येक एक साथ सँगै क्षेत्रहरू, र लिली,
37:21 तीन ठाउँमा दुई शाखा अन्तर्गत र साना क्षेत्रहरू, जो सँगै गरे छ हाँगाहरू एक पट्टी देखि बढ्नु.
37:22 त्यसैले, दुवै सानो क्षेत्रहरू र शाखा नै कुरा थिए: शुद्ध सुन सबै हात-काम.
37:23 उहाँले पनि आफ्नो मैनबत्ती snuffers संग सात दीपक गरे, र जहाँ मोमबत्ती निभाउँछ हुनेछ को जहाजहरु, उत्कृष्ट सुन बाट.
37:24 यसको सबै जहाजहरू संग lampstand सुन एक प्रतिभा वजन.
37:25 उहाँले पनि setim काठ देखि धूप वेदी बनाए, चार पक्ष प्रत्येक एक cubit भइरहेको, र उचाइ मा, दुई. यसको कुनामा देखि सीङ दीं.
37:26 र उहाँले शुद्ध सुन यसलाई ढाकिएको, यसको झंझरी संग, साथै पक्ष र सीङ रूपमा.
37:27 र यसको लागि उहाँले सबै वरिपरि सुनको मुकुट गरे, र दुई सुन प्रत्येक छेउमा मुकुट अन्तर्गत छल्ले, त्यसैले बारहरू तिनीहरूलाई गरिन सक्छ, र वेदी लगे सकिएन.
37:28 अब बारहरू आफूलाई उहाँले पनि setim काठ बाट बनेको, र उहाँले सुनको तहहरू तिनीहरूलाई ढाकिएको.
37:29 उहाँले पनि पवित्रीकरण को लेप लागि तेल बनेको, र धूप, शुद्ध aromatics देखि, एक perfumer को कौशल संग.
38:1 उहाँले पनि setim काठ देखि आहुति वेदी बनाए: पाँच हात वर्ग, र तीन उचाइ मा,
38:2 को सीङ जो को कुना बाट दीं. र उहाँले पीतल तहहरू यसलाई कवर.
38:3 र यसको प्रयोगका लागि, उहाँले पीतल बाहिर विविध जहाजहरु तयार: केटल्स, forceps, सानो हुक, ठूलो हुक, र आगो लागि receptacles.
38:4 र उहाँले पीतल को आफ्नो झंझरी गरे, एक नेट को तरिका मा, र यो अन्तर्गत, वेदी बीचमा, यसको आधार,
38:5 पट्टी सेट गर्न नेट को चार समाप्त मा चार छल्ले कास्टिङ, यसलाई पूरा गर्न ताकि.
38:6 उहाँले पनि setim काठ बनेको यी बारहरू, र उहाँले पीतल तहहरू तिनीहरूलाई ढाकिएको.
38:7 र त्यो छल्ले मार्फत तिनीहरूलाई आकर्षित, जो वेदी को पक्ष बाट अनुमान. तर वेदी आफैमा ठोस थियो, तर खोक्रो, प्यानल र भित्र खाली बनाइएका.
38:8 उहाँले पनि पीतल को washtub गरे, यसको आधार बासस्थानलाई को ढोका मा हेरेको राखिएको गर्ने महिला को दर्पण देखि निर्मित.
38:9 उहाँले पनि Atrium गरे, दक्षिण छेउमा जो एक सय हात को ठीक मुड सनी को पर्दे थिए र
38:10 आफ्नो आधारमा संग पीतल को बीस स्तम्भहरू. स्तम्भहरू को टाउको र उत्कीर्णन काम सबै चाँदी थिए.
38:11 बराबरी, उत्तरी क्षेत्र मा, को पर्दे, स्तम्भहरू, र स्तम्भहरू को आधारमा र टाउको नै उपाय र काम र धातु को थिए.
38:12 यद्यपि साँच्चै, जो पश्चिम तिर बाहिर देखिन्छ कि पक्षमा, त्यहाँ पचास हात को पर्दे थिए, र पीतल को आफ्नो आधारमा संग दस स्तम्भहरू. र स्तम्भहरू को टाउको र उत्कीर्णन काम सबै चाँदी थिए.
38:13 यसबाहेक, पूर्वीय तिर, उहाँले पचास हात को पर्दे तयार:
38:14 जो को, त्यहाँ पन्ध्र हात थियो, आफ्नो आधारमा तीन स्तम्भहरू बीचमा, एक पक्ष माथि पकड,
38:15 र अन्य पक्षमा, (दुई बीचको उहाँले बासस्थान को प्रवेश गरे) त्यहाँ पन्ध्र हात को उत्तिकै पर्दे थिए, र तीन स्तम्भहरु, र आधारमा एउटै नम्बर.
38:16 को Atrium सबै पर्दे राम्रो मुड सनी देखि बुना थिए.
38:17 स्तम्भहरू को आधारमा पीतल को थिए, तर आफ्नो नक्काशी सबै आफ्नो टाउको चाँदीको थिए. अब त्यो पनि चाँदी संग Atrium आफूलाई स्तम्भहरू ओभरले.
38:18 र उहाँले गरेका, यसको प्रवेश मा, एक झुन्डिएका, कढाई संग गढा, जलकुंभी को, बैजनी, Vermillion, र ठीक मुड सनी, जो लम्बाइमा बीस हात आयोजित, अझै साँच्चै यो उचाइ पाँच हात थियो, को Atrium सबै पर्दे को उपाय संग रूपमा.
38:19 अब प्रवेश मा स्तम्भहरू चार थिए, पीतल को आधारमा संग, र आफ्नो टाउको र नक्काशी चाँदी थिए.
38:20 त्यसै गरी, बासस्थानलाई पालमा pegs र उहाँले पीतल बनेको सबै वरिपरि Atrium.
38:21 यी गवाहीलाई को बासस्थान को साधन हो, जो मोशाको निर्देशन अनुसार enumerated थिए, लेवीहरूले को समारोह संग, ईतामारसित को हात द्वारा, हारून पुजारी छोरा,
38:22 जो बजलेल, URI छोरा, यहूदा कुलका देखि hur छोरा, पूरा थियो, प्रभु मोशामार्फत आदेश गरेझैं.
38:23 उहाँले आफ्नो एसोसिएट द्वारा सामेल थियो, Oholiab, Ahisamach छोरा, दान कुलका देखि, जो आफूलाई पनि काठ को एक असाधारण कालिगढ थियो, र बुनाई को, साथै कढाई को रूपमा, जलकुंभी संग, बैजनी, Vermillion, र मलमलको.
38:24 बासस्थान काममा व्यय थियो सुन सबै, र दान प्रस्ताव थियो, बीस-नौ प्रतिभा र सात सय तीस शेकेल थियो, बासस्थान को उपाय अनुसार.
38:25 अब यसलाई बीस वर्ष र माथि को नम्बर विगतका थिए ती द्वारा चढाइने: छ सय र तीन हजार देखि, हतियार सहन गर्न सक्षम पाँच सय र पचास मानिसहरू.
38:26 थिए, कि परे, चाँदीको एक सय प्रतिभा, जो बाट बासस्थान जहाँ पर्दा झुन्डियो लागि र प्रवेश लागि आधारमा डाली थिए.
38:27 एक सय आधारमा एक सय प्रतिभा बनाइएका थिए, एकल प्रतिभा प्रत्येक आधार लागि गणना भइरहेको.
38:28 तर एक हजार सात सय र सत्तरी-पाँच देखि, उहाँले स्तम्भहरू को टाउको गरे, जो त्यो पनि चाँदी संग ढाकिएको.
38:29 त्यसै गरी, पीतल को, सत्तरी-दुई हजार प्रतिभा त्यहाँ चढाइने, र चार सय बढी शेकेल,
38:30 जो बाट गवाही को बासस्थान को प्रवेश मा आधारमा डाली थिए, र यसको झंझरी संग पीतल वेदी, र जो आफ्नो प्रयोगको pertain को जहाजहरु,
38:31 र Atrium को आधारमा, यसको प्रवेश मा रूपमा मंडल मा धेरै, र सबै दौर बासस्थान को र Atrium को पाल pegs.
39:1 साँच्चै, जलकुंभी र बैजनी देखि, Vermillion र मलमलको, उहाँले पवित्र ठाउँमा ministered गर्दा जो संग हारून ढाकिएको थियो vestments गरे, परमप्रभुले मोशालाई निर्देशन गरेझैं.
39:2 र त त्यो सुन एउटा ephod गरे, जलकुंभी, र बैजनी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, र ठीक मुड सनी,
39:3 कढाई संग गढा. र उहाँले सुनको पातलो स्ट्रिप्स कटौती र सूत्रहरू तिनीहरूलाई आकर्षित, तिनीहरूले पहिलो रंग को बुनाई मा मुड सकिएन भनेर.
39:4 र उहाँले दुई किनारा गरे, दुवै पक्ष माथि एक अर्को मिलेर,
39:5 र एउटै रंग देखि एक विस्तृत बेल्ट, जस्तै परमप्रभुले मोशालाई निर्देशन दिनुभएको थियो.
39:6 उहाँले पनि दुई गोमेद पत्थर तयार, सेट र सुनको संलग्न, र एक जौहरी को कौशल संग कुँदिएका, इस्राएलका छोराहरू नाम संग.
39:7 र त्यो ephod को पक्ष मा सेट, इस्राएलका छोराहरू एक सम्झनाको रूपमा, जस्तै परमप्रभुले मोशालाई निर्देशन दिनुभएको थियो.
39:8 उहाँले पनि छातीको पाता गरे, कढाई संग गढा, को ephod काम अनुसार, सुन बाट, जलकुंभी, बैजनी, र लाल रंग दुई पटक-रङ लगाइएको, र ठीक मुड सनी:
39:9 चार बराबर पक्ष संग, दुगुना, एक हातको हत्केलामा को उपाय को.
39:10 र त्यो मा रत्न चार पङ्क्ति सेट. पहिलो पंक्ति मा एक sardius पत्थर थियो, एक पुखराज, एक Emerald;
39:11 दोस्रो एक गारनेट थियो, एक नीलम, र एक बिल्लौर;
39:12 तेस्रो एक जिक्रोन थियो, एक agate, र एक नीलम;
39:13 चौथो एक chrysolite थियो, एक गोमेद, र एक Beryl, आफ्नो पङ्क्तिहरू घेरिएको र सुनको संलग्न.
39:14 र यी बाह्र पत्थर इस्राएलका बाह्र कुल नाम संग कुँदिएका थिए, एकल नामको प्रत्येक एक.
39:15 तिनीहरूले पनि गरे, छातीको पाता मा, सानो चेन एक अर्को लिङ्क, शुद्ध सुन बाट,
39:16 र दुई हुक, र सुन छल्ले को नै नम्बर. यसबाहेक, तिनीहरूले छातीको पाता दुवै पक्षलाई मा छल्ले सेट,
39:17 जो दुई सुनको चेन रचनाहरू थियो, जो तिनीहरूले ephod को कुना बाट अनुमान कि हुक संग जोडिएको.
39:18 तिनीहरूले आपसमा भेट भनेर अगाडि र पछाडि दुवै यी थिए, र त ephod र छातीको पाता सँगै बुना थिए,
39:19 विस्तृत बेल्ट गर्न fastened भइरहेको र कडा छल्ले संग मिलेर, जो एक जलकुंभी ब्यान्ड सामेल थियो, नत्र तिनीहरूले छाडा मिलाउ गर्नुपर्छ र एक अर्को टाढा सार्न, परमप्रभुले मोशालाई निर्देशन गरेझैं.
39:20 तिनीहरूले पनि जलकुंभी देखि सम्पूर्ण ephod को अंगरखा गरे,
39:21 बीचमा मा माथिल्लो भाग मा टाउको संग, र टाउको वरिपरि सबै बुना किनारा.
39:22 त्यसपछि, तल खुट्टा मा, तिनीहरूले पनि जलकुंभी देखि अनार गरे, बैजनी, Vermillion, र ठीक मुड सनी,
39:23 र शुद्ध सुन बाट सानो Bells, जो तिनीहरू सबै वरिपरि अंगरखा को धेरै तल मा अनार बीच सेट.
39:24 त्यसैले त, नजिक उच्च पुजारी, सुन घण्टी र दारिम संग सजी, उहाँले आफ्नो सेवाको प्रदर्शन गर्दा, जस्तै परमप्रभुले मोशालाई निर्देशन दिनुभएको थियो.
39:25 तिनीहरूले पनि काम बुना संग मलमलको tunics गरे, हारून र तिनका छोराहरूलाई लागि,
39:26 र मलमलको को आफ्नो सानो crowns संग headdresses,
39:27 र पनि मलमलको को undergarments सनी.
39:28 साँच्चै, तिनीहरूले पनि राम्रो मुड सनी को एक विस्तृत ब्यान्ड गरे, जलकुंभी, बैजनी, साथै Vermillion रूपमा, दुई पटक-रंगा, दक्ष कढाई संग, जस्तै परमप्रभुले मोशालाई निर्देशन दिनुभएको थियो.
39:29 तिनीहरूले पनि शुद्ध सुन देखि पवित्र उपासनालाई को प्लेट गरे, र तिनीहरूले यसलाई लेखे, एक जौहरी को कौशल संग: "प्रभुको पवित्र।"
39:30 र तिनीहरूले एउटा जलकुंभी ब्यान्ड संग headdress यसलाई fastened, जस्तै परमप्रभुले मोशालाई निर्देशन दिनुभएको थियो.
39:31 र त बासस्थान को र गवाही को कवर को सबै काम पूरा भएको थियो. र इस्राएलका छोराहरू परमप्रभुले मोशालाई निर्देशन दिनुभएको थियो कि सबै गरे.
39:32 र तिनीहरूले बासस्थानको प्रस्ताव, र कवर, र लेख को सबै: छल्ले, को प्यानल, पट्टी, स्तम्भहरू र आधारमा,
39:33 मेढे को खाल को आवरण, रंगा रातो, र बैंगनी खाल को अन्य आवरण,
39:34 को पर्दा, जहाज, पट्टी, यस प्रायश्चितको,
39:35 तालिका, यसको नली र उपस्थिति को रोटी,
39:36 को lampstand, यस दीपक, र तेल संग आफ्नो बर्तन,
39:37 सुनको वेदी, र मलम, र aromatics को धूप,
39:38 र बासस्थानको को प्रवेश मा पाल,
39:39 पीतल वेदी, को झंझरी, पट्टी, र यसको जहाजहरू सबै, यसको आधार संग washtub, को Atrium को पर्दे, आफ्नो आधारमा संग र स्तम्भहरू,
39:40 को Atrium को प्रवेश मा झुन्डिएका, र आफ्नो सानो तार र pegs. केही बासस्थानलाई को प्रचारको लागि र करारको कवर लागि बनाइने आज्ञा दिइएको थियो कि लेख को अभाव थियो.
39:41 त्यसै गरी, को vestments, जो पूजाहारीहरू, अर्थात्, हारून र तिनका छोराहरूलाई, बासस्थान प्रयोगको प्रयोग,
39:42 प्रस्ताव इस्राएलका छोराहरू, जस्तै प्रभु निर्देशन दिनुभएको थियो.
39:43 यो पछी, मोशा सबै पूरा भएको थियो देखे, उहाँले तिनीहरूलाई आशिष्.
40:1 र परमप्रभुले मोशालाई कुरा, यसो:
40:2 "पहिलो महिना मा, महिनाको पहिलो दिन, तपाईं गवाही को बासस्थान उठाउनु पर्छ,
40:3 र तपाईं यसलाई मा जहाज राख्न पर्छ, र तपाईंले यसलाई अघि पर्दा जारी गर्नेछ.
40:4 र तालिकामा ल्याए भएको, तपाईं सत्यनिष्ठा यसलाई मा आज्ञा दिइएको थियो जो कुरा राख्न पर्छ. को lampstand यसको दीपक संग खडा गर्नेछु,
40:5 र सुनको वेदी, जसमा धूप जलाए छ, गवाहीलाई को जहाज खडा गर्नेछु. तपाईं बासस्थान को प्रवेश मा पाल राख्न पर्छ,
40:6 र यो अघि, पूर्ण आहुति वेदी.
40:7 को washtub वेदी र बासस्थानको बीच खडा गर्नेछु, र तपाईं पानी संग भर्न पर्छ.
40:8 र तपाईं Atrium र पर्दे यसको प्रवेश encompass पर्छ.
40:9 र, जोश को तेल अँगालेका भएको, तपाईं आफ्नो लेख साथ बासस्थानको अभिषेक पर्छ, तिनीहरूले पवित्र हुन सक्छ कि त.
40:10 पूर्ण आहुति वेदी र यसका सबै जहाजहरू,
40:11 यसको आधार संग washtub, र सबै कुरा, तपाईं जोश को तेल consecrate पर्छ, तिनीहरूले holies को पवित्र हुन सक्छ भनेर.
40:12 र तपाईं हारून र तिनका छोराहरूलाई गवाहीलाई को बासस्थान को प्रवेश गर्न अगाडि ल्याउन पर्छ, र, पानी तिनीहरूलाई धोए भएको,
40:13 तपाईं पवित्र vestments तिनीहरूलाई लुगा लगाउनु पर्छ, ताकि तिनीहरूले मलाई मन्त्री सक्छन्, र यति आफ्नो जोश अनन्त पुजारीको पूरा हुन सक्छ। "
40:14 र मोशाले प्रभु निर्देशन दिनुभएको थियो कि सबै गरे.
40:15 त्यसैले, दोस्रो वर्ष पहिलो महिनामा, महिनाको पहिलो दिन, बासस्थानलाई ठाउँमा राख्नु भएको थियो.
40:16 मोशाले यो खडा, र उहाँले साथै प्यानल को आधारमा र बारहरू अवस्थित, र त्यो स्तम्भ सेट अप,
40:17 र त्यो बासस्थान भन्दा छत बाहिर फैलयो, यो माथि कभर imposing, जस्तै प्रभु आदेश थियो.
40:18 र तिनले जहाज मा गवाही राखिएको, मुनि पट्टी लागू, र Oracle माथि.
40:19 र त्यो बासस्थान मा जहाज ल्याएको थियो जब, उहाँले यसलाई अघि पर्दा आकर्षित, प्रभुको आज्ञा पूरा गर्न.
40:20 र उहाँले गवाही को बासस्थान मा तालिका राखिएको, उत्तरी छेउमा, को पर्दा बाहिर,
40:21 यसलाई अघि उपस्थितिको रोटी व्यवस्था, जस्तै परमप्रभुले मोशालाई निर्देशन दिनुभएको थियो.
40:22 र उहाँले गवाही को बासस्थान मा lampstand राखिएको, तालिका टाढा, दक्षिण पक्षमा,
40:23 क्रममा दीपक सेट, प्रभुको precept अनुसार.
40:24 उहाँले पनि गवाही को छत अन्तर्गत सुनको वेदी अवस्थित, को पर्दा विपरीत,
40:25 र उहाँले aromatics को धूप यसलाई मा heaped, जस्तै परमप्रभुले मोशालाई आज्ञा दिनुभएको थियो.
40:26 र उहाँले गवाही को बासस्थान को प्रवेश मा पाल अवस्थित,
40:27 र गवाही को vestibule मा आहुति वेदी, को आहुति र यो मा बलिदान भेटी, जस्तै प्रभु आदेश थियो.
40:28 त्यसै गरी, उहाँले गवाहीलाई को बासस्थान र वेदी बीच washtub तैनात, पानी संग भरने.
40:29 मोशा र हारून र, तिनका छोराहरूलाई साथ, आफ्नो हात र खुट्टा धोए,
40:30 जब तिनीहरूले करारको कवर प्रविष्ट हुनेछ, र तिनीहरूले वेदी गर्न नजिक जब, जस्तै परमप्रभुले मोशालाई निर्देशन दिनुभएको थियो.
40:31 र त्यो बासस्थान र वेदी वरिपरि Atrium खडा, यसको प्रवेश मा झुन्डिएका चित्रकला. पछि यी सबै कुराहरू सिद्ध थिए,
40:32 बादल गवाहीलाई को बासस्थान ढाकिएको, र प्रभुको महिमा यसलाई भरिएको.
40:33 न त मोशाले करारको कवर प्रविष्ट सक्छ: बादल सबै कुराहरू कवर थियो, र प्रभुको बडाई चमकता थियो. बादल लागि सबै ढाकिएको थियो.
40:34 जब बादल बासस्थानलाई देखि प्रस्थान, इस्राएलका छोराहरू तिनीहरूको कम्पनीहरु द्वारा बाहिर सेट.
40:35 तर यो भन्दा बढी झुन्डिएको यो रहेका यदि, तिनीहरूले नै ठाउँमा बसे.
40:36 पक्कै पनि, प्रभुको क्लाउड दिन द्वारा बासस्थान भन्दा राख्नु, र रात गरेर आगो, सबै आफ्नो घरबार स्थानहरू भर इस्राएलका सबै मानिसहरूले देखेका भइरहेको.